ဦးဇင်းလေး: February 2009
Posted by uzinlay at 11:15 AM0comments
Posted by uzinlay at 10:54 AM0comments
• Buddhism : Lord Buddha based His ethics on the 'golden rule', which was for the welfare of the human beings.
• Christianity : Jesus Christ also preached His ethics as per the 'golden rule', which was for the welfare of His people and easily approachable.
• Buddhism : Buddha, the founder of Buddhism rejected extreme asceticism and gave an emphasis on self-liberation through knowledge.
• Christianity : Jesus Christ also rejected extreme asceticism.
• Buddhism : The worship in Buddhism includes monasticism, ringing of bells, bowing, use of incense and rosary, erection of towers or stupas, prayers and meditation.
• Christianity : Similarly, the Christians also follow almost same form of worship - Monasticism, Confession, the cult of images, ringing of bells, use of rosary and incense and the erection of towers.
• Buddhism : The Buddhist doctrine gives an emphasis on love for the entire mankind and every other beings as well, no matter whether the being isafriend or an enemy!
• Christianity : The Christian doctrine is also based on the principle of 'Love thy neighbour like unto yourself', which means that love should be showered upon not only your friends, but the entire beings.
• Buddhism The original Buddhist doctrine does not entail any Godly figures. However, the later Buddhist sects introduced some godly figures.
• Christianity : There is only one God, Jesus, who is loving and approachable.
• Buddhism : According to the Buddhist concept, one has to work for one's own salvation, and therefore, cannot blame or depend on others for salvation.
• Christianity : Salvation is not based on one's work, but instead, isafree gift to all those who would accept Jesus Christ as their savior.
• Buddhism : According to the Buddhist doctrine, there is an eternal life, which depends on the karma of one's present life.
• Christianity : There is an eternal life in Heaven, which has nothing to do with karma and comes asafree gift of salvation.
• Buddhism : The concept of Buddhism does not mentionaGod who showers love and takes care of His people.
• Christianity : Bible, the holy book of the Christians, mentions the God's love for His folks or devotees.
• Buddhism : Buddhism neither deals with the beginning noradefinite end of the world.
• Christianity : According to the Christian doctrine, the God has created the world from nothing, and rules it according to His own definite plan.
• Buddhism : The Buddhist canons includes only those insights which the Buddha won by His own strength and will after comprehending the nature of truth.
• Christianity : The Bible, holy text fort the Christians, is regarded as the 'Words of God' and includes those realities, which are unknown to the mankind
Posted by ဦးဇင်းလေး at 8:27 AM0comments
သာသနာ့သမိုင်းမှာအလွန်ထင်ရှားခဲ့တဲ့ သီဟိုဠ်ခေတ်စံတော်ဝင် အရိယာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်အများအပြား သီတင်း သုံးနေထိုင်ခဲ့ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ဘက် အိန္ဒိယပင်လယ်အတွင်းမှာ တည်ရှိတဲ့ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံသို့ ၂၀၀၇ ခု နှစ်ရဲ့ နောက်ဆုံးရက်တရက်မှာ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ ယခင်က သီဟိုဠ်ကျွန်းလုိ့ခေါ်ဆိုကြပြီး ပါဠိစာပေတွေ ထဲမှာတော့ သီဟဠ၊ တမ္ဗပဏ္ဏိ၊ လင်္ကာဒီပ ဆိုပြီး ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြတဲ့ ဒီနိုင်ငံကိုရောက်တော့ မထင်မှတ်တဲ့ အတွေ့ အကြုံလေးတချို့က ကိုယ့်အတွက် မှတ်တမ်းလေးတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သေချာတာတစ်ခုက အဲဒါဟာ ဘုရားဖူး မှတ်တမ်း မဟုတ်သလို၊ ခရီးသွားလမ်းညွှန် မှတ်တမ်းတစောင်လည်း မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ ပြောနိုင်တာကတော့ ကိုယ့်အတွေ့အကြုံလေးတချို့နဲ့ ခံစားချက်လေးတွေထည့်ထားတဲ့ မှတ်တမ်းလေးတခုပါပဲ။
ဒီနိုင်ငံကိုရောက်တော့ ကိုယ့်အတွက် ပထမဦးဆုံး စိတ်ဝင်စားစရာ အလွန်ကောင်းခဲ့တဲ့ အကြောင်းအရာက ပန်းကလေးတွေနဲ့တူတဲ့ ကလေးလေးတွေနဲ့ ပတ်သက်နေခဲ့ပါတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ်နေတဲ့ကျောင်းက တရားရိပ်သာ(Meditation Centre)တခုပါ။ ဒါကြောင့်လည်း တရားလာအားထုတ်တဲ့ ယောဂီတွေကိုသာ အ ထူးသဖြင့် တွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်ရောက်ပြီး ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ ဆွမ်းစားကျောင်းအပြင်ဘက်က ခုံတန်း တွေပေါ်မှာ အဖြူရောင်တူညီဝတ်စုံတွေ ၀တ်ထားတဲ့ ကလေးလေးတွေကို မိခင်ဖြစ်သူတွေနဲ့အတူ စပြီးတွေ့ခဲ့ ရတယ်။ သူတို့လေးတွေကလည်း ဒီနိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့ကိုယ့်ကို စူးစမ်းနေတဲ့မျက်ဝန်းနဲ့ အမြဲတမ်းလိုက်ကြည့် လေ့ရှိကြတယ်။ ဒါတွေက ကိုယ့်အတွက် သိပ်မဆန်းတော့ပေမယ့် တွေ့လိုက်တိုင်းလည်း ဒီလိုအချိန် ဒီအဖြူ ရောင်ဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ ကလေးလေးတွေကို ဒီလိုနေရာမျိုးမှာ တွေ့တွေ့နေရတာကတော့ နည်းနည်းဆန်းနေ သလိုပါပဲ။ ဒီကလေးတွေ ဒီကျောင်းကို ဘာလာလုပ်တာလဲပေါ့လို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် တွေးနေမိတယ်။
ပြီးတော့ သူတို့က နေ့တိုင်းလာတာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို တွေ့လိုက်ရင်လည်း ကိုယ်ဆွမ်းစား ကျောင်းက ပြန်လာတဲ့အချိန် ၇း၃၀ လောက်မှာ အဲဒါက ပုံမှန်အချိန်ပဲ။ ဒီလိုနဲ့ … တရက်မှာတော့ အပြုံးချိုချို လေးနဲ့ မိခင်ဖြစ်သူအမျိုးသမီးက ကိုယ့်ကိုလာပြီးမိတ်ဆက်ပါတယ်။ သူနဲ့ကပ်လျက်မှာတော့ ကိုယ့်ကိုစူးစမ်းနေ တဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ ပြုံးပြလေ့ရှိတဲ့ ကလေးလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်း တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ အဲဒီနောက် မိခင် ဖြစ်သူက သူ့သားနဲ့ သမီးအကြောင်းကို ပြောပြရင်း ကလေးတွေနဲ့ ကိုယ့်ကို မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။ ရှစ်နှစ်အ ရွယ်သားငယ်နဲ့ ဆယ်နှစ်အရွယ်သမီးလေးကလည်း သူတို့ရဲ့မိခင်လိုပဲ ယဉ်ကျေးသိမ့်မွေ့ကြပါတယ်။ အင်္ဂလိပ် စကားကိုလည်း ပြောနိုင်ကြပါတယ်။ ကလေးတွေကို Sunday School လိုက်ပို့ပေးတာဖြစ်ကြောင်း အဲဒီအမျိုး သမီးက ပြောပြတော့မှပဲ သူတို့ဒီကိုလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကို အပြည့်အစုံ သိလိုက်ရပါတယ်။ တကယ်တော့ သူတို့အဓိကလာတဲ့နေရာက ကိုယ်နေတဲ့ တရားရိပ်သာကို မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီကျောင်းဝင်းရဲ့ကပ်လျက် ဘုန်း တော်ကြီးကျောင်းက Sunday School ကိုလာတာဖြစ်ပြီး ဟိုဘက်မှာ လူအရမ်းများနေလို့ ကျောင်းချိန်မစခင် ဒီမှာခဏ၀င်ပြီး ကလေးတွေကို မနက်စာမုန့်ကျွေးရင်း လာဝင်နားတာပါလို့ရှင်းပြတော့မှ ကိုယ်လည်း သဘော ပေါက်တော့တယ်။
ဟုတ်ပါတယ် … ကိုယ်နေတဲ့ကျောင်းဝင်းရဲ့ ဘယ်ဘက်ကပ်လျက်မှာ ဒီနိုင်ငံရဲ့သမ္မတကိုးကွယ်တဲ့ ဘုန်းတော် ကြီးကျောင်းရှိပါတယ်။ အဲဒီကျောင်းကို လေးငါးခေါက်လောက်ရောက်ဖူးပြီး ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်နဲ့လည်း စကားပြောဖူးပါတယ်။ Buddhist Channel ဆိုပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အ ကြောင်းအရာများကို ရိုက်ကူးထုတ် လွှင့်တဲ့ TV အစီအစဉ်တွေလည်း အဲဒီကျောင်းထဲမှာ ရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာ အမေးအဖြေကဏ္ဍတွေကို လည်း ရိုက်ကူးတဲ့ အသံလွှင့် Studio-ခန်းထဲကို ကိုယ်တို့ကို လိုက်ပြပေးဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီကျောင်းမှာ ကလေး ၅၀၀ ကျော်လောက်ကို သင်ကြားပေးနေတဲ့ (သူတို့ဘာသာစကားနဲ့ ဆိုရင်) Daham Pasala လို့ခေါ် တဲ့ ဓမ္မကျောင်း သို့မဟုတ် Sunday School အစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုတာကို ကိုယ်တကယ်မသိခဲ့ပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာ သာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကဖွင့်တဲ့ Sunday School ဆိုတာကိုလည်း အဲဒီအမျိုးသမီးနဲ့ စကားပြောတော့မှပဲ ပထမဦးဆုံး ကြားဖူးခဲ့ရတာပါ။ အလွန်လည်း စိတ်ဝင်းစားခဲ့ပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ကိုယ်လည်း ဒီအကြောင်းနဲ့ ပတ် သက်ပြီး လေ့လာကြည့်မိပါတယ်။ ဒီတော့မှ Sunday School ဆိုတဲ့စနစ်ကို တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ နိုင်ငံ တ၀ှမ်းလုံးက ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းသားကျောင်းသူ အားလုံးနီးပါး တက်ရောက်သင်ကြားကြတယ်ဆိုတာကို အံ့ သြစွာနဲ့ သိခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။
အမှန်တော့ ဒီသင်ကြားရေးစနစ်ကို စတင်ခဲ့တာက ၁၈၉၅-ခုနှစ်ကတည်းကပါ။ သီရိလင်္ကာနိုင်ငံဟာ ၁၅၀၅- ခုနှစ်ကတည်းက ပေါ်တူဂီနယ်ချဲ့အစိုးရလက်အောက်ကို ရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး၊ ၁၆၃၈ မှာတော့ ဒတ်ခ်ျနယ် ချဲ့အစိုးရကလည်း ၀င်ရောက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ နောက်ပိုင်း ၁၈၇၆ ခုနှစ်မှ ၁၉၄၈ ခုနှစ်အထိတော့ ဗြိ တိသျှအစိုးရ လက်အောက်ကို ရောက်ရှိခဲ့ပြန်ပါတယ်။ နယ်ချဲ့အစိုးရတွေရဲ့ လက်အောက် ကျရောက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ဘာသာရေးနဲ့ပညာရေးနယ်ပယ်မှာ ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကြီးစိုးလာခဲ့ပါတယ်။ နယ်ချဲ့အစိုးရလက် အောက်မှာ မှေးမှိန်လာခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာစာပေ ယဉ်ကျေးမှုတို့ကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာ သံဃာတော်များရဲ့ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအချိန်တုန်းက အထင်ရှားဆုံးလည်းဖြစ် ဓမ္မကျောင်း သို့မဟုတ် Sunday School ကို စတင်တည်ထောင်ခဲ့ သူလည်းဖြစ်တဲ့ ဆရာတော်ကတော့ Ven. Migettuwatte Gunananda ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာတော်ဟာ အခက် အခဲမျိုးစုံ၊ အဖိနှိပ်မျိုးစုံကို ကျော်လွှားပြီး ၁၈၉၅ ခုနှစ်မှာ Galle မြို့၊ ၀ိဇယနန္ဒာကျောင်း (Vijayananda Temple) တွင် ဓမ္မကျောင်း သို့မဟုတ် Sunday School ကို စတင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီသင်ကြားရေးစနစ် ကို တနိုင်ငံလုံးရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ တညီတညွတ်တည်း ပူးပေါင်းပါဝင်လာအောင် ဆရာတော်သံဃာတော် များနှင့်အတူ ဒကာ၊ ဒကာမများကလည်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီထဲက ထင်ရှားတဲ့ ဦးဆောင် လှုပ်ရှားသူ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကတော့ အမေရိကန်နိုင်ငံသား အတွေးအခေါ်ပညာရှင် Colonel Steel Henry Olcott ဖြစ်ပါတယ်။
Colonel Olcott ဟာ ၁၈၈၀ ခုနှစ်မှာ ဒီနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာပြီး မကြာခင်မှာပဲ ၀ိဇယနန္ဒာကျောင်း ဆရာတော် Ven. Migettuwatte Gunananda ကို အကြောင်းပြုကာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင် ယုံကြည်လာရာမှ ဗုဒ္ဓဘာ သာဝင်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဓမ္မကောလိပ်တွေ၊ ဓမ္မကျောင်းတွေ၊ ဘာသာရေး ဆိုင်ရာသင်တန်းတွေကို နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းလုံးမှာ အများအပြားပေါ်ပေါက်လာအောင် ဦးဆောင်လှုပ်ရှားခဲ့သူအဖြစ် လည်း ဒီနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာ ထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့မှတ်စု အတွဲ (၃) စာမျက်နှာ ၁၄၃ မှာ ရေးသားခဲ့သော “ငါ့ မှာ အရေးကြီးသော အကြံအစည်တခုရှိသည်။ ဤသည်ကား ဗုဒ္ဓဘာသာအတွက် အထူးသဖြင့် က လေးများအတွက် ဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးကို စတင်ရန်” ဟူသော စာသားဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအကြား တွင် ထင်ရှားခဲ့တယ်။
၁၈၉၅ ခုနှစ်က Galle မြို့ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတကျောင်းကနေ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးစနစ်နဲ့ စတင်ခဲ့တဲ့ ဓမ္မ ကျောင်းတွေဟာ ဆယ်စုတစ်ခုအတွင်းမှာပဲ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာအထိ ပျံ့နှံ့ သွားခဲ့ပါတယ်။ နယ်ချဲ့အစိုး ရလက်အောက်ကျရောက်နေစဉ် လွတ်လပ်ရေးမရခင် အစောပိုင်းနှစ်တွေကတည်းက ဓမ္မကျောင်းလို့ ခေါ်ကြ တဲ့ Sunday School စနစ်ဟာ ဒီနိုင်ငံမှာ ခိုင်ခိုင်မာမာ အမြစ်တွယ်နေခဲ့ပါပြီ။ ဘာသာခြား တိုင်းတပါးသားအစိုး ရလက်အောက်အတွင်း အဖိနှိပ်အချုပ်ခြယ်ကြားထဲမှာ Private ကျောင်းအသွင်နဲ့ တနိုင်ငံလုံးမှာ အမြစ်တွယ် သွားအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့ ကိစ္စရပ်တခုမဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကိုယ်တို့အထူးသတိထားရမယ့် အချက် ၂-ချက် ရှိပါတယ်။ ပထမအချက်က ဒီနိုင်ငံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့အစိုးရလက်အောက်ကို နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ကြာအောင် ကျရောက်ခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာတောင်မှ ဗုဒ္ဓဘာ သာပညာရေးစနစ်တခုကို ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ဦးမော့လာနိုင်အောင် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိခဲ့ကြတယ်။ တချိန်တည်းမှာပဲ ကိုယ်တို့နိုင်ငံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကို မကျရောက်ခင်ကတော့ ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးကျောင်းဟာ နိုင်ငံရဲ့အဓိကပညာရေး အခန်းကဏ္ဍတရပ်အနေနဲ့ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့တာပါ။ ဒါပေမယ့် ကို လိုနီခေတ်လည်းရောက်ရော ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးစနစ်လည်း အညွန့်ချိုးခံလိုက်ရတာ ပြန်ပြီးနလံမထူ နိုင်လောက်အောင် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ (ဒီနိုင်ငံနဲ့ ကိုယ်တို့နိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးရတာ တနှစ်ထဲဖြစ်သလို၊ အဲဒီအချိန် တုန်းက အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ကိုလီုနီအစိုးရဟာလည်း တခုတည်းရယ်ပါ။)
နောက်ဒုတိယအချက်ကတော့ လူမျိုးခြား Colonel Olcott ပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ သူရဲ့ဘိုးဘွားအစဉ်အဆက်က ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ ဘာသာမဟုတ်သလို၊ သူရဲ့နိုင်ငံတော်ဘာသာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူက ဗုဒ္ဓဘာသာ အတွက် ဘယ်လောက်တောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့သလဲဆိုတာကို သူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ ဓမ္မကောလိပ်တွေ၊ ဓမ္မကျောင်းတွေ၊ သူ့ကိုအမှတ်ရကြလို့ ဂုဏ်ပြုကာထုလုပ်ထားတဲ့ ကိုလံဘိုမြို့လယ်ရှိ သူ့ရဲ့ရုပ်တုကြီးက သက် သေပြနေဆဲပါ။ သူသေဆုံးသွားပေမယ့် သူပျိုးထောင်ပေးခဲ့တဲ့ အရာတွေကတော့ ရှင်သန်ကြီးထွားနေဆဲပါ။ ဒီ လိုဆိုရင် ကိုယ်တို့ကျတော့ရော … ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ကိုယ်တို့ဘိုးဘွားအစဉ်အဆက် ကိုးကွယ်ခဲ့တဲ့ဘာသာ၊ ပြီး တော့ “အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကို ကာကွယ်ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ကြပါ” ဆိုတဲ့ သြ၀ါဒကို သိတတ်နား လည်စအရွယ်ကတည်းက ကြားနေခဲ့ရတာ ယနေ့အထိ အကြိမ်ပေါင်းမနည်းတော့ပါဘူး။ ကြားခဲ့ရတဲ့ အချိန် တိုင်းမှာလည်း ကိုယ်တို့ကတော့ ခေါင်းလေးတညိတ်ညိတ်နဲ့ပေါ့။ ခေါင်းညိတ်ရုံကလွဲပြီး ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ခဲ့သေး တဲ့ ကိုယ့်အဖြစ်ကို တကယ်လို့ Colonel Olcott သာတွေ့ရင် ကိုယ့်ကို ဟားတိုက်မှာ သေချာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သူက သူ့နိုင်ငံသားမဟုတ်တဲ့ ကလေးတွေအတွက် ဒီလောက်တောင် စေတနာထား လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆို ရင် ကိုယ်တို့ကတော့ရော ကိုယ်တို့နိုင်ငံက ကလေးတွေအတွက် ဘာတွေလုပ်ပေးခဲ့ကြပြီးပြီလဲ..။ အင်း ... ဒီအ ချက်ကတော့ ကိုယ့်အတွက် အလေးအနက်ထားစရာ အချက်တခုပါပဲ။
ဒီလိုနဲ့ အခက်အခဲတွေကြားက ရုန်းထွက်ဦးမော့ခဲ့တဲ့ ဓမ္မကျောင်း သို့မဟုတ် Sunday School စနစ်ဟာ လွတ် လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ သမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့ သမ္မတ-Bandranaike ကြောင့် ပိုပြီးအရောင်တောက် ပခဲ့ပါတယ်။ သူ သမ္မတဖြစ်တဲ့ ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် ဒီ Sunday School လို့ခေါ်တဲ့ ဓမ္မကျောင်းတွေကို သာသနာ ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကဖွင့်တဲ့ အစိုးရကျောင်းတွေအဖြစ် တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုလိုက်ပါတယ်။ အ တန်းတိုင်းအတွက် သင်ရိုးပြဌာန်းစာအုပ်တွေကိုလည်း သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပြီး တနိုင် ငံလုံးရှိဓမ္မကျောင်းမှ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအားလုံးကို အခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးပါတယ်။ စာမေးပွဲတွေကိုလည်း သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနက ကြီးမှူးကျင်းပပေးတာဖြစ်ပြီး စာမေးပွဲနဲ့ပတ်သတ်တာမှန်သမျှကိုလည်း တာဝန်ယူ ပြီး စီစဉ်ပေးပါတယ်။ ပြီးတော့ ဓမ္မကျောင်း သို့မဟုတ် Sunday School ၀တ်စုံဆိုပြီးတော့ သီးသန့်သတ်မှတ် ပေးခဲ့သေးတယ်။ ယောင်္ကျားလေးတွေအတွက်က ဒီနိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားဝတ်စုံနဲ့ဆင်တူတဲ့ လည်ကတုံး ရှပ်အင်္ကျီ လက်ရှည်အဖြူနဲ့ လုံချည်အဖြူဖြစ်ပြီး မိန်းကလေးတွေ အတွက်ကတော့ ဒီနိုင်ငံရဲ့ ရိုးရာဝတ်စုံဖြစ်တဲ့ Kandy ဆာရီနဲ့ အနည်းငယ်ဆင်တဲ့ (သူတို့အခေါ်) Half ဆာရီဆိုတဲ့ အထက်အောက် အဖြူရောင်ဝတ်စုံလေးဖြစ်ပါ တယ်။ ဒါ့အပြင် အစိုးရက အထက်တန်းကျောင်း အောင်လက်မှတ်များလိုပဲ ဓမ္မကျောင်းအောင်လက်မှတ်ကို လည်း ချီးမြှင့်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီလိုစနစ်တကျနဲ့ သပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြစ်လာတဲ့ Sunday School စနစ်ဟာ ယခု သမ္မတ Mahinda Rajapaksha လက်ထက်မှာတော့ ပံ့ပိုးမှုတွေ အားပေးမှုတွေ ပိုပြီး အားကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ သမ္မတကိုယ်တိုင်ကလည်း က လေးတွေကို Sunday School တက်ဖို့ သူ့မိန့်ခွန်းတွေထဲကနေရော အပြင်မှာဆုံတွေ့တဲ့အခါမှာရော အကြိမ် ကြိမ်တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ သာမန်အောင်လက်မှတ် အဆင့်သာရှိတဲ့ ဓမ္မကျောင်းအောင်လက်မှတ်ကိုလည်း အ ဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ အလုပ်ခန့်အပ်မှုမှာ ဒီ Sunday School အောင်လက် မှတ်ဟာ အရေးပါတဲ့ ကန့်သတ်ချက်တခုအနေနဲ့ လိုအပ်နေပြီး အဲဒါကိုလည်း အစိုးရက တရားဝင်ထုတ်ပြန် ထားကြောင်း ကျောင်းသားမိဘတွေကပြောပြကြပါတယ်။ (ဒီနေရာမှာ.. တခြားဘာသာခြားတွေအတွက်ဆိုရင် တော့ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရဲ့ အောင်လက်မှတ်ကို ဆိုလိုပါတယ်လို့ ရှင်းပြကြပါတယ်။) “ အခုဆိုရင် Sunday School အောင်လက်မှတ်ဟာ တက္ကသိုလ်ဆက်တက်မယ့် ဗုဒ္ဓဘာသာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက် အရေးပါတဲ့ လက်မှတ်တခု ဖြစ်နေပါပြီ” လို့ အဲဒီမှာ စာသင်ပေးနေတဲ့ သီလရှင်ကြီးတပါးက ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ ပြော တုန်းက ကိုယ့်မှာတော့ သူနဲ့အတူရောပြီး (သူတို့အတွက်) ၀မ်းသာဂုဏ်ယူနေမိတယ်။
ဒီနိုင်ငံကိုရောက်ပြီးနောက်ပိုင်း အပြင်သွားစရာကိစ္စပေါ်ရင် အမြဲလိုလို လိုက်ပို့ပေးတတ်တဲ့ ဒကာမကြီးက တ ချို့သော သူ့ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ တခြားမြို့တွေက ဘုရားတွေဆီ လိုက်ပို့ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်တို့ ခရီးထွက် ချိန် တနင်္ဂနွေမနက်စောစောတွေမှာဆိုရင် ဖြတ်ကျော်သွားနေတဲ့ မြို့တွေ ရွာတွေရဲ့ လမ်းဘေးတလျှောက် မှာတော့ ဓမ္မကျောင်းက ကလေးများရဲ့ဝတ်စုံအဖြူရောင်တွေ လွှမ်းနေတော့တာပေါ့ ..။ အဖြူရောင်တူညီဝတ် စုံလေးတွေနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ ခြေလှမ်းတွေက လန်းဆန်းတက်ကြွစွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဆီ ဦးတည်လို့ ...၊ သူတို့လေးတွေရဲ့မျက်နှာမှာတော့ အပြုံးပန်းတွေဝေလို့ ...၊ သူတို့အာရုံထဲမှာတော့ သူတို့သွားနေတဲ့ ဘုန်း တော်ကြီးကျောင်းဟာ သူတို့အတွက် စိတ်ဓာတ်နဲ့ အကျင့်စာရိတ္တတွေ အရောင်မြှင့်တင်ပေးတဲ့နေရာ စံပြ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြောင်းကို လေ့လာခွင့်ရမယ့်နေရာဆိုပြီး ယုံကြည်မှုတွေပြည့်လို့ ...။ ကားပေါ်ကနေ လှမ်းမြင် နေရတဲ့ ဒီမြင်ကွင်းတွေကတော့ ကိုယ့်အတွက် ကျက်သရေရှိလွန်းလှပါတယ်။ မြို့တွေ၊ ရွာတွေဖြတ်သွားတိုင်း အဲဒီလိုမြင်ကွင်းမျိုးကို ကိုယ်က မရိုးနိုင်အောင် လိုက်ငေးနေတော့တာပဲ။ ကားက မြို့တွေရွာတွေကို ကျော်လွန် သွားပေမယ့်လည်း ကိုယ့်အာရုံထဲမှာတော့ အတွေးတွေက တ၀ဲလည်လည်ပါပဲ။ အင်း .. ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ ကိုယ်တို့နိုင်ငံက ကလေးတွေရော ဘယ်ဆီကိုများ ဦးတည်သွားနေကြမလဲ ...၊ သူတို့တွေကရော ဘုန်းတော် ကြီးကျောင်းတွေကို ဘယ်လိုသဘောထားကြမလဲ ...။
တခါမှာတော့ ရှေးဟောင်းဆင်းတုတော်တွေ ဖူးဖို့နဲ့ ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦလေးတခုကို လေ့လာဖို့ နယ် မြို့တမြို့ရဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတကျောင်းကို မိတ်ဆွေတွေကခေါ်သွားပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ကိုယ်တို့ ရောက်သွားတဲ့အချိန်က Sunday School စာသင်ချိန်ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါနဲ့ ကိုယ်တို့လလည်း စာသင်နေတဲ့နေ ရာကို အရင်သွားပြီး လိုက်ကြည့်ကြပါတယ်။ အဲဒီမှာတွေ့ရတာကတော့ အသက်အရွယ်လိုက် အတန်းတွေ ခွဲ ခြားထားပါတယ်။ ၁တန်းကနေ ၁၀တန်းအထိရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီဓမ္မကျောင်း သို့မဟုတ် Sunday School အတွက် သင်ရိုးပြဌာန်းထားတာတွေကတော့ ...
8. Buddhist meditation (ဘာဝနာ တရားပွားများခြင်း)တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။
ဘုန်းတော်ကြီးတွေ၊ သီလရှင်တွေအပြင် ဆရာ၊ ဆရာမတွေကလည်း ၀ိုင်းဝန်းကူညီသင်ကြားပေးကြတာ တွေ့ ရပါတယ်။ သင်ကြားရေးပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိရှိရတာ နောက်တစ်ခုကတော့ ၁၉၆၀မှာ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင် လိုက်တဲ့ Buddhist Theosophical Society (BTS) ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီအဖွဲ့က သင်ကြားမှုနည်းစနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုး တက်ရေးနဲ့ ဆရာဖြစ်သင်တန်းဖွင့်လှစ်ရေးအတွက် ရည်ရွယ်တာပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ Sunday School ကျောင်း သားဟောင်းများကိုလည်း ဆရာများအ ဖြစ် ထိုသင်တန်းများမှမွေးထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရစာမေးပွဲများမှ တဆင့် စဉ်ဆက်မပြတ်အကဲဖြတ်ခြင်းဟာ အရည်အချင်းပြည့်ဝတဲ့ ဓမ္မကျောင်းဆရာများ မွေးထုတ်ပေးခြင်း အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်လို့ ရှင်းပြကြပါတယ်။ သတိထားကြည့်မိသလောက်တော့ ဒီ Sunday School စနစ်ကို ဒီနိုင်ငံက ပညာတတ်လူတန်းစားတွေ အထူးအားပေးကြတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲဒါအချက်တွေ ဟာ ကိုယ့်အတွက်တော့ မှတ်တမ်းလေး တွေဖြစ်လို့ပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ ... နိုဝင်ဘာလရဲ့ ရက်တရက်မှာတော့ မြန်မာ့သမိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့ ကန္ဒီစာချုပ် ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့နေရာ၊ ဒီနိုင် ငံရဲ့ ဒုတိယမြို့တော်ဖြစ်တဲ့ ကန္ဒီ(Kandy)မြို့ကနေ ကီလိုမီတာ ၂၀လောက်ဝေးတဲ့ နေရာက ခြံကြီးတခြံကို ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီခြံကြီးထဲမှာ ကိုယ်နဲ့ အလွန်ရင်းနှီးတဲ့ မိသားစုတစု နေထိုင်ကြပါတယ်။ သူတို့မိသားစု က စီစဉ်ပြုလုပ်တဲ့ အလှူအတွက် လာဖိတ်ကြတာနဲ့ ကိုယ်လဲ အဲဒီကိုရောက်ဖြစ်သွားရတော့တယ်။ လာကြိုတဲ့ ကားက အလှူလုပ်တဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့ မနက် ၉နာရီခွဲလောက်ရှိပါပြီ။ အဲဒီနေ့က တနင်္ဂနွေနေ့ပါ။ ကိုယ်တို့ ရောက်တော့ အိမ်ရှင်တွေက ထွက်ကြိုနှုတ်ဆက်ကြပါတယ်။ အဲဒီအိမ်မှာက သားသမီးဆိုလို့ ၁၃နှစ်အရွယ် သ မီးလေးတယောက်ပဲရှိပြီး ကိုယ်နဲ့လဲ အလွန်ရင်းနှီးပါတယ်။ ကိုယ်ရောက်တော့ အဲဒီကလေးမလေးရဲ့ မိဘတွေ ကို နှုတ်ဆက်ရင်း သူ့ကိုမတွေ့တာနဲ့ မေးကြည့်လိုက်တော့ “ဒီနေ့ Sunday School ရှိတယ်လေ ...၊ အဲဒီမှာ အ စမ်းစာမေးပွဲလေးလည်းရှိလို့ပါ ...၊ ၁၁နာရီ မထိုးခင် တရားပွဲအမီ ပြန်လာပါလိမ့်မယ်” လို့ ပြန်ဖြေပါတယ်။
ပုံမှန်အချိန်ဆိုရင်တော့ ဒါက မထူးဆန်းပေမယ့် အခုလိုအချိန်မျိုးမှာ ဒီစကားကို ကြားရတော့ ကိုယ့်အတွက် နည်းနည်းဆန်းနေသလိုပါပဲ။ တကယ်တော့ ဒီအလှူက သူတို့မိသားစုအတွက် အလွန်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နဲ့ ပြု လုပ်ထားတဲ့အလှူပါ။ ကိုလံဘိုက ဆရာတော်တွေနဲ့ လူတွေတချို့ကိုတောင် ဖိတ်ကြားထားတာပါ။ ပြီးတော့ သူ တို့မိသားစုအတွက် ၀မ်းနည်းစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့နေ့ကို အမှတ်တရပြုလုပ်တဲ့ အခမ်းအနားလေးပါ။ ဒီ လိုနေ့မျိုးမှာတောင် အိမ်ရှင်ဖြစ်တဲ့ ကလေးမလေးက Sunday School ကို သွားဖို့ မပျက်ကွက်ခဲ့ဘူး။ မိဘတွေ ဘက်ကလည်း အားပေးတိုက်တွန်းပြီး ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့လိုက်ပို့ပေးတာပဲ။ ကိုယ်ကတော့ ဒီအခြေအနေလေး တွေကိုကြည့်ပြီး မိဘတွေဘက်ကရော ကလေးတွေဘက်ကပါ Sunday School အပေါ်ထားတဲ့ လေးနက်မှု တွေကို သိလိုက်ရတော့တယ်။ တကယ်တော့ သင်ကြားရေးစနစ်တခုမှာ သင်ကြားပြသပေးတဲ့သူတွေသာမက တက်ရောက်သင်ကြားကြတဲ့ သူတွေဟာလည်း အလွန်အရေးပါတဲ့ အခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေပါတယ်။ သင် ကြားရေးစနစ်တခု အောင်မြင်ဖို့ အတွက် ကလေးတွေဘက်က စိတ်ပါဝင်စားမှု အလေးအနက်ထားမှုတွေ လို အပ်သလို မိဘတွေဘက်လည်း တိုက်တွန်းအားပေးမှု၊ ပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်ပေးဖို့လည်း အထူးလိုအပ်ပါတယ်။
ကိုယ်ရောက်ရောက်ချင်း သူ့ကိုမတွေ့လိုက်ရပေမယ့် ဓမ္မကျောင်းကို လေးလေးစားစားနဲ့ မပျက်မကွက်သွားခဲ့ တဲ့ သူ့အတွက် ကျေနပ်နေမိတယ်။ ပီတိလည်း ဖြစ်ရတယ်။ အခမ်းအနား စခါနီးမှာပဲ အဲဒီကလေးမလေး ပြန် ရောက်လာပြီး Sunday School ၀တ်စုံလေးနဲ့ တရားဝင်နာနေတာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့အခမ်းအနားပြီး တော့ ကိုလံဘိုလိုက်ပြန်မယ့် ဆရာတော်တပါးက ခဏလောက်နားချင်သေးတယ်ဆိုတာနဲ့ ချက်ချင်းမပြန်ဖြစ် သေးဘဲ ခေတ္တနားဖြစ်ကြပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ကိုယ်နားဖို့အတွက်ပေးထားတဲ့ အခန်းထဲမှာပဲ ပြန်နားရင် တ က္ကသိုလ်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းထဲက စာတချို့ကို ဖတ်နေလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုနေရင်း တအောင့်လောက်ကြာတော့ အလှူကိုလာတဲ့ (အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်) ဒီအိမ်ရှင်ရဲ့ တူမလေးက အခန်းထဲဝင်လာပြီး ကိုယ်ဘေးနားကို ရောက်လာပါတော့တယ်။ ကလေးတွေကလည်း ကိုယ်နဲ့ဆို အတော်ဓာတ်တည့်ကြပါတယ်။ တော်တော်လည်း ခင်ကြတယ်။ (ဒီက ကလေးတွေ အင်္ဂလိပ်လို ကောင်းကောင်းပြောနိုင်ကြတယ်။ တချို့ဆို ကိုယ့်ထက်တောင် သာသေး..) အခုလည်း ကိုယ့်အနားကိုကပ်လာတဲ့ ကလေးမလေးကလည်း ကိုယ်ဘာစာတွေ ဖတ်နေတယ်ဆို တာ စပ်စုချင်လို့လေ၊ သူက ကိုယ့်ဘေးနားကနေ စာရွက်ထိပ်က ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကိုကြည့်ပြီး Mahasanghika Sect (မဟာသံဃိကဂိုဏ်း) ဆိုပြီး အသံထွက်ဖတ်လိုက်တယ်။ ဒါနဲ့ ကိုယ်က လက်ထဲကဖိုင်ကိုပိတ်ပြီး သူ့ကို နောက်ချင်တာနဲ့ အဲဒါဘာလဲ .. သိလားဟင်လို့ မေးလိုက်ပါတယ်။ ကလေးမလေးကလည်း ချက်ချင်းပဲ သိတာ ပေါ့လို့ပြန်ဖြေတယ်။ ဒါဆိုရင် နည်းနည်းလောက်ပြောပြပါလားလို့ဆိုတော့ ကလေးမလေးကလည်း အဲဒီဂိုဏ်း နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အဓိကအကြောင်းအရာတချို့ကို တခါတည်းတတွတ်တွတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုပြောပြပါလေတော့တယ်။
ဒီလိုပြန်ကြားရလိမ့်မယ်လို့ လုံးဝမထင်ထားပါဘူး။ အမှန်တကယ်တော့ အဲဒီကလေးမလေးကို နောက်လိုက် တာပါ။ ဒီဂိုဏ်းအကြောင်း သူဒီလောက်အထိ သိနေလိမ့်မယ်လို့ မထင်ခဲ့မိဘူး။ ကိုယ်ဆိုရင်လေ သူ့အသက်အ ရွယ်လောက်တုန်းက မဟာသံဃိကဂိုဏ်းအကြောင်းမပြောနဲ့ အဲဒီနာမည်ကို ကြားတောင် မကြားခဲ့ဖူးဘူး။ မ ဟာယာန ဆိုတာကိုတာတောင် ဖားအောက်တောရရောက်တော့မှ စပြီးကြားဖူးတာ။ အော် ... ဒီလိုလည်းရှိပါ လားပေါ့။ ဒါတောင် အဲဒီတုန်းက မဟာယာနဂိုဏ်းအကြောင်း သေချာမသိခဲ့ဘူး။ (ကိုယ်ကတော့ အဲဒီလောက် ထိကို ညံ့ခဲ့တာပါ။ အင်း ... ခုနေများ ကိုယ်တို့နိုင်ငံက သူ့အရွယ်ကလေးတွေကို အဲဒီလိုမေးကြည့်ရင် ဘယ်လို ဖြေကြမလဲမသိဘူး …)
အခု ကိုယ့်ရှေ့က ကလေးမလေးက မြို့ကြီးတွေ ကျောင်းကောင်းကောင်းကြီးတွေမှာ နေခဲ့ ရသူတဦးလည်း မ ဟုတ်ပါဘူး။ ကန္ဒီအလွန် ရွာမြို့လေးတစ်ခုကနေ ကြီးပြင်းလာတဲ့ သာမန်အရပ်သူလေးတစ်ဦးပါ။ ဒါနဲ့ကိုယ်က လည်း သူ့ကို ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဒီအကြောင်းအရာတွေကို သိနေရတာလဲလို့ မေးလိုက်တော့ .. ကလေးမလေးက “Sunday School မှာသင်ပေးတာလေ” ဆိုပြီး ပြန်ဖြေပါတယ်။ အဲဒီစကားကတော့ ကိုယ့်ရင်ဘတ်ထဲကို တည့် တည့်ကြီး ၀င်သွားသလိုပါပဲ။ ကြည့်ပါဦးလေ ... ဒီလိုသာမန်ကလေးတယောက်ရဲ့ အသိဉာဏ်ထဲကို ဘာသာ ရေးဗဟုသုတတွေ စွဲနေအောင် အများကြီး ထည့်သွင်းပေးနိုင်တဲ့ သူတို့ရွာကျောင်း Sunday School က ဘုန်း တော်ကြီးတွေရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို အလွန်လေးစားမိပါတယ်။ ဒီကလေးတွေအတွက် သူတို့ရပ်ရွာက ဘုန်း ကြီးတွေ အလွန်တာဝန်ကျေကြတယ်လို့ ရင်ထဲကနေ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ခံစားရလိုက်ရတယ်။
မွန်းလွဲ ၂ နာရီကျော်လောက်မှာတော့ ကိုယ်တို့လည်း အဲဒီခြံကြီးကနေ ကိုလံဘိုကို ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ ခြံထဲက မထွက်မီ ကားပေါ်မတက်ခင်လေးမှာတော့ အိမ်ရှင်သမီးလေးက ခြံထဲကပန်းတွေခူးပြီး ပန်းလေးတွေနဲ့ နှုတ် ဆက်ကန်တော့ပါတယ်။ အပြန်လမ်းမှာတော့ လက်ထဲမှာကိုင်ထားတဲ့ ပန်းလေးတွေကိုငေးရင်း နေ့ခင်းကတွေ့ ခဲ့တဲ့ စကားပြောခဲ့တဲ့ ပန်းလေးတွေအကြောင်း သတိရနေမိတယ်။ ဒီကပန်းလေးတွေကတော့ လောကကြီးအ တွက် အလှဆုံးဖူးပွင့်ကြဖို့ တာစူနေကြပါပြီ။ ကိုယ်တို့နိုင်ငံက ပန်းကလေးတွေကရော …။ “နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်ဟာ အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ မျိုးဆက်သစ်တွေလက်ထဲမှာ ရှိနေပါတယ်” ဆိုတဲ့စကားကို စာအုပ်တွေထဲ မှာ မကြာခဏ ဖတ်ခဲ့ရဖူးပါတယ်။ မျိုးဆက်သစ်ပန်းပွင့်လေးတွေ ခွန်အားအပြည့်နဲ့ လန်းဆန်းမှုအပြည့်နဲ့ ဖူး ပွင့်နေတာတွေ့ရရင် တကယ်ကြည်နူးရတယ်။
တခါတုန်းကတော့ နယ်က ကလေးမလေးတယောက် သူ့မိသားစုနဲ့အတူ ကိုလံဘိုကိုလာရင်း ကိုယ့်ဆီ အလည် ၀င်လာပါတယ်။ သူလည်း အသက် ၁၃ နှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ (ဒီနိုင်ငံက ကိုယ်ရင်းနှီးတဲ့ ကလေးတွေ ၁၀ယောက် ကျော်ကျော်လောက်ထဲမှာ အသက် ၁၃ နှစ်အရွယ်က ၄ ယောက်ပါတယ်။) ဖြစ်ချင်တော့ အဲဒီကောင်မလေး ကိုယ့်ဆီလာလည်တဲ့အချိန်ကလည်း အမေရိကန်သမ္မတလောင်း Barack Obama ရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေက သတင်း စာတွေ၊ ဂျာနယ်တွေ၊ အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေမှာ ပလူပျံနေတဲ့အချိန်ပေါ့။ အဲဒါတွေကိုတွေ့တော့ ကလေး မလေးက ကိုယ့်ကိုဘာပြောသလဲဆိုတော့ သူက “ Obamaကို မကြိုက်ဘူး ” တဲ့။ Obama ကို ထောက်ခံသံ တွေ ကျွက်ကျွက်ညံနေတဲ့အချိန်မှာ ဒီကလေးမလေးက မကြိုက်ဘူးလို့ ပြောလိုက်တော့ ကိုယ့်မှာ စိတ်ထဲဇဝေ ဇ၀ါဖြစ်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ ဘာဖြစ်လို့မကြိုက်တာလဲလို့ သူ့ကိုမေးတော့ သူက “ Hillary Clinton ကို ပိုကြိုက်လို့ ပေါ့” တဲ့။ ပြီးတော့ သူက Hillary Clinton စကားပြောတဲ့ ပုံစံကို သူအလွန် သဘောကျကြောင်း ကိုယ့်ကိုပြော ပြပါသေးတယ်။
အဲဒီလို သူပြောနေတဲ့ ပုံစံကလေးကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်ကတော့ ပြုံးနေမိတယ်။ ဒါပေမယ့် သူဆက်ပြောတဲ့ စကား တွေကြောင့် ကိုယ့်မှာတော့ အားရပါးရ ရယ်လိုက်မိတယ်။ အဲဒါကတော့ သူက Dr. Kondoliza Rice စကား ပြောဟန်ကို ကြိုက်ပါတယ်တဲ့ ..၊ ဒါပေမယ့် Dr. Rice က နိုင်ငံတကာက ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါမှာ ခြေထောက်ကို အမြင့်ကြီး ချိတ်ထိုင်တာကိုတော့ သူက မကြိုက်ဘူးတဲ့။ အဲဒီစကားကိုကြားတော့ ကိုယ့်မှာဖြင့် သဘောကျလိုက်တာ။ စဉ်းစားကြည့်လေ ကလေးမလေးတယောက် (သို့မဟုတ်) လူငယ်လေးတယောက်ဟာ TV အစီအစဉ်တွေထဲက ကြော်ငြာမင်းသမီးတွေကို စိတ်ဝင်စားတာထက် လူထုကို ဦးဆောင်နေတဲ့ ပြဿနာ တွေဖြေရှင်းပေးနေတဲ့ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်တွေကို စိတ်ဝင်စားတာ ပိုမကောင်းဘူးလား ...။ ရုပ်ရှင်ထဲက မင်းသ မီးတွေပြောတဲ့ စကားလုံးတွေထက် ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေပြောတဲ့ မိန့်ခွန်းတွေကို စိတ်ဝင်စားတာ ပိုမ ကောင်းဘူးလား …။ စတိတ်ပေါ်က မော်ဒယ်လ်လေးတွေရဲ့ လှုပ်ရှားပုံကို စိတ်ဝင်စားတာထက် ကမ္ဘာကျော် ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေရဲ့ လှုပ်ရှားပြုမူပုံကို စိတ်ဝင်စားတာ ပိုမကောင်းပေဘူးလား။ ကိုယ့်တူလေး၊ တူမလေး တွေက TV ဇာတ်လမ်းတွဲတွေထဲက မင်းသား၊ မင်းသမီးတွေကို သဘောကျနေချိန်မှာ ကိုယ့်ရှေ့ကကောင်မ လေးကတော့ ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် အမျိုးသမီးကြီးတွေကို အားကျလို့နေတယ်။ ဝေတောင် ဝေဖန်လိုက်သေး။ ကိုယ့်မှာတော့ သူတို့နဲ့တွေ့လိုက်ရင် စဉ်းစားစရာတွေက ပေါ်ပေါ်လာတော့တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ ... သူ တို့လေးတွေနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ရတာဟာ ကိုယ့်အတွက်တော့ အမှတ်ရစရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။
ဒီနိုင်ငံရဲ့ လူဦးရေ ၆၉% က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်၊ ၁၅% က ဟိန္ဒူဘာသာဝင်၊ ၈% က ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်၊ ၇% က မွတ်စလင်ဘာသာဝင်တွေဆိုပြီး ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာက လပြည့်နေ့တိုင်းကို အစိုးရရုံး ပိတ်ရက်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပေးပြီး အဲဒီနေ့ဆိုရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေ၊ ရိပ်သာတွေမှာ ဥပုသ်သီတင်း စောင့်တည်သူတွေ ပြည့်လို့ပေါ့။ ကိုယ်နေတဲ့ ရိပ်သာမှာတော့ ပုံမှန်လပြည့်နေ့ဆိုရင် ဥပုသ်စောင့်တည်သူ ၁၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြီး Wesak Poya Day လို့ခေါ်တဲ့ ကဆုန်လပြည့်နေလိုမျိုးမှာဆိုရင်တော့ ၂၅၀၀ လောက်ရှိတတ်ပါတယ်။ မနက် ၆ နာရီလောက်ကတည်းက ရောက်လာကြပြီး ညနေ ၅ နာရီလောက်မှ ပြန်ကြ တာပါ။ တရားပွဲတွေကလည်း ဆက်တိုက်ပါပဲ။ နာမည်ကြီးဆရာတော်တွေကိုလည်း တရားပွဲအတွက် ပင့်ထား လေ့ရှိပါတယ်။ အဓိကကတော့ သီလယူပြီး တရားနာကြပါတယ်။ အဲဒီသူတွေထဲမှာလည်း ကလေးတွေက အမြဲ ပါလေ့ရှိပါတယ်။ ဧည့်သည်လာတာ အလွန်ရှားတဲ့ ကိုယ့်အခန်းထဲမှာတော့ လပြည့်နေ့တွေဆိုရင် အထူးဧည့် သည်အဖြစ်နဲ့ ကလေးတွေကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ တဘက်ကလေးတွေ ပတ်ထားပြီး အထက်အောက် အဖြူ ရောင်ဝတ်စုံလေးတွေနဲ့ပေါ့။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၆ နှစ်လောက်တုန်းက ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ ကိုယ့်မိတ်ဆွေရဲ့ စကားလေးတခွန်းကို ပြန်ကြားယောင်နေမိ တယ် ... “ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဘာသာရေးတခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့ ကလေးတွေကို သင်ပေးနေလို့ ဘယ်လိုမှမဖြစ်ဘူး။ ဘာ သာရပ်တခုလို သင်ပေးရမှာ”လို့ သူအားရပါးရနဲ့ပြောတုန်းက ကိုယ့်မှာတော့ အဲဒီစကားကို အလွန်သဘောကျ ပြီး အပြည့်အ၀ထောက်ခံခဲ့ဖူးတယ်။ အခု ဒီနိုင်ငံကိုရောက်ပြီး ဒီကသင်ကြားရေးစနစ် အခြေအနေတွေကို တွေ့ လိုက်ရတော့မှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်း အတော်ရှက်မိပါရဲ့။ ကိုယ်တို့မှာတော့ ထောက်ခံလို့ကောင်းတုန်း၊ ဆွေး နွေးလို့ကောင်းတုန်းဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းအရာကို ဒီနိုင်ငံက ဘုန်းတော်ကြီးတွေ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် တွေက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ လောက်ကတည်းက လက်တွေ့လုပ်ပြခဲ့ကြတာပါ။ ကိုယ်ကတော့ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ် တွေကို ဦးညွှတ်ရင်း စာရေးဆရာကြီး ဗန်းမော်တင်အောင်ရဲ့ စကားလေးတခွန်းကို ကြားယောင်နေမိတယ် ... “လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဟာ သူဖြတ်သန်းကျော်လွှားနေတဲ့ ခေတ်ကြီးက သူ့ပခုံးပေါ်တင်ပေးလိုက် တဲ့ သမိုင်းတာဝန်ကို သူဘယ်လောက် သယ်ပိုးထမ်းဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ တိုင်းတာရမှာပဲ”။
From / http://drlunswe.blogspot.com/
Posted by uzinlay at 11:31 AM0comments
Posted by uzinlay at 8:02 AM0comments
Posted by uzinlay at 5:32 AM0comments
Posted by uzinlay at 9:26 AM0comments
ကျောက်ကွင်း အရေးတော်ပုံ ``ကျောက်ကွင်းဝါဒပြိုင်ပွဲ´´
10th Feb, 2009,
ကျောက်ကွင်း အရေးတော်ပုံ ``ကျောက်ကွင်းဝါဒပြိုင်ပွဲ´´part(1)+(2)
တနင်္ဂနွေနေ့တွင် မယားက ဘုရားရှိခိုးကျောင်းတက်သည်။ ဥပုသ်နေ့တွေင် လင်ယောင်္ကျားက အခြားရွာရှိ မြန်မာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းသို့ သွားရောက်ပြီး ဥပုသ်စောင့် သီလ ဆောက်တည်သည်။ နာတာလူးပွဲ ခရစ်စမတ်ပွဲများကို မယားကဆင်နွဲပြီး လင်ယောင်္ကျားက ကထိန်ပွဲ ၀ါဆိုပွဲ ညောင်ရေသွန်းပွဲများကို ဆင်နွဲသည်။ မယား၏ ဘာသာရေးအလှူကို လင်ယောင်္ကျားက လိုက်လျော၍ လင်ယောင်္ကျား၏ ဘာသာရေး အလှူကိုလည်း မယားက ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ပဋိပက္ခမရှိသည့် သဘောထားကြီးသော ဇနီး မောင်နှံတို့ပင်တည်း။ သို့သော် ဦးလှောင်မှာ ရပ်ရွာ၏ အကြီးအကဲ သူကြီဖြစ်သောကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်ကလည်း အရေးကိစ္စရှိလျှင် ဦးလှောင်ထံသို့သာ ဦးတည်၍လာသည်။ ခရစ်ယာန်ဘက်ကလည်း ထိုနည်းတူပင်၊ နှစ်ဘက်ဘာသာရေးမှ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဦးလှောင်အိမ်တွင်သာ တည်းခိုကြသည်။ ဦးလှောင်တို့၏ ဇနီးမောင်နှံက ကျွေးမွေးဧည့်ခံရသည်။
ဤတွင် သူကြီးကတော်က မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကြီးအား ကယ်တင်ပေးပါဟု ဓမ္မဆရာဦးရွှေအောင်အား အကူအညီတောင်းတော့သည်။ ထို့ကြောင့် ဦးရွှေအောင်သည် ညဘက်တွင် သူကြီးအိမ်သို့ လာ၍ ခရစ်ယာန်တရားကို ဟောသည်။ သူကြီးဦးလှောင်သည် ပရိယတ္တိစာပေ မတတ်ကျွမ်းသော်လည်း ဆရာတော်များထံမှ ရရှိထားသော ပညာဗဟုသုတဖြင့် ဦးရွှေအောင်ဟောပြောသမျှကို ပြန်လှန်၍ညင်းချက်ထုတ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ကန်ကြောင်းကို မိမိတတ်သမျှ ပြောပြသည် ဦးရွှေအောင်ကလည်း ဦးလှောင်ပြောသမျှကို ချေဖျက်၍ ငြင်းချက်ထုတ်သည်။
ဤအကြောင်းကားမထူးသေးပေ၊ နှစ်ဘက်သော ထောက်ပံ့ကြေးကြောင့် စီးပွားရေး မဟန်သည့်aပြင် ကြွေးပင်အနည်းငယ်တင်လာသည်။ သည်အတိုင်းမဖြစ်သေး၊ ဤကိစ္စကို ပြတ်အောင်လုပ်မှ ဖြစ်မည်။ သူကြီးမင်း တွေးရလေသည်၊ တစ်နေ့တွင် အကြံကောင်းတစ်ခုကို တွေး မိသည် ဦးရွှေအောင်သည် ညအိမ်သို့လာလျှင် တင်ပြမည်။ ထိုနေ့တွင် ဦးရွှေအောင် ရောက်လာသောအခါ၌ သူကြီးမင်းဦးလှောင်က မိမိ၏ အကြံအစည်ကို ထုတ်ဖေါ်ပြောကြားလေသည်။
ဦးရွှေအောင်၏ ပြောပြချက်မှာ မျှတသဖြင့် သူကြီးက သဘောကျသည်၊ ဦးရွှေအောင်နှင့်သူကြီးအိမ်တွင် ရောက်နေကြသည့် ချင်းအမျိုးသားခရစ်ယာန် ပရိသတ်ကလည်း သဘောကျကြသည်။ သို့သော် သူကြီးမှာ တစ်uီးတည်း ဖြစ်နေသဖြင့် ရွာထဲရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာအိမ်သုံးအိမ်မှ လူကြီးမျာကို ခေါ်ခိုင်းလိုက်သည်။ ထိုသူများရောက်လာသောအခါ ကျောက်ကွင်းရွာ၏ မြောက်ဘက်နှင့်တောင်ဘက်တွင်ရှိသော ဗမာရွာများမှ ဗုဒ္ဓဘာသာလူကြီးများကို အခေါ်ခိုင်းလို်က်သည် ၊ တစ်နာရီခန့် ကြာသောအခါ ထိုရွာများမှ ဗုဒ္ဓဘာသာလူကြီး ရှစ်ဦး လိုက်ပါလာကြသည်။ သူကြီးဦးလှောင်ကား အင်္ဂလိပ်အစိုးရက ခန့်အပ်ထားသော ဒိုင်နယ်သူကြီး ဖြစ်သဖြင့် စည်းစနစ်ရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။ ပြောဆိုလုပ်ကိုင်ရာတွင် တိကျစေ့စပ်သည် ၊ ထို့ကြောင့် နှစ်ဘက်သောလူကြီးများနှင့် အကြေအလည် ဆွေးနွေးကြပြီးနောက် သူကြီးကတော်ထံတွင် စာရွက်တောင်းပြီး ဦးရွှေအောင်အား ရေးသားစေလျှက် အောက်ပါအချက်များ ပါဝင်သည့် သဘောတူညီချက်ကို စာချုပ်အဖြင့် ချူပ်ဆိုလိုက်လေသည်။
၂။ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာနှဏ်မျိုး၌ မည်သည့်တရားက ကောင်းသည် မှန်သည်ဟု ယှဉ်ပြိုင်ဟောပြောပွဲကို ကျင်းပကြရန်။
၁၂။ ယှu်ပြိုင်ဟောပြောပွဲကြီး ကျင်းပမည့်ရက်ကို ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၉၃၆ ခု၊ မေလ(၁)ရက်နေ့၊ ဗမာသက္ကသရာဇ် (၁၂၉၈)ခု၊ ကဆုန်လဆန်း(၁၂)ရက်၊သောကြာနေ့ကို သဘောတူ သတ်မှတ်ရန်။
အလိုတော်ရရွာသည်ကျောက်ကွင်းရွာ၏အနောက်မြောက်စွန်းစွန်းနှစ်မိုင်ခွဲခန့်အကွာတွသည်။ ထိုရွာတွင် ၀ါတော် (၆၅)၀ါ ၊သက်တော်(၈၅)နှစ် ရှိတော်မူသော ဂိုဏ်းချူပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး သီတင်းသုံးတော်မူသည်။ ဆရာတော်ဘုရားကြီး သီတင်းသုံးတော်ရာရွာကို အစွဲပြု၍ ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးစီးတော်မူသော ဂိုဏ်းကို အလိုတော်ရဂိုဏ်းဟု ခေါ်ကြသည်။
ဦးဥေယျသည် ထိုအချိန်က နိုင်ငံကျော် ဓမ္မကထိက ဆရာတော်ဖြစ်၏ ။ အသံကောင်းသည် အဟောအပြောကောင်းသည် ၊အာဝဇ္ဇာန်းရွှင်သည် ၊ ထို့ပြင် လောကမျက်မှန်စာစောင်၌ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ရှုပ်ချသည့်စာများကို ရေးသားနေသဖြင့် လူသိများ၍ ကျော်ကြားသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့် ယှဉ်ပြိုင်၍ ဟောပြောရမည့် ဘာသာဝါဒပြိုင်ပွဲတွင် ဦးဥေယျ သည် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်ဟု ယူဆပြီး ရန်ကုန်ဆရာတော်အချိူ့က ညွန်ကြားကြခြင်းဖြစ်လေသည်။
အလိုတော်ရဂိုဏ်းဝင်ဆရာတော်တို့ကား နိုင်ငံကျော်ဓမ္မကထိက သာယာဝတီ ဦးဥေယျ၏အမည်ကို ကြားဖူးကြသည်။ အဟောအပြော ကောင်းကြောင်းလည်းကြားဖူးကြသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ရှုပ်ချရေးသားနိုင်သူဖြစ်ကြောင်း ကြားသိရသောအခါ ပိုမိုအားတက်ကျသည်။ ထို့ကြောင့် ဂိုဏ်းချူပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအား အကျိူးအကြောင်း လျှောက်ထားတင်ပြသော အခါ အမြန်ဆုံး ပင့်ဖိတ်အကြောင်းကြားရန် အမိန့်ရှိတော်မူလေသည်။
သို့သော် အမှန်တကယ် ဖြစ်ရပ်မှန်ကား ဆရာတော်ဦးဥေယျထံမှ မည်သည့်ပြန်ကြားချက်ကိုမှ မရရှိခြင်းပင်ဖြစ်၏ ။ အလိုတော်ရဆရာတော်များက နောက်ထပ်၍ တောင်းပန်စာရေးကြပြန်သည်။ စိတ်ချရအောင်ဆိုပြီး ကြေးနန်းရိုက်၍ သတင်းပို့ကြသည်။ ဦးလှောင်တို့ကလည်း ဦးဥေယျကို ပင့်သည်ဟု ကြားရသဖြင့် ပျော်ရွှင်အားတက်နေကြသည်။ အကြိမ်ကြိမ်စာရေး၍ ကြေားနန်းပို့သော်လည်း ပြန်ကြားချက်ကို မရရှိကြသောအခါ အလိုတော်ရဂိုဏ်းမှ ဆရာတော်အချိူ့ ရန်ကုန်မြို့သို့ ကို်ယ်တိုင်လိုက်သွားကြပြီး ဆရာတော်နှင့်ဦးဥေယျနှင့် တွေ့ဆုံကာ လျှောက်ထားတောင်းပန်ကြ၏။ အမျိူးမျိူးလျှောက်ထားကြ၏ ။ ခိုင်လုံသော အကြောင်းပချက်မရှိဘဲနှင့် ဦးဥေယျက ငြင်းလွတ်လိုက်သည်။ မန္တလေး၊ ပခုက္ကူစသည်မှ ပုဂ္ဂိုလ်များကို ပင့်ကြပါဟု လီးလွဲညွန်ကြားလိုက်သည်။ ခရစ်ယာန်ဘက်မှ ဘုန်းကြီးလူထွက် ဓမ္မဆရာကြီးများ ပါလိမ့်မည်ဟူသော သတင်းကို ဦးဥေယျ ကြားသိပြီးဖြစ်ဟန်တူ ၏။ အချင်းချင်းတော့ ဆော်ရဲသည် ထိုသည့် ဦးဥေယျ ကိုယ်တော်ကြီးကား နယ်နယ်ရရ ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ် ခရစ်ယာန်နှင့်သာ ယှဉ် ပြိုင် ဟောပြောခြင်း မပြုရဲသော်လည်း ကိုယ့်ဗုဒ္ဓဘာသာအချင်းချင်း ဘ၀တူရဟန်းချင်းကိုမူဆော်ရဲ နှက်ရဲ၏ ။ ပိဋကတ်အရာ မယှဉ်သာအောင် မိမိထက် အများကြီးသာလွန်သော အရှင်အာဒိစ္စာဝံသ ဆရာတော်ကို ဂျူဗလီဟော ပကာသနီယျ အစည်းအဝေးပွဲကြီး၌ ``ဘုန်းကြီး ဦးတူး ချီးလူးသည့် ပုံ ပြင်´´ဖြင့် ရက်ရက်စက်စက် ဆော်နက်၍ ပွဲကျအောင် ပြောဝံ့သူဖြစ်၏။ `လူပြန်တော်ပညာရှိတစ်ဦးကို ရေးခိုင်းပြီး သူက အမည်ခံကာ နေစရာရှာမရ မလကကွင်းပြင် ပမာဒစာရင်းဝင်တယ် အဖျင်းတွင်ထိပ်ဆုံး အာဒိစ္စ ယောက်ဖကုလားနာရယ် ဘောက်ကျတာတွေ လျှော့လိုက်ပါဦး ´ အစရှိသော တေးထပ်ကဗျာကို သတင်းစာတွင် ထည့်ရဲသူ အာဇာနည်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေတည်း။
ခရစ်ယာန်တို့အားတက်ပြီ ခရစ်ယာန်တို့ကလည်း ရန်ကုန်၊ မန္တလေး ၊မော်လမြိုင်၊မေမြို့၊ တောင်ငူစသော မြို့များရှိ ဂိုဏ်းအုပ်ဂိုဏ်းချူပ်များထံသို့ စာရေး၍၄င်း လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်၍၄င်း၊ အကျိူးအကြောင်းရှင်းပြ၍ ဆွေးနွေးကြသည်။ ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းများကလည်း အချင်းချင်း ဆွေးနွေး၍ ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်ကို ရွေးချယ်ပေးကြသည်။ အဓိကယှဉ်ပြိုင်ရမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များအပြင် အထောက်အကူပြု ပုဂ္ဂိုလ်များ အရံလိုက်ပါမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များကိုပါ ရွေးချယ်ပေးသည့်အပြင် ငွေကြေးများပါ ၀ိုင်းဝန်းကူညီ၍ ထောက်ပံ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဓမ္မဆရာဦးရွှေအောင်နှင့် ခရစ်ယာန်အုပ်စုမှာကျိန်း သေနိုင်ပြီဟုတွက်ဆကာ ပျော်တပြုံးပြုံး မော်မဆုံးနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြသည်။
မိမိတို့တာဝန်ယူထားရသည့် မဏ္ဍပ်အစိပ်အပိုင်းကို အစွမ်းကုန် မွမ်းမံချယ်လှယ်နေကြသည် ခရစ်ယာန်တို့ဘက်မှ ယှဉ်ပြိုင်ဟောပြောမည့် ပုဂ္ဂိုလ်များစာရင်းတွင် ဦးရွှေမှန် ၊ ဦးသာဒင်(ရန်ကုန်) ဦးသာဒင်(မန္တလေး)တို့၏ အမည်များမှာ ထိပ်ဆုံးမှ ပေါ်ထွက်လာ၏ ။ ဦးရွှေမှန်သည် အင်းစိန်ကျမ်း စာသင်ကျောင်း ၊ ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဖြစ်၏ ၊ မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းပေါင်းစုံ အဖွဲ့ချူပ်ကြီး၏ နာယကကြီးလည်းဖြစ်၏ ။ ပါဠိပိဋကတ်အရာတွင် ပထမကျော်အောင်ခဲ့သည့် ဘုန်းကြီးလူထွက်ဖြစ်၏ ။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှ ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းလာခဲ့သူဖြစ်၏ ၊ ဦးသာဒင် နှစ်ဦးလုံးမှာလည်း ထိုခေတ်က ပထမကြီးတန်းအောင်မြင်ခဲ့သော စာချဘုန်းကြီးလူထွက်များ ဖြစ်ကြ၏ ။ ပိဋကတ်ကို ထုံးလိုချေ ရေလိုနောက်၍ မွှေနိုင်သူများဟု နာမည်ကျော်နေသူများ ဖြစ်ကြ၏ ။ ဦးရွှေမှန်နည်းတူ ဗုဒ္ဓဘာသာမှ ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းခဲ့သူများ ဖြစ်၍ အဟောအပြော အလွန်ပင်ကောင်းသည့် ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာကြီးများဖြစကြသည်။
ဤပုဂ္ဂိုလ်ကြီး သုံးဦးသည် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယှဉ်ပြိုင်ချေဖျက်ရာ၌ စံပြစရာအကောင်းဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ကြီးများပင်ဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စာပေ နှင့် သမ္မာကျမ်းစာများကိုပါ ကျွမ်းကျင်ကြသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာတို့ကို ကျွန်းကျင်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သောကြောင့် မိမိတို့ ကျိန်းသေ အောင်ပွဲဆင်ရမည်ဟု ဓမ္မဆရာဦးရွှေအောင်တို့ဘက်မှ ဟိန်းဟောက်ထားသည်မှာ ဟိန်း ဟောက်လောက်ပါပေ၏ ။
ဂိုဏ်းချူပ်ဆရာတော်ကြီးကား ဆွမ်းဘုဉ်းမပေးနိုင်သည်အထိ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက် စိတ်ထိခိုက်နေလေသည်။ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်သည် စစ်မှန်သောဝါဒဖြစ်ပါလျှက် ယှဉ်ပြိုင်ဟောပြော မည့်သူ မရှိသောကြောင့်သာ အရေးနိမ့်ရလျှင် သာသနာတော်၌ အသက်ရှင်လျှက် နေဖို့ပင်မကောင်းတော့ ၊ သေသော်မတည့် အော်… ကောင်း၏ ။ဟူသော အဆင့်မျိူးသို့ ဆိုက်ရောက်နေချေပြီဟု တွေးတောကာ စိတ်မောနေရလေသဖြင့် အဟာရကိုပင် ကောင်းစွာ မဘုဉ်းပေးနိုင်တော့ချေ။
``ဘယ်လိုလည်းဟဲ့ မောင်နန္ဒရဲ့ မောင်ပဇင်းဟာက ကူညီနိုင်တယ်လည်း ဆိုသေးရဲ့ ရှင်းအောင်လျှောက်စမ်းပါဦးကွယ်´´
အဲဒီလိုလူမျိူးတွေက ဥသြလည်းမဟုတ် ၊ ကျီးကန်းလည်းမဟုတ်တဲ့ (အောက်ကလိအာ)ဆိုတဲ့ လူမျီူးတွေ ပိဋကတ်ကို ကုန်စင်အောင် နိက်နိုက်ချွတ်ချွတ် တတ်မြောက် ထားတာလည်း မဟုတဘူ။ ။ လေ့လာထားတာလည်း မဟုတ်ဘူး ၊ ပါဠိတတ်တာနဲ့ ပိဋကပ်ကျမ်းစာ အနည်းအကျဉ်း သင်ဖူးတာကို သူတို့ကို သူတို့ ပိဋကတ်ပါရဂူလို့ ထင်နေကြတာ။ ပထမကြီး ပထမ ကျော်အောင်တာကို အဟုတ်ကြီးမှတ်နေကြတာ ၊ အကြီးမားဆုံးချွက်က ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှု မရှိကြဘူး။ အဲဒီလို ဥာဏ်မျိူးလည်း မရှိကြဘူး ။ဇိနတ္ထ ပကာသနီလောက် တထာဂတ ဥဒါန ဒီပနီလောက်ကို အပြစ်ပြောနိုင်တာကို ဟုတ်လှပြီထင်နေကြတာ။ ဗုဒ္ဓ၀ါဒ အစစ်အမှန်ကို သူတို့နားမလည်ကြပါဘူး ဒီအထဲ အဆိုးဆုံးတစ်ခု ရှီသေးတယ် ´´၊ ``မှန်ပါ ဘယ်ဟာပါလည်းဘုရား´´
``ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်ကို ငွေကြေးနဲ့ အခွင့်အရေးနဲ့ လှဲလည်ရောင်းစားပစ်လိုက်တဲ့ အချက်ပေါ့ကိုယ်တော် ၊ တပည့်တော်တို့ ပါဠိစာပေမှာ (ဥဒရဟေတု)၀မ်းရေးဟူသော အကြောင်း ကြောင့် ခရစ်ယာန်ဘက် ပြောင်းသွားတဲ့လူတွေ ကိုယ်တော်….ခရစ်ယာန်ကလည်း အပေးအကမ်းအချီးမြောက် အလွန်ရက်ရောတယ်မဟုတ်လား… ဒီကြားထဲ ထိုခရစ်ယာန်အင်္ဂလိပ်အစိုးရကလည်း နောက်ခံရှိနေလေတော့ အခွင့်အာဏာပါ ရှိနေကြတာပေါ့ ။ ရာထူးနှင့် မြှားပြီးဆွယ်လို့ ခရစ်ယာန်ဖြစ်သွားကြတာ တစ်ပုံကြီးပဲ တပည့်တော်တို့ရဲ့ တောင်ခွင်သာသနာပိုင် ဆရာတော်ကြီးရဲ့ တူတစ်ယောက်ဆိုရင် ရာထူးကြီးရတာနဲ့ ခရစ်ယာန်ဘက်ဝင်သွားတယ်။ ဟော.. သူ့သားတွေ အင်္ဂလန်ပြန်ဘွဲ့တွေ ဘာတွေနဲ့ …..အခုရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာ ပါမောက္ခတောင် ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် တပည့်တော်က အဲဒီလို ဗုဒ္ဓဘာသာကို စွန့်ပြီး ခရစ်ယာန်ဘက်ဝင်သွားလူ များများပါစေချင်နေတာ ။ ပြောရတာလည်း အားနာစရာမလိုဘူး။ မခက်ပါဘူးကိုယ်တော်…. သူတို့ကအိန္ဒိယမှာ တပည့်တော်တွေ့ဆုံကြုံကြိုက်ခဲ့ရတဲ့ ခရစ်ယာန်ပါရဂူ ကြီးတွေလောက်မတောပါဘူး။ အဲဒီလူတွေကိုယ်တောင် အနိုင်ကြဲနိုင်ခဲ့သေးတာပဲဟာ ။
-ကဆုန်လဆန်း(၇)ရက်၊ ဧပြီလ (၂၆)ရက်၊ နေ့ဆွမ်းအမှီ အလိုတော်ရကျောင်းအရောက်သွား ပြီး ဂိုဏ်းချူပ်ကြီးအား လျှောက်ထားရန်၊ ပြီးလျှင် ကျောက်ကွင်းသို့ ဆကါသွား၍ သူကြီးနှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လူကြီးများအား အကြောင်းစုံပြောပြပြီး ဆရာတော်တို့ ကြွရောက်လာမည့် ရက်၌ ပြု လုပ်ရမည့် အစီအစဉ်များကို မှာကြားပြောဆိုပြီး ၊ အလိုတော်ရကျောင်းသို့ ပြန်လာရန်၊ ထိုနေ့ ည အလိုတော်ရဂိုဏ်း သံဃာများနှင့်ဆွေးနွေးရန်။
အရှင်မဟာနန္ဒ၏ ခရီးစဉ်ကား လွန်းပြန်ခရီးစဉ်ဖြစ်၍ အလွန်ပင်ပမ်း ခရီးကြမ်းလှပါသည်၊ သို့သော် အရှင်မဟာနန္ဒကား ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကို အလွန်ချစ်မြတ်နိုးသည့် ဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်း (အာလံ) ကျောင်းအုပ်ဆရာတော်ဖြစ်၍ ပင်ပမ်းသည်ဟုပင် မထင်ပေ။ ဆရာတော်အရှင်ဥက္ကဌကို ကိုယ်တိုင်တွေ့ရပြီး ဆရာတော်ကိုယ်တိုင် ဦးဆောင်ဟောပြောမည် ဟူသော ကတိကို ရရှိသဖြင့် အလွန်ကျေနပ် ၀မ်းသာနေသည်။ ခရီးကြမ်းပါစေ ၊ ပင်ပမ်းပါစေ၊ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက် အသက်သေချင်သေပါစေ ။ ဟုပင် ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်၏ ။
ဧပြီလ(၂၈)ရက်နေ့တွင် ဆရာတော်အရှင်ဥက္ကဌ ခေါင်းဆောင်သော အဖွဲ့ဝင်(၆)ဦးပါ ၀င်သည့် ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့သည် မည်သည့်အခမ်းအနား အဆောင်အယောင်မျှ မပါဘဲ စာအုပ် တစ်ထုတ်နှင့် လွယ်အိတ်ကိုယ်စီ လွယ်လျှက် ခရီးသည်တင် ဘတ်စ်ကားဖြင့်ပင် တောင်တွင်း ကြီးမြို့မှ အာလံမြို့သို့ စတင် ခရီးထွက်ခဲ့ကြသည်။ နံနက်(၉)နာရီတွင် အာလံသို့ ရောက်ရှိရာ၊ ကားဂိတ်တွင် အရှင်မဟာနန္ဒနှင့် ရဟန်း သုံးလေးပါး၊ ကျောင်းသား သုံးလေးဦးတို့ ကြိုဆိုနေ ကြသည်ကို တွေ့ကြလေသည် ။ ထိုနေ့တွင် အာလံမြို့။ ဗုဒ္ဓသာသနာပြုကျောင်း အရှင်မဟာ နန္ဒထံတွင် ရပ်နားကြသည်။ ထိုအချိန်က ဆရာတော် အရှင်ဥက္ကဌသည် ဘားမားဂျာနယ်။ တိုး တက်ရေး မဂ္ဂဇင်းတို့တွင် အမျိူးသားရေးနှင့်၊ ဘာသာရေးဆောင်းပါးများကို ရေးနေရာ။ အာလံ မြို့မှာ စာပေလိုက်စားသူတို့က ကြားဖူးနေကြသည်။ ။ ဆရာတော်ရောက်လာကြောင်း ကြား သိရသောအခါ လာရောက်ဖူးမျှော်ပြီး မေးမြန်းလျှောက်ထားကြရာ ။ ဆရာတော်ကလည်း ပြန် လည်ဖြေကြားလေသည်။
တစ်ချိန်က တရားပွဲများဖြင့် အုတ်အုတ်ကျက်ကျက် စည်ကားကျော်ကြားခဲ့သော စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးတွင် သီတင်းသုံးသည့် နိုင်ငံကျော် ဓမ္မကထိက။ ၀ိပဿနာနည်းပြ ,မြ၀တီ ဆရာတော်ဟူသော ဆရာတော်တစ်ပါး ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးသည်။ ။ ထိုဆရာတော်သည် လူထွက် ပြီးသည့် နောက်ပိုင်း အာလံမြို့တွင်၍ လာရောက်၍ အခြေချနေထိုင်သည်။ ။ အမည်ကား ဆရာကြီး ဦးအုန်း။ ။ ထိုဆရာကြီးသည် ဆရာတော်အရှင်မဟာနန္ဒနှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်၍ ကျောက်ကွင်းဝါဒ ပြိုင်ပွဲအကြောင်းကို အလုံးစုံ သိရှိပြီးဖြစ်သည်။ ။ သူသည်လည်း ဗုဒ္ဓသာသ နာကို ချစ်မြတ်နိုးသူတစ်ဦး ဖြစ်၍ ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်က နိုင်စေချင်သည်။ ပိဋကတ်စာပေ တတ်ကျွမ်းသူဖြစ်၍ ပိဋကတ်စာပေတစ်ချိူ့တွင် ချိူ့ယွင်းချက်များ ရှိနေသည်ကိုလည်း မကျေ နပ်သူ ဖြစ်သည်။ ဤချို့ယွင်းချက်များကို ထောက်ပြ၍ ၊ ခရစ်ယာန်တို့က အနိုင်ယူသွားမည် ကိုလည်း စိုးရိမ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆရာတော်အရှင်ဥက္ကဌနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး ပြိုင်ပွဲအတွက် ကြိုတင် လေ့ကျင့်ရန် ဆုံးဖြတ်ပြီး ဆရာတော်ထံသို့ ရောက်လာခဲ့သည်။
ဆရာတော်နှင့် အလ္လာပ သလ္လာပ အနည်းငယ်ပြောကြားပြီးနောက်၊ ဆရာကြီးဦးအုန်း က ပိဋကတ်တော်များအကြောင်းကို စတင်ဆွေးနွေးသည်။ ဆရာတော်ကလည်း ပြန်လည် ဆွေးနွေးသည် ``ဆရာတော် အခုသွားပြီး ယှဉ်ပြိုင်ဟောပြောရမယ့် ကိစ္စက အတော်မလွယ် ဘူး ထင်တယ်ဘုရား။ တစ်ဖက်ကလည်း ပိဋကတ်စာပေတတ်ကျွမ်းတဲ့ ဘုန်းကြီးလူထွက်ကြီး တွေ ပါတယ်ဆိုတာကိုး ။ တပည့်တော် စောစောက လျှောက်ထားခဲ့သလို ပိဋကတ်တော်ထဲမှာ ရှေ့ - နောက်မညီညွတ်တာတွေ ။ အစပ်အဟပ်မတဲ့တာတွေက ကွက်ကြားကွက်ကြားပါနေ တာဘုရား။ အဲဒါတွေဟာ ဘုရားဟောတွေပဲဆိုပြီး သူတို့က ထောက်ပြဝေဖန်ရင် ဆရာတော် ကဘယ်လို ခေပမလဲဘုရား´´ ။ ``အဲဒီလိုဆိုတော့လည်း.. ဖွတ်မြီးနှင့် ဖွတ်ချည် ဆိုတာမျိူး လို သူဝေဖန်တဲ့ မေးတဲ့အထဲကပဲ အဖြေပြန်ရှာပြီး ချေပရမှာပေါ့ ဒကာကြီးရယ်´´။ ``သိပ်ပြီး မလွယ်ဘူးထင်တယ် ဆရာတော် ´´၊ ``ဒါကကိုယ်လက်ခံယုံကြည်ဖို့မှ မဟုတ်တာဘဲဟာ။ ပြေလည်အောင် ရှင်းပြရမယ့်သဘော သက်သက်ဆိုတော့ အဲဒီ ပိဋကတ်စာပေတွေကိုပဲ ပြန် ပြီးခံတပ် လုပ်ရမှာပေါ့ ဒကာကြီးရယ်´´။ ``ဒါဖြင့်ရင်….ဒီလို့လုပ်ဘုရား၊ တပည့်တော်က ခရစ် ယာန်ဘက်ကနေပြီး ပိဋကတ်တော်နဲ့ တရားတော်တွေကို ဝေဖန်မယ်၊ အဲဒါဆရာတော်က သူ့ ဟာနဲ့သူပြေအောင် ပြန်ပြီး ချေပကြည့်စမ်းပါ ဆရာတော် ။ တိုက်ပွဲအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းမျိုး ပေါ့ဘုရား။ ဘယ့်နှယ်လည်း ဆရာတော်´´။
ဤတွင်ဆရာအုန်းသည် ပိဋကတ်တွင် တွေ့ရှိရသော ပျော့ကွက်ဟာကွက်များကို စတင်ထိုးနှက်၍ တိုက်ခိုက်ဝေဖန်လေတော့သည်။ ဆရာတော်ကလည်း အညံ့မခံဘဲ ပြန်လှန် ၍ ခုခံချေပသည်။ ဆရာကြီးဦးအုန်းသည် ပိဋကတ်စာပေကို နိုက်နိုက်ချွတ်ချွတ် လေ့လာထား သူဖြစ်သည်။ စာမှတ်မဟုတ်ဘဲ ၊ တကယ့်စာတတ်ဖြစ်သည်။ မြ၀တီဆရာတော်ဘ၀ မြန်မာနိုင် ငံ တစ်နံတစ်လျား တရားပွဲကြီးများကိုပင် အောင်မြင်စွာ ဟောပြောခဲ့သူဖြစ်၍ စကားလည်း တတ်လှသည်။ အပြောလည်း ကောင်းးလှသည်။ အနယနယ်အရပ်ရပ်တွင် ရဟန်း/ရှင်လူမျိူးစုံ နဲ့ တွေ့ထိခဲ့ရ၍ မေးခွန်းပေါင်းစုံနှင့်လည်း ရင်ဆိုင်ခဲ့ရဖူးသူဖြစ်သည်။
နောက်တစ်နေ့ ဧပြီလ(၃၀)ရက် ၊နံနက်(၅)နာရီအချိန်လောက်တွင် အလိုတော်ရ ဂိုဏ်းဝင် ဆရာတော်များ တစ်ကျောင်းလျှင် လှည်းတစ်စီးကျစီနှင့် လာရောက်ကြိုဆိုကြရာ လှည်းအစီးပေါင်းတစ်ရာကျော်ရှိသည ၊ နေမထွကမှီပင် ဆရာတော်အရှင်ဥက္ကဌနှင့်အဖွဲ့ စီးနင်း လိုက်ပါသော လှည်းကို ရှေ့ဆုံးမှထား၍ သံဃာတော်များ စီးသည့် လှည်းအစီးတစ်ရာကျော် လှည်းတန်းကြီးသည် ၀က်ထီးမြို့တွင်းမှ ဖြတ်၍ အလိုတော်ရရွာဘက်သို့ ဦးတည် မောင်းနှင်လာရာ တစ်မြို့လုံး အုံးအုံးကျွက်ကျွက် ထွက်၍ ကြည့်ကြသည်။ ကားဂိတ်တွင် ကော် ဇောခင်းထားသော လှည်းအစီးသုံးဆယ်ခန့်ကို တွေ့ကြရသည်။ ပြည်မြို့မှ ခရီးဆက်လာမည့် ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာအဖွဲ့ကို ကြိုဆိုရန် စောင့်ဆိုင်းနေသည့် ဦးရွှေအောင် ခေါင်းဆောင်သည့် ခရစ်ယာန်တို့၏ လှည်းအုပ်စုဖြစ်လေသည်။
နံနက်(၆)နာရီခန့်တွင် အလိုတော်ရ ဂိုဏ်းချူပ်ကြီး၏ ကျောင်းသို့ ဆရာတော်အရှင် ဥက္ကဌတို့အဖွဲ့ ရောက်ရှိကြ၍ ဂိုဏ်းချူပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအား ရှိခိုးဝတ်ပြုကြလေသည်။ ဂိုဏ်းချူပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ၀မ်းမြောက်မှုကား အတိုင်းအတာမရှိပင် ဖြစ်တော့သည်။ ဆရာတော်အရှင်ဥက္ကဌ၏ ပုခုံးပေါ်လက်တင်၍ နင့်လိုဖွယ် သာရဏိယ ကထာများကို မြွက် ကြားနေလေသည်။
ထို့နောက်ဂိုဏ်းချူပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးဆောင်သော လှည်းတန်းကြီးသည် ကျောက်ကွင်းရွာ ၀ါဒပြိုင်ပွဲ မဏ္ဍပ်ဆီသို့ ဦးတည်ထွက်ခွာလာကြသည်။ နံက် (၉)ကျော်တွင် ရောက်ရှိပြီး မဏ္ဍပ်ကြီးအတွင်းရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်သံဃာစဉ်ပေါ်တွင် ဒကာများက ပင့်ဆောင် နေရာချထားပေးကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များ အထူးပင် ရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်နေကြသည်။ ရွာ သူကြီး ဦးလှောင်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်စိတ်အေးရပေသည်။ ဦးလှောင်၏ နှမများဖြစ်ကြသည့် ဒေါ် အေး၊ ဒေါ်ခတို့ ခေါင်းဆောင်၍ သံဃာတော်များအတွက် ဆွမ်းကွမ်းဝေယျာဝစ္စကို ချွေးတစ်လုံး လုံးနှင့် စီမံချက်ပြုတ်နေကြသည်။ သူတို့ကား ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက်မို့ ပင်ပမ်းသည်ဟုမ ထင်။ ရွှင်ပျဝမ်းသာစွာ အားတက်သရော လုပ်ကိုင်နေကြသည်။ သံဃာတော်များကို မြင်ရသည့်အပြင် သာသနာ့အာဇာနည်ဘွဲ့ထူး ချီလောက်သည့် တောင်တွင်း ဆရာတော် အရှင်ဥက္ကဌကိုယ်တိုင် ၀ါဒပြိုင်ပွဲ ဆင်နွဲမည်ဟု ကြားသိရသောကြောင့် အားတက်နေကြသည်။ ဗုဒ္ဓသာသနာအတွက် အသက်ပင် သေစေတော့ဟူသော စိတ်ဓါတ်ဖြင့် အပင်ပမ်းခံ၍ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။
(၄) (၇း၁၅) မှ (၇း၃၀)အထိ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သဘာပတိက မိန့်ခွန်းပြောရန်(၁၅)မိန်စ်။
မဏ္ဍပ်ကြီး၏ ပတ်ဝန်းကျင် ခပ်လှမ်းလှမ်းတွင်ကား နက်ဖြန်ပွဲကြီးအတွက် ရောင်းချရန် စားသောက်ဆိုင်များ၊ လဘက်ရည်ဆိုင်များ ၊ဈေးဆိုင်များဖြင့် စည်ကားနေလေသည်။ ခရစ်ယာန်ဆ ရာကြီးများကလည်း ဓမ္မဆရာဦးရွှေအောင်၏ နေအိမ်တွင် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဆော်နှက်ရန် ဗုဒ္ဓ၀င်နှင့် ဗုဒ္ဓကျမ်းစာ အချိူ့မှ အချက်အလက်များကို စုပေါင်းတိုင်ပင်၍ ရှာဖွေထုတ်နှုတ် မှတ်သားချက်များ ကို ရေးကူးနေကြသည်။ အထူးသဖြင့် ``လောကမျက်မှန်´´ စာစောင်တွင် ပါရှိသော ဆရာတော် ဦးဥေယျ၏ ရေးသားချက်များကို အဓိကထား၍ ထိုးနှက်ကြရန် မှတ်သားနေကြသည်။ အရှင်ဥက္ကဌ သည် ဦးဥေယျကဲ့သို့ ပြောဆိုလိမ့်မည်ဟု ယူဆနေကြဟန်ရှိသည်။ ဤအတိုင်းဆိုလျှင် သူတို့ဘက် က နိုင်ဘို့သေချာပြီ။ ဤသို့ တွက်ဆ၍ ပြောနေရာ ခရစ်ယာန်ပရိသတ်နေမှာ အလွန်တက်ကြွနေ ကြလေသည်။ အရှင်ဥက္ကဌ၏ အကြောင်းနှင့် အရည်အချင်းတို့ကို တိတိကျကျ မသိရှိကြဘဲ အထင်အ မြင်သေးနေခြင်းသည် သူတို့အဖို့ နောက်တစ်နေ့တွင် မဟာအမှားကြီးဖြစ်ကြောင်း တွေ့မြင်ကြရပေ တော့မည်။
ဤနေ့ကား မြန်မာနိင်ငံ ဗုဒ္ဓသာသနာသမိုင်းတွင် မွန်ကွန်းတင်ရမည့်နေ့ဖြစ်သည်။ ခရစ်ယာန်တို့၏ ဖန်ရှင်းဆင် iဿရ နိမ္မာန၀ါဒနှင့် ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ အနတ္တ၀ါဒတို့ ယှဉ်ပြိုင်ကြမည့် နေ့ကြီး ဖြစ်သည်။ ထောင်သောင်းမကသော ပရိသတ်ကြီး၏ ရှေ့မှောက်တွင် တရားဝင် ယှဉ်ပြိုင် ဟောပြောကြခြင်းဖြစ်၏ ။ တစ်ဘက်နှင့်တစ်ဘက် ပဋိပက္ခ မဖြစ်ကြဘဲ ပျော်ပျာ်ပါးပါးကြီး ယှဉ်ပြိုင် ဟောပြောကြရာ ဤပြိုင်ပွဲမျိူးကား မြန်မာနိုင်ငံသမိုင်းတွင် တစ်ကြိမ်တည်းသာ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ဖူးသည့် ပထမနှင့်နောက်ဆုံး ယှဉ်ပြိုင်ဟောပြောပွဲကြီးဖြစ်သည်။
ထိုနေ့ အရုဏ်တက်ချိန်မှစ၍ ကျောက်ကွင်းရွာ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ရွာများမှ ကျောက်ကွင်း မ ဏ္ဍပ်ကြီးဆီသို့ ဦးတည်၍ လာနေကြသော လှည်းသံ ။ လူသံ တို့မှာ ဆူညံ၍ နေကြသည်။၀က်ထီး ကန်မြို့မှ ခြေလျှင် လာကြသော လူတန်းကြီးမှာလည်း အဆက်မပြတ် ဖြစ်နေကြသည်။ နံနက်(၅)နာရီခွဲ အချိန်တွင် မဏ္ဍပ်ကြီးတစ်လုံး ပြည့်သွားလေသည်။ နောက်ထပ်ရောက်လာကြ သောလှည်းများနှင့် လူများမှာ မဏ္ဍပ်အပြင်ဘက် ပတ်ဝန်းကျင်တွင် နေရာယူကြရသည်။ အချိူ့မှာ ထိုင်ဖို့ပင် နေရာမရ၍ မတ်တပ်ရပ်နေကြရလေသည်။ ရွှေတောင်၊ ပြည်၊ပေါင်းတည်၊ ပေါင်းတလည်၊ ပေါက်ခေါင်း ၊ မြန်အောင်၊ ဟင်္သတ စသောရပ်ဝေးဒေသမှ လူများပါ လာရောက်ကြသဖြင့် ပရိသတ် တစ်သောင်းကျော်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းရလေသည်။
(၇)နာရီထိုးရန် ငါးမိနစ်အလိုတွင် ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်များက သံဃာစဉ်၏အရှေ့ မဏ္ဍပ်အတွင် မြေပြင်ပေါ်၌ စီတန်းခင်းထားသော ကုလားထိုင်များပေါ်သို့ သွားရောက်ပြီး စီ၍ ထိုင် နေကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘသာအဖွဲ့ဝင်များကလည်း မြောက်ဘက်ခြမ်းရှိ သံဃာစဉ်ရှေ့ မြေပေါ်တွင် တန်း စီခင်းထားသည့် ကုလားထိုင်များပေါ်သို့ သွားရောက်ထိုင်ကြသည် ၊ သဘာပတိများအတွက် နေရာ ကို နှစ်ဘက်ခေါင်းဆောင်များ၏ အတန်းအလယ်တွင် စားပွဲတစ်လုံးချ၍ စားပွဲ၏ တစ်ဘက်တစ် ချက်တွင် ကုလားထိုင်တစ်လုံးစီ ချထားလေသည်။
သဘာပတိများ၏ စားပွဲရှေ့တွင် ခုံမြင့်တစ်ခု ချထား၍ ခုံမြင့်၏ရှေ့တွင် စာပွဲတစ်လုံးရှိသည် စားပွဲပေါ်တွင် ရေချိူက် ၊ ဖလ်ခွက်နှင့် စားပွဲတင်နာရီတစ်လုံးကို တင်ထားသည် သဘာပတိ၏ စားပွဲပေါ်တွင်လည်း ရေချိူက်နှင့်နာရီတစ်လုံးစီ ရှိသည်။ (၇)နာရီတိတိအချိန်တွင် ခရစ်ယာန်သဘာပတိ ဦးရွှေမှန်နှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာသဘာပတိ ဆရာ တော်ဦးကုဏ္ဍလတို့သည် သဘာပတိများနေရာသို့ ကြွရောက်လာကြပြီး နေရာယူထိုင်ကြသည်။ ဦးရွှေမှန်က ၀ါဒယှဉ်ပြိုင်ဟောပြောပွဲဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာ၍ သဘာပတိမိန့်ခွန်းကို စတင်ပြော ကြားသည်။
ကြွရောက်လာကြတဲ့ ဆရာတော်သံဃာတော်များနှင့် ပရိသတ်အပေါင်းတို့ခင်ဗျား။ အား လုံးဟာ ဒီနေ့ဒီနေရာမှာ ဘုရားသခင်အလိုတော်အရ လာရောက်စုဝေးနေကြရပါသည်။ အများသိ ကြတဲ့အတိုင်း ဒီပွဲဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာ ဘယ်ဟာက ကောင်းတယ် ၊ မှန်တယ်၊ ဆိုတာကို ယှဉ်ပြိုင်ဟောပြောကြမှာဖြစ်ပါတယ် ၊ အဲဒီလို ဟောပြောတဲ့အခါမှာ တစ်ဘက်ဘာသာ က တစ်ဘက်ဘာသာရဲ့ ချိူ့ယွင်းချက်ကို ထုတ်ဖေါ်ပြီး ပြောရပါလိမ့်မည် ၊ ဝေဖန်ရပါလိမ့်မည်။ တစ်ဘက်နှင့်တစ်ဘက် အနိုင်ပြောကြရမှာဆိုတော့ တစ်ခါတစ်ရံပြင်းထန်တာ ပါခြင် ပါသွားပါလိမ့် မယ်။ အဲဒါကို ကြိုတင်ပြီး သိထားပါမှ နားထောင်တဲ့ ပရိသတ်က ခွင့်လွတ်နိင်ကြမှာပါ။ နှစ်ဘက် ဟောပြောမယ့် ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်း ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ပြောကြပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးမုန်း တီးနေကြတဲ့သူတွေ မဟုတ်တဲ့အတွက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ပုတ်ခတ်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ၀ါဒရေး၊ ဘာသာ ရေးများကိုသာ ပြောကြမှာပါ။ အထူးသဖြင့် ခရစ်ယာန် ပရိသတ်များကို ပြောလိုပါတယ်။ ခရစ်တော် ဟာ အလွန်ယဉ်ကျေးသိမ့်ပြီးတော့ သူရဲ့တရားတော်ဟာ သူ့ကို ကားစင်တင်ပြီး သတ်တဲ့သူတွေ ကို တောင်မှ ခွင့်လွတ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီရေရှုခရစ်တော်ရဲ့ ဖြစ်ရပ်ကို စံနမူနာထားပြီး ယဉ်ကျေးကြပါ။ သီးခံကြပါ၊ မခံချင်စိတ်၊ ဒေါသစိတ်မထားကြပါနဲ့။ ဒါမှလည်း ခရစ်ယာန်ကောင်း ပီ သပါတယ်။ တစ်ဘက်ပုဂ္ဂိုလ်က ဟောတာကို ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရော၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေကပါ အေးအေးဆေးဆေး လေးလေးစားစား နားထောင်ကြဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ၊ ထာဝရဘုရားနှင့် ရေရှုခရစ်တော်၏ မေတ္တာသည် အားလုံးအပေါ် လွမ်းခြုံကြရောက်ပါစေ။ စသည်ဖြင့် ဦးရွှေမှန်က သဘာပတိမိန့်ခွန်း ပြောကြားသည်။
အလိုတော်ရဂိုဏ်းချူပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနှင့် သံဃာတော်အရှင်မြတ်များ ဗုဒ္ဓဘာ သာဝင် ဒကာ/ဒကာမများနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ဒကာ/ဒကာမအပေါင်းတို့ ……..
ဦးပဇင်းတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဟာ မိမိအားကိုးကွယ်သည်ဖြစ်စေ ၊ မကိုးကွယ်သည်ဖြစ် စေ၊ မိမိညွန်ပြဟောပြောသော တရားဒေသနာကို လိုက်နာကျင့်သုံးသည်ဖြစ်စေ၊ မကျင့်သုံးသည် ဖြစ်စေ လူမျိူးမရွေး ဆူကြုံနိမ့်မြင့်မရွေး အားလုံးသော သတ္တ၀ါများအပေါ် မဟာကရုဏာတော်ကို ထားတော်မူပါတယ်။ အားလုံးကို သားတော်အရင်း ၊ ရာဟုလာနဲ့မခြား တတန်းတစားတည်း ထား ပြီး တပြေးညီ သဘောထားပြီး ဒုက္ခမှ လွတ်မြောက်ရာ၊ လွတ်မြောက်ကြောင်း တရားဒေသနာများ ကို ဟောဖေါ်ညွန်၍ သြ၀ါဒပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်တော်တိုင်လည်း မြင့်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့အ ကျင့် စာရိတ္တရှိပြီးတော့ သတ္တ၀ါများကိုလည်း မြင့်မြတ်ကြီးမားသော မေတ္တာတရားထားတော်မူခဲ့ပါ တယ်။ ကိုယ်တော်တိုင် သီးခံတော်မူတယ်၊ ခန္တီ ပရမံ တပေါ တိတိက္ခာ အစရှိသည်အားဖြင့် သည်း ခံခြင်းဟာ အလွန်မွန်မြတ်တဲ့ အကျင့်ဖြစ်ကြောင်းဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါးမှာ မေတ္တာကို အဦးထားပြီး ဟောတော်မူခဲ့ပါတယ်။ ဗုဒ္ဓရဲ့တပည့်သားဖြစ်ကြတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ သီးခံတတ် ရမယ်၊ မေတ္တာထားတတ်ရမယ်၊ စိတ်သဘောထား နူးညံ့သိမ်မွေ့ရတယ်။ ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါး နှင့် ခွင့်လွတ်တတ်ရတယ်။ ခုနင်က ဆရာတော်ကြီး ဦးရွှေမှန်ပြောသလိုပေါ့လေ ။ ယှဉ်ပြိုင်ဟော ပြောပွဲဆိုတော့ မိမိရဲ့ဘာသာအယူဝါဒ ကောင်းမွန်မှန်ကြောင်း အမွန်းတင်ပြီးတော့ သူတစ်ပါးဘာ သာရဲ့ ချိူ့ယွင်းချက်တွေကို ဝေဖန်ကြမှာမို့  နှစ်ဘက်စလုံးက ဟောပြောတာကို သေသေချာချာ နားထောင်ပြီးတော့ ယူသင့်ယူထိုက်တာ၊ ပယ်သင့်ပယ်ထိုက်တာတွေကို မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အသိ ဥာဏ်နဲ့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးမှ မိမိနှစ်သက်ရာကို ယူကြပါရန် အလေအနက် မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ် ဒကာ/ဒကာမအပေါင်းတို့ ……..စသည်ဖြင့် မြွက်ကြားလေသည်။
ခရ စ်ယာန်ဓမ္မဆရာကြီး ဦးသာဒင်(မန္တလေး) က စတင်ဟောပြောသည်။ ဦးသာဒင်သည် ဗုဒ္ဓဘာ သာဘုန်းကြီးလူထွက်ဖြစ်၍ ပထမကြီးတန်း အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ပါဠိစာပေကျွမ်းကျင်သည်ဟု နာမည် ကြီးသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာမှ ခရစ်ယာန်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းခဲ့ပြီး တရားဟောအလွန်ကောင်းသည်ဟု နာမည်ကျော်ကြားသူဖြစ်သည်။
သူက ဓမ္မကထိက ဆရာတော် ဦးဥေယျ ရေးသားခဲ့တဲ့ (လောကမျက်မှန်) အမည်ရှိစာအုပ်ကို စတင် တိုက်ခိုက်ပြောဟောသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို နှိမ်နင်းရေးသားထားသော ထိုစာအုပ်ပါ အချက်အလက်များကို ချေပ၍ ရှင်းလင်းသည်။ မူလက ဦးဥေယျကိုယ်တိုင် ကြွရောက်၍ ဗုဒ္ဓဘာ သာဘက်မှ ယှဉ်ပြိုင်မည်ဟု သတင်းကြီးနေရာ ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာအုပ်စုသည် ဦးဥေယျ ရေးသည့် လောကမျက်မှန်ကို တိုက်ခိုက်ချေပရန် အကြောင်းအချက်များ ရှာဖွေစုဆောင်း စီစဉ်လာခဲ့ကြသည် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသောကြောင့် ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လည်း ဟောပြောနိုင်ရာ ခရစ်ယာန် ချင်းပရိသတ် မှာ တပြုံးပြုံးနှင့်အားတက်ရွှင်ပျနေကြလေသည်။
``ဆရာတော်…. ဦးသာဒင် ဟောပုံဟာ လေးတယ်၊ ခရစ်ယာန်တရားဟောသံတွေ လုပ်နေ တာနဲ့ အချိန်ဖြုန်းသလို ဖြစ်နေတယ်၊ အချက်အလက်စုစည်းပြီး ပြန်ချေပတာ ကွာဟပြီး ဝေးနေတယ်ဘုရား´´ ဟူ၍ ဆရာတော်၏အနီးတွင် ရှိနေသော ဦးကိုကိုကြီးက ဆရာတော်အား တိုးတိုးလျှောက်ထားရာ ဆရာတော်က ဦးသာဒင်ဟောသမျှကို ရေးမှတ်နေရာမှ ပြုံးပြီးခေါင်းညိတ် လိုက်လေသည်။။
``ရွှေအိုးကြီးလေးလုံးဟာ ကပိလ၀တ်ပြည့်က နန်းတော်ဝင်းအတွင်းမှပဲ ဖြစ်ပေါ်လာတယ် လို့ စာကဆိုထားတယ်။ အဲဒါလည်း စဉ်းစားကြည့်ကြပါဦး … သင်္ဃ မည်တဲ့ ရွှေအိုးကြီးက တစ်ဂါ ၀ုတ်ပမာဏ ရှိသတဲ့ဗျ ၊ ဧဠ မည်တဲ့ ရွှေအိုးကြီးက ယူဇနာဝက်လောက်ရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။ ဥပ္ပလ မည်တဲ့ ရွှေအိုးကြီးက သုံးဝုတ်ပမာဏ ရှိသတဲ့ ၊ ပုဏ္ဏရိက အမည်ရှိတယ့် ရွှေအိုးကြီးက တစ်ယူဇ နာရှိတယ်လို့ ဆိုတယ်။ စုစုပေါင်းနှစ်ယူဇနာခွဲ ရှိတယ်။ ခုခေတ်သုံး မိုင်နှင့်ဆိုလျှင်တစ်ယူဇနာဟာ ဆယ့်သုံမိုင်ခွဲလောက်ရှိတယ်။ ဒီရွှေအိုးကြီးလေးလုံးအတိုင်းအတာပမဏဟာ မိုင်သုံးဆယ်ကျော် ရှိနေပြီ ဤရွှေအိုးကြီးတွေ ပေါ်တယ်ဆိုတာ တကယ်ဟုတ်ရိုးမှန်ခဲ့ရင် ရှေးခေတ်က မသကာ လူဦး ရေ ငါးသိန်းလောက်ရှိတဲ့ ကပိလ၀တ်ပြည်ကလေးမှာ လူတွေတိုက်တာအိမ်တွေဟာ ဒီရွှေအိုးကြီး လေးလုံးပေါ်တာနှင့်ပဲ ပျက်စီးသွားစရာရှိပါတယ် ၊ အဲဒီလောက်အပြောကြီးကြီးနဲ့ ပလွှား ၀ံ့ကြွား ထားတဲ့ ဗုဒ္ဓ၀င်ပါတဲ့ ဂေါတမဘုရားထင်ရာလျှောက်ပြီး ဟောထားတဲ့ တရားတွေကို စဉ်းစားဥာဏ်ရှိ တဲ့ လူတွေက ယုံလို့ဖြစ်ပါ့မလား´´၊ ဦးသာဒင်က ပရိသတ်ကို မေးခွန်းထုတ်ရင်း အကဲခတ်ကြည့် လိုက်၏ ၊ ထို့နောက်ဆက်လက်၍ ပြောပြန်သည်။
``စိဥ္မ္ဇမာန် ကိစ္စကိုလည်း ကြည့်ပါဦး ၊ သိကြားမင်းက စဉ္ဇမာန် ထမိန်အတွင်းဝင်ပြီး ကြွက်ယောင်ဆောင်ပြီး ကိုယ်တယ်လို့ဆိုထားတယ်၊ သိကြားတန်မဲ့ မိန်းမထမီအတွင်း ၀င်ရသတဲ့ လားဗျာ… ထမီတွင်းဆိုတာဟာ သာမန်လူယောင်္ကျားများ ၀င်ရင်တောင် ဘုံးကျက်သရေ ပျက်တယ်လို့ ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေက ယူဆထားတာနဲ့ တက်တက်စင် ကွာဟနေပါတယ်။ ဂေါတမ ရှေ့မှာ တရားနာနေတဲ့ ပရိသတ် ဗိုလ်ပုံ အလယ်မှာ မိန်းမတွေ အများကြီး ရှိနေနိုင်ပါလျှက်နဲ့ အဲဒီ မိန်းမကြီးတွေက ဗိုက်ကိုတော့ ထမစမ်းပါပဲနဲ့ ဧရာမနတ်တို့ဘုရင် သိကြားမင်းက လာပြီး ကိုယ်တိုင် ထမိန်ထဲ ၀င်ကိုက်ရတယ်ဆိုတာကလည်း ယုတ္တိမတန်ပါဘူးဗျာ..´´။
ဦးသာဒင်သည် ပရိသတ်ကို မေးခွန်းထုတ်သလိုလုပ်၍ ဆက်လက်ပြီး ဝေဖန်တင်ပြပြန် လေသည်။ `` ဒီတန်ခိုးပြာဋိဟာ ကိစ္စပဲ ရှင်မောဂ္ဂလန်ပေါ့ဗျာ…ရှင်မောဂ္ဂလန်နဲ့ ရှင်ပိဏ္ဍောလတို့ စဏ္ဍကူး သပိတ်ရဖို့အတွက် တန်ခိုးပြကြတယ်တဲ့ ။ အဲဒါ ဂေါတမဘုရားက ကြားသိတော့ ရဟန်း တွေ တန်ခိုးမပြရ ၊ ပြလျှင် အာပတ်သက်စေ လို့ ပညတ်ပါသတဲ့ ၊ အဲဒီလို သူများတွေကို ပညတ်ပြီး သူကတော့ တိတ္ထိတွေနဲ့ ပြိုင်ပြီး ရေမီးအစုံ တန်ခိုးပြသတဲ့ဗျာ… အဲဒါဆို ဂေါတမဘုရားဟာ ငါပြော သလိုလုပ် ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့ ဆိုတဲ့ ဘုရားမျိူးဖြစ်မနေဘူးလား။ ခင်ဗျားတို့ပြောတော့ တထာဂတ (အပြောနှင့်အလုပ်ညီညွတ်တယ်) ဆို ၊ ခုနကအတိုင်းဆိုလျှင် မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ဘုရား ကြီး ဂေါတမဟာ တထာဂတ ဘွဲ့နှင့် ထိုက်တန်ပါသလား´´
`` တာဝတိသာ နတ်ပြည်ကို တက်တာ တန်ခိုးနဲ့တက်တယ်ကွာလို့ ဆိုရင် ဟုတ်ဟုတ် တုတ်တုတ် ရှိသေးရဲ့ ၊ အခုတော့ နှစ်လမ်းသုံးဖ၀ါးနဲ့ တက်တယ်တဲ့ဗျ ၊ ပြန်ဆင်းမယ်ဆိုတော့ နတ် တွေက ရွှေစောင်းတန်း၊ ငွေစောင်းတန်း၊ ပတ္တစောင်းတန်းတွေ ဖန်ဆင်းပေးရသတဲ့ ၊ တန်ခိုးမရှိ တော့ ပြန်ဆင်းဖို့ မရဲဘူးထင်ပါရဲ့ဗျာ…´´
`` နောက်တစ်ခု ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုခန်းမှာ ကြည့်ပါဦး ၊ ၀မ်းတော်လားလို့ အားကုန်နေတဲ့ အသက်ရှစ်ဆယ်အရွယ် ဂေါတမ ဘုရားဟာ ကုသိနာရုံ ရောက်အောင် ရှင်အာနန္ဒာက တွဲခေါ်ပြီး ခြေလျှင်သွားရတယ် ၊ ဘုရားရဲ့တန်ခိုးတွေ ဘယ်တွေရောက်ကုန်လို့ ခြေလျှင်သွားနေရတာလဲ….၊ တာဝတိသာ နတ်ပြည်ကိုတောင် နှစ်လမ်းသုံးဖ၀ါးနှင့် အရောက် တန်ခိုးတော်နှင့် သွားနိုင်တယ်ဆို ဒီကုသိနာရုံ ကျကာမှ ကုန်းကြောင်း လျှောက်နေရသလား…..၊ ဘုရားကိုကြည်ညိုတယ်ဆိုတဲ့ နတ် တွေ တစ်ယောက်မှ မလာပါလား ၊ မကူညီပါလား၊ ဘယ်သွားနေကြသလဲ ၊ ကုသိနာရုံရောက်တော့ မှ စင်္ကြာဝဠာ တစ်သောင်းက နတ်ဗြဟ္မာ အပေါင်းတို့ရောက်လာသတဲ့ ၊ သားမွေးတစ်ချောင်း လောက်နေရာမှာ နတ် (၁၆)ယောက်လောက် မြူမုံလောက် ဖန်ဆင်းပြီး နေရသတဲ့ဗျာ… အဲဒါတွေ ဟာ ယုတ္တိ ရှိပါသလားဗျာ ….´´။
ဤနေရာသို့ အရောက်တွင် ရဟန်းတော်များမှာ ခေါင်ငုတ်၍သာ နေရတော့သည်။ ခရစ် ယာန်ပရိသတ်များ အားတက်နေကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာပရိသတ်ကား တွေဝေနေသည့်ဟန် ၊ အမူအရာများ ပေါ်နေလေသည်။ ဦသာဒင်ကိုယ်တိုင်လည်း အားတက်လာပြီး ပိဋကတ်ကျမ်းစာပါ အချက်အလက်တစ်ချိူ့ကို တိုက်ခိုက်ဝေဖန်သည် ၊ သို့သော် သူတင်ပြသော အချက်အလင့်အများ စုမှာ အာလံက မြ၀တီဆရာကြီး ဦးအုန်းနှင့်ဇာတ်တိုက်ခဲ့သည့် အချက်အလက်များသာဖြစ်နေသည် ကို တွေ့ရသည်၊ နတ်မှီဆရာတော် ဦးကလျာဏ ကား ပြုံးရွှင်နေလေသည်။
ဦးသာဒင် ဆင်းသွားပြီးနောက် ဗုဒ္ဓဘာသာသဘာပတိ တောင်ငူမြို့ လောကုတ္တရာဆရာ တော်က အရှင်ဥက္ကဌအား ပင့်ဖိတ်လိုက်လေသည်။ ဆရာတော်အရှုင်ဥက္ကဌသည် မှတ်စုမှတ်တမ်း များကို ကိုင်ယူပြီး ဟောပြောမည့်နေရာသို့ သွားသည် ရောက်လျှင် ပရိသတ်ကို တည်ကြည်ခန့်ငြား စွာ ကြည့်လိုက်သည် ၊ ထောင်သောင်းချီသော ပရိသတ်မှာ အပ်ကျသံပင် ကြားရမတတ်။ ငြိမ်သက် တိတ်ဆိတ်နေလေသည်။ အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပရိသတ်မှာ ဆရာတော်ကို အားကိုးတကြီးဖြင့် ကြည့်နေကြလေသည်။ ဦးသာဒင်တင်ပြသွားသော အချက်အလက်များမှာ လူပြိန်း တွေးတွေးလျှင် အလွန်အချက်ပိုင်နေသည်။ တော်ရုံတန်ရုံ ဗဟုဿုတ ကြွယ်သူမျိူး စာပေပရိယတ္တိ မကျွမ်းကျင်သူ တို့အဖို့ ပြန်လည်ချေပရန် မလွယ်ကူပေ။ ဆရာတော်အရှင်ဥက္ကဌ ပြန်လည်ချေပနိုင်ပါမည်လား ဟူ ၍ စိုးရိမ်နေကြပြီး သံသယ စိတ်လည်းဝင်နေကြသည်။
`` သဘာပတိကြီးနှင့်တကွ လူကြီးလူကောင်းအပေါင်းတို့ …….. ဒီနေ့ဒီအချိန် ဒီဘာသာဝါ ဒပြိုင်ပွဲကြီးမှာ ခရစ်ယာန် ဓမ္မဆရာများနဲ့ အမိမြန်မာပြည်ရဲ့ ရင်သွေးအစစ်ဖြစ်ကြတဲ့ မြန်ာ၊ချင်း၊ ကချင်၊ ကရင် ၊ စတဲ့ မျိူးတူဘာသာကွဲများကို ယခုလို တွေ့ရလို့ ဦးပဇင်းအလွန်ပင် ၀မ်းမြောက်ပါ တယ်´´
`` အနောက်ဖက်နိုင်ငံများမှာ ဦးပဇင်းတို့ သွားရောက်ပြီး ဗုဟုဿုတ ရှာဖွေနေစဉ်အခါ က အင်္ဂလိပ်၊ အမေရိကန် ၊ ကုလားစတဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် အတော်ခပ်များများနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ဖူး ပါတယ်။ ဘာသာရေးနှီးနှောပွဲကြီးများကို လည်း များစွာပဲ ကြုံကြိုက်ခဲ့ဖူးပါတယ်´´
`` ဒီမြန်မာပြည်ဆိုတဲ့ ကိုယ့်ပြည့်ကို ပြန်ရောက်တော့ သွေးရင်းသားရင်းဖြစ်တဲ့ ခရစ် ယာန်ဆရာများနဲ့ တွေ့ဆုံရမှုနည်းပါးသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် တစ်နေ့တွေ့ရပါစေဆိုတဲ့ ဆန္ဒအာသီသနှင့် မျှော်လင့်တောင့်တခဲ့ပါတယ် ။ ဒီနေ့ဟာဖြင့် ဦးပဇင်း ဆန္ဒပြည့်ဝတဲ့ နေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လို့ ဦးပဇင်းမျှော်မှန်းတောင့်တတဲ့အတိုင်း ကြုံရပါပြီ ။ ဒါကြောင့် ဘာသာအယူမတူညီတဲ့ သွေးတူ သားတူ မျိူးတူများနဲ့ ဆွေးနွေးရလို့ ဦးပဇင်းဝမ်းသာပါတယ် ၊ ဒီပွဲသဘင်ကြီးမျိူး ပေါ်ပေါက်လာအောင် ပြုလုပ်ပေးကြတဲ့ ဒီကျောက်ကွင်းရွာနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်က လူများကိုလည်း အ ထူးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ အရှုံးအနိင်အဖြစ်နဲ့ ထားပြီး ယခုလို ပြောရတာတော့ ဘယ်လိုနေမယ် မသိပါဘူး။ ဦးပဇင်းအဖို့ ပြောရရင် တစ်သက်တစ်ခါ ဒီလိုပွဲမျိူးကြုံဖို့ အလွန်ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲ ၊ ကြုံ တောင့်ကြုံခဲ ပွဲကြီးလို့ ထင်ပါတယ်….´´
`` ခုနက ခရစ်ယန်ဘာသာဘက်က ဟောပြောသွားတဲ့ ဓမ္မဆရာကြီး ဦးသာဒင်နဲ့ ဦးပဇင်းတို့ဟာ အရင်က တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး မသိကျွမ်းခဲ့ကြဘူးပါ။ ဒီရောက်မှ တွေ့မြင်ဖူးကြ တာပါ၊ ဒါကြောင့် တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အာဃာတ မရှိကြဘူးဆိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ်။ အခုပွဲသဘင်ကို တက်ရောက်လာကြတဲ့ ပရိသတ်ကို ပြောချင်တာက ပုဂ္ဂိုလ်သဘောထက် ဓမ္မသဘောသက်သက် ကိုသာ ဦးစားပေးပြီး စဉ်းစားကြဖို့ ဦးပဇင်းမေတ္တာရပ်ခံပါသည်။ လူတိုင်းမှာ ကိုယ်ပိုင်အသိ ကိုယ်ပိုင် ဥာဏ်ပညာ ၊ ကိုယ်ပိုင် ဝေဖန်ချက်၊ ခံယူချက်ဆိုတာ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့ ကိုယ်ပိုင်အသိ ဥာဏ်နဲ့စဉ်းစားဆင်ခြင် ဝေဖန်ပြီး ဘယ်တရားဟာဖြင့် သဘာဝကျမကျ ၊ ယုတ္တိရှိ မရှိ ၊ မှန် မမှန်ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင် သဘောပေါက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ခံယူတာဟာ အသင့်တော် ဆုံး အမှန်ကန်ဆုံး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်``။
`` သဘာပတိကြီး ဦးရွှေမှန်နှင့်တကွ ယခုဒီကိုကြွရောက်လာကြတဲ့ ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆ ရာ တော်တော်များများဟာ မူလက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ၊ အခုဦးပဇင်းတို့လို ဘုန်းကြီးများ ဖြစ်ခဲ့ကြတဲ့ အတွက် ပိဋကတ်စာပေများကို သင်ယူလေ့လာခဲ့သူများဟု ဦးပဇင်းယုံကြည့်ပါတယ်´´။
``ဒီလို ဖြစ်ရတာ ဘာကြောင့်လည်းဆိုရင် မူလ ကတည်းက ဒီဆရာကြီးတွေဟာ ဗုဒ္ဓနဲ့ ဗုဒ္ဓရဲ့တရားတော်အစစ်ကို မသိနားမလည်ဘဲနဲ့ သိနားလည်အောင်လည်း မကြိုးစားဘဲနဲ့။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင ဒကာ/ဒကာမတွေရဲ့ ဆွမ်းကို ညာစားနေတာ ထင်ရှားလှပါတယ်။ ဗုဒ္ဓအစစ်ရဲ့တ ရားတော်အစစ်ကို အသိနားမလယ်သလို အခုလည်းပဲ ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ တရားအစစ်ကို မသိ နားမလယ်ဘူးဆိုတာ သူတို့ရဲ့ ဟောပြောချက်တွေက သက်သေခံနေပါတယ်။ အဲဒီလိုဆိုရင် ဒီဆရာကြီးတွေဟာ ခရစ်ယာန်ဘက်ကိုပါ ဆက်ပြီး ညာနေကြတဲ့ ဓမ္မဆရာကြီးတွေ ဖြစ်သွားမှာကို ဦးပဇင်းစိုးရိမ်မိပါတယ်´´
ဤနေရာအရောက်တွင် ဆရာတော်က ပြုံးပြုံးကလေးပြောပြလိုက်ရာ ပရိသတ်ကြီး မှာ အိပ်ငိုက်နေရာမှ လတ်နိုးသွားသည့်အလား ငြိမ်သက်နေရာမှ `၀ါး´ကနဲ ပွဲကျသွားလေသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာပရိသတ်ကား အားတက်လာလေသည်။
`` ဗုဒ္ဓ၀င်ကို ဆရာဦးသာဒင်က ဝေဖန်သွားတဲ့နေရာမှာ ပဋိသန္ဓေအခန်းစပြီး ဗုဒ္ဓကို တွယ်သွားပါတယ်။ ကလေးတွေ စကားနိုင်လုပြောသလို ပြောစတမ်းသာဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘုရားအ လောင်းရဲ့ ခမည်းတော်နဲ့ မယ်တော်ဟာ ရှင်ဘုရာင်နှင့် မိဖုရား။ ဆရာကြီးတို့ရဲ့ ဘုရား၊ ယေရှုရဲ့ အဖေနဲ့အမေက ဘယ်သူတွေလဲ ၊ ဘယ်တိုင်းပြည်က ဘုရင်နဲ့မိဖုရားလည်းလို့ ပြောချင်ပြောနိုင် တာပေါ့ ။ ဆရာဦးသာဒင်ကို ဦးပဇင်းမေးပါရစေ ။ အဲဒီဗုဒ္ဓ၀င်မှာ ပါတဲ့ အတိုင်း ဗုဒ္ဓကိုယ်တော် တိုင် ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်တုန်းက ဟောခဲ့တယ်ဆိုတာကို အထောက်အထားအခိုင်အလုံနဲ့ပြောနိုင်ပါ သလား ၊ အခိုင်အလုံပြနိုင်ပါသလား။ အခိုင်အလုံပြနိုင်ရင် ဦးပဇင်းမှားကြောင်း ဦးသာဒင်ကို ၀န်ချ တောင်းပန်ပါ့မယ်။ အမှန်က ဗုဒ္ဓ၀င်ဆိုတာ ဗုဒ္ဓ၀ံသ အဋ္ဌကထာကို မြန်မာလိုပြန်ပြီး ရေးထားတဲ့ ကျမ်းပါ ရေးသားသူကတော့ သီဟိုဠ်ရဟန်းတော် အရှင် ဗုဒ္ဓဒတ္ထပါ ၊ ဗုဒ္ဓပရိနိဗ္ဗာန်ပြုပြီး နှစ်ပေါင်း တစ်ထောင်ကျော်မှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ပါဠိပညာရှင် သီဟိုဠ် ရဟန်းတော်သာ ဖြစ်ပါတယ်´´။
``နာလာဋ ဓာတုဝင် ၊ မဟာဝင် ၊ ဒီပ၀င် ၊ ဗောဓိဝင် ၊ ဒဋ္ဌာဓာတုဝင် ၊ ဆိုတာတွေ ကိုလည်း သီဟိုဠ်ရဟန်းတော် အရှင်မဟာနာမ ဆိုသူက ရေးသားခဲ့တာပါ။ အဲဒီစာတွေနဲ့ တစ်ချိူ့ အဋ္ဌကထာ ၊ ဋီကာတွေကို တိုက်ဆိုင်ကြည့်ရှုပြီးတော့ မြန်မာရဟန်းတော်ဖြစ်တဲ့ ကျည်းသဲလေး ထပ်ဆရာတော်က (ဇိနတ္ထပကာသနီကျမ်း) ကို ရေးသားပြုစုခဲ့တယ် ၊ နောက် (မာလာလင်္ကာရ)တို့ (တထာဂတဥဒါနဒီပနီ) တို့ ဆိုတာတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။ အဲဒီကျမ်းက စကားတွေကို ဦးသာဒင်က ဗုဒ္ဓဘုရားဟောပါ ဆိုပြီး ဝေဖန်သွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ တရား တော်နှင့် စာရေးဆရာတွေရဲ့ အဋ္ဌကထာ ဋီကာ စတာတွေကို အတူတူကြီးပဲ ထင်ပြီး ပြောနေကြ ရင်တော့ ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး၊ အလွန်မှားပါလိမ့်မယ်။ ပိဋကတ်တော်ကို စေ့စေ့စပ်စပ်သေသေချာ ချာ မလေ့လာခဲ့ဘူးဆိုတာ ပြရာရောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဦးသာဒင်တို့ အင်မတန် အထင်ကြီးတဲ့ အနောက်တိုင်းက ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် ပညာရှင်တွေထဲက ဗုဒ္ဓဘာသာ ပိဋကတ်တော်တွေကို စေ့စေ့စပ်စပ်ကြီး လေ့လာမိတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ဘယ်ဟာဗုဒ္ဓဘုရားဟောအစစ် ၊ ဘယ်ဟာကနောက် စာရေးဆရာရဲ့ လက်ရာပဲဆိုတာကို ခွဲခြားနိုင်ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းခဲ့ကြတာ တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်၊ အဲဒါကို ဦးသာဒင်တို့ အထူးသတိပြုဖို့ ကောင်းပါတယ်´´ ။
`` စိန္တိတံ သတ္တသင်္ချေယံ အစရှိတဲ့ ဂါထာဟာ ဇာတတ္တကီ သောတတ္တကီ ကျမ်းတွေ ထဲမှာပါတာ ၊ ပိဋကတ်တွေထဲမှာ ပါတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အောင်ခြင်းရှစ်ပါးတို့ ၀ိပါက်တော်(၁၂)ပါးတို့ ဆိုတာ တာဝတိသာနတ်ပြည် ကိစ္စဆိုတာ စာရေးဆရာရဲ့လက်ချက်တွေပါ ၊ ဘုရားဟောမဟုတ်ပါ ဘူး။ သစ္စက ပုရပိုက်နှင့် ဗုဒ္ဓဟာ အနတ္တ၀ါဒ ကိစ္စ မေးတာ သစ္စက အားလုံးကို ၀န်ခံရတယ်။ အနတ္တသာ မှန်ပါတယ်လို့ နောက်ပိုင်း သိကြားမင်းပါလာတာက ဗြဟ္မဏ၀ါဒီတွေ ထိုးထည့်ပေးတာ၊ ဗုဒ္ဓနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး ´´ ။
`` ပထမဆုံး ဘုရားဘယ်သူ ဗျာဒိတ်ပေးသလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ဆရာကြီးတို့ရဲ့ ထာဝရဘုရားကို ဘယ်သူဖန်ဆင်းသလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ပဲ ဖြေလိုက်ပါတယ်။ ဦးသာဒင်တို့ ဓမ္မာဆ ရာတွေဟာ ပိဋကတ်ကို စေ့စေ့စပ်စပ်သေသေချာချာ လေ့လာခဲ့ပုံမရပါဘူး။ သုတေသနလုပ်ဖို့ဆို တာတော့ အတော်ကလေးဝေးပုံရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်း ဗုဒ္ဓရဲ့ တရားတော်အစစ်နဲ့ စာရေးဆ ရာတွေရဲ့စာကို အားလုံးအတူတူပဲလို့ ပြောတာပေါ့ ။ အဲဒီလိုပြောကြစတမ်းဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ရဲ့ သမ္မာကျမ်းစာတွေကိုလည်း ပြောစရာတွေ အများကြီး ရှိပါတယ် ´´။
` အဲဒါတွေကို ကြည့်ရင် ခရစ်ယာန်ရှေးကျမ်းများမှာပဲ တစ်ကျမ်းနှင့်တစ်ကျမ်း ကွဲလွဲ ချက်တွေ ၊ မတူတာတွေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါတွေ လျှောက်ပြောနေကြရရင် ခရစ်ယာန်ထာဝရဘုရား ဟာ မေတ္တာနှင့်ဂရုဏာကို အရင်းခံတယ်လို့ တစ်ဖက်က ပြောပြီးတော့ တစ်ဖက်မှာ လူတွေကို မညာမတာ ရက်ရက်စက်စက် လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာတွေဟာ အများကြီး ရှိနေလေ တော့ အခုန ဆရာကြီး ဦးသာဒင် ပြောခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓ၀င်အရ ရှေ့နှင့်နောက်မညီတဲ့ အချက်များဟာ စာရေးဆရာတွေကြောင့်သာ ရှိနေတယ်ဆိုတာ လယ်ပြင်ဆင်သွားသလို ထင်ရှားလှပါတယ်။ အဲဒီ လို မညီတာထားပြီးတော့ ဦးပဇင်းတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဂေါတမဟာ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်သူ့ရဲ့အသက်တစ် ချောင်းကို သတ်ခဲ့ဖူးပါသလဲ ၊ ဖျက်ဆီးခဲ့ဖူးပါသလဲ ၊ ဗုဒ္ဓဂေါတမကို ထားလိုက်ပါဦး ၊ ဗုဒ္ဓ ဂေါတမရဲ့ တပည့်သာဝက ရဟန္တာထဲ က ဘယ်သူဟာ သူတစ်ပါးအသက်ကို သတ်ခဲ့ဖူးပါသလဲ ၊ တစ်ခု လောက်များရှိရင် တွေ့ရင် ပြောပြစမ်းပါလို့ ဆရာကြီး ဦးသာဒင်ကို ဦးပဇင်း မေတ္တာရပ်ခံလိုက်ပါ တယ် ´´။
`` အဲဒါတင် မဟုတ်ပါဘူး ။ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ရဲ့ နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော် သက်တမ်း အတွင်းမှာ ဗုဒ္ဓသာသနာတော်အတွက် ဆင်နွဲရတဲ့ စစ်ပွဲမျိူးရှိခဲ့ဖူးပါသလား။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ဟာ သာသနာပြုလုပ်ငန်းအတွက် စစ်တိုက်ခိုက်ရတယ်။ သတ်ဖြတ်ရတယ်၊ ငွေကြေးနဲ့ ရာထူးနဲ့ ဖြားယောင်းသွေးဆောင်ပြီး သိမ်းသွင်းခဲ့ရတယ် ဆိုတာမျိူးမှာ ဗုဒ္ဓသာသနာ့သမိုင်းမှာ ရှိခဲ့ဖူးပါသ လား ။ ထောက်ပြစမ်းပါ ´´ ။
`` ဆရာကြီး ဦသာဒင်တို့က အနန္တ တန်ခိုးတော်ရှင်ကြီး အနန္တမေတ္တာရှင်ကြီး ၊အနန္တဂရု ဏာရှင်ကြီး လို့ ယုံကြည့်ပြီး တဖွဖွချီးကျူးနေကြတဲ့ ထာဝရခေါ် ဋ္ဌာဝယ ဘုရားနှင့် ပတ်သက်ပြီး တော့ ဒကာကြီးတို့ အလွန်အထင်ကြီးနေတဲ့ အနောက်တိုင်းသား ခရစ်ယာန်ဆရာကြီးများက ဋ္ဌာဝယကို ဘယ်လို ချီးကျူးထားတယ်ဆိုတာ နည်းနည်းတင်ပြပါ့မယ် ´´ ။
`` ` အိပ်ခ်ျဂျီဝဲလ် ´ဆိုတဲ့ ရာဇ၀င်ဆရာကြီးက အနန္တတန်ခိုးတော်ရှင် ဋ္ဌာဝယသည် တ ကယ်ထင်ရှားရှိ၍ ဤကမ္ဘာလောကအတွင်း၌ တိုက်ခိုက်နေကြသော စစ်ပွဲများ ၊ သေကြေ ပျက်စီး ခြင်းများ စစ်နှင့်ပတ်သက်သော ကြောက်ဖွယ်လန့်ဖွယ်များကို တားဆီးခြင်းငှာ တတ်နိင်သော သတ္တိ ရှိပါလျှက်နဲ့ တမင်ဇိမ်ခံပြီး ကြည့်နေခဲ့သည်ဆိုလျှင် ကျွန်ပ်သည် ထို ဋ္ဌာဝယ၏ အဖုံးအကာ မရှိသော မျက်နှာကို တတွေးဖြင့် ထွေးမည် အမှန်ဖြစ်သည် ။ ´´လို့ ရေးသားထားပါတယ်။
`` အမေရိကတိုက်က ယူနစ်တာရီယံ ခရစ်ယာန် ဓမ္မဆရာ `သီအိုဒိုပါကား´ရဲ့ စကားကို နားထောင်ကြည့်ပါဦး ´´။
``ထာဝရသည် ခဏခဏ စိတ်ပြောင်းလဲတတ်၏ ။ လက်စားချေတတ်၏ ။ အလွန်အ ကျူး ဒေါသကြီး၏ ။ ထာဝရသည် အမျက်ဒေါသထွက်လွယ်၏ ။ အဆမတန် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် ၏ ။ မိမိအချစ်တော် ရဟူဒီ လူမျိူးတို့ကိုပင် တစ်ခါတစ်ရံ စိတ်ဆိုး၏ ။ တစ်နေ့သော် ထာဝရသည် `လူအပေါင်းတို့၏ ဦးခေါင်းကို ဖြတ်၍ ငါထာဝရအား ပူဇော်လော့´ ဟု မောရှေအားပြောသတတ်။
`` နောက်တစ်ခါ ခရစ်ယာန်ပါဒရီဒိန်း အင်းဂျိတ် ဆိုသူရေးသားသည့် အချစ်ကို လည်း ပြောပါရစေ ၊´´။
`` သူက ကမ္ဘာမြေပြင်၌ လူသတ္တ၀ါနှင့် ထာဝရ၏ ဆက်ဆံပုံသည် ယခုကျွန်ပ်တို့ တွေ့မြင်ရသမျှသာ အကုန်ဖြစ်ခဲ့လျှင် ထိုထာဝရသည် မိမိ၏ လုပ်ငန်း၌ ဖြောင့်မှန်ခြင်း ၊ ရိုးသားခြင်း တရားတို့ကို များစွာ အလေးမပြုကြောင်း ထင်ရှားချေ၏ ´´ ။ (သီဖိစ်အင်သီဝါး) ဆိုတဲ့ စာအုပ် မှာ ရေးထားပါတယ် ။ `အီဟာဘန်´ ဆိုတဲ့ စာရေးဆရာ အဘိဓမ္မာ ဆရာကြီးက `သင်တို့ ခရစ် ယာန်ဝါဒီများကို ဆိုလိုသည်´၊ သင်တို့ပြောဆိုသော အရာဟူသမျှကို ချွင်းချက်ကလေး တစ်ခုထား ပြီး ကျွန်ပ်အားလုံးကို သဘောတူပါ၏ ။ ထိုချွင်းချက်ကား သင်တို့၏ ထာဝရသည် ကျွနပ်၏ မာရ်နတ် ဖြစ်သတည်း ´´လို့ ပြောဆိုပါတယ်။
`` အဲဒါ …..ဦးပဇင်းက ဖန်တီးပြီးပြောတာ မဟုတ်ဘူးနော် ၊ ဟောဒီမှာ ဆရာကြီးတို့ အထင်ကြီးနေတဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဆရာကြီးတွေ ရေးတဲ့ စာအုပ်တွေက ကောက်နှုတ်ပြီးပြော ပြတာ ´´။
`` နောက်ပြီး ဆရာကြီးဦးသာဒင်က အနန္တတန်ခိုးတော်ရှင် ထာဝရနှင့် ဘာတန်ခိုးမှ မရှိတဲ့ ဂေါတမကို နှိုင်းယှဉ်ရဲသလား ။ နှိုင်းယှဉ်ရဲရင် နှိုင်းယှဉ်ပြပါ ။ ထာဝရထက် ဘယ်သူမှ မမြတ် ဘူးလို့ ပြောသွားပါတယ်´´ ။
` အဲဒီလိုဆိုရင် ဆရာကြီးတို့ရဲ့ ထာဝရဂုဏ်တော်တွေကို သမ္မာကျမ်းစာထဲမှာ ပါ အတိုင်း နည်းနည်းလောက် ထုန်ကြည့်ကြရအောင်။
၁။ အရက်သေစာတို့ကို အမြဲမှီဝဲသောက်သုံး၍ ဂျိူးကင် ၊ ချိူးကင် ၊ သိုးကင် ၊ နွားကင် ၊ တို့ကို တွင်တွင်ကြီး ကြိုက်တော်မူထသော။
၂။ ချိူးကင်နှင့် စပျစ်ရည် အရက်ကို မရခဲ့သော် အလွနအကျူး အထူး ဒေါပွ အမျက်တော်ရှလေ့ရှိ ထသော။
၃။ သဘောမကျ၍ ဒေါထသောအခါ ကြီးစွာသော ကောဓ(အမျက်)ဖြင့် တားမရ ၊ ဆီးမရ ၊ ကြိမ် ဆဲတတ်တဲ့ အလေ့ဝသီရှိထသော။
၄။ တိုက်ရေးခိုက်ရေး ၊ သတ်ဖြတ်ရေးတို့ကိုသာ အမြဲအားပေးလေ့ရှိထသော ။
၅။ မဟုတ်မမှန် ပညာရှိသတ္တ၀ါတို့ အော်ဂလီဆန်ဖွယ်ရာ တရားတို့ကို ဟောကြားခဲ့ထသော ။
၆။ ကြောက်ခမန်း၊လန့်ခမန်း၊အပြစ်အာဒီန၀တို့ကိုမေတ္တာဓါတ်အ နည်းငယ်ရှိသူတို့ပင်ကြက်သီးဖြန်း ဖွယ်ရာ ကျူးလွန်ခဲ့ထသော။
၇။ လူသတ္တ၀ါတို့ ဥာဏ်ပညာပွင့်လင်း၍ အကြောင်းအကျိူး၊ အကောင်းအဆိုး သိမြင်မည်ကို အစဉ်စိုးရိမ်ထသော ။
၈။ ဤသို့ စိုးရိမ် ခဲ့သောကြောင့် ဥာဏ်ပညာအလင်းရောင်၏ ရန်သူကြီးဖြစ်ထသော ၊ ထာဝရဘု ရားဆိုတဲ့ဂုဏ်တော်တွေ ထွက်လာပါတယ်။ အချိန်နည်းလွန်းလို့ အကျဉ်းချူပ်ထားတာပါ။ ။
၃။ ပါဏာတိပါတ သူ့အသက်သတ်ခြင်း၏ အပြစ်အာဒီန၀တို့ကို ဟောပြတော်မူ၍ ဇီဝဟိသာ၊ ဇီဝ တတျာ၊ အသက်သတ်ခြင်း ၊ ညင်းဆဲခြင်းတို့ကို တားမြစ်တော်မူထသော။
၆။ သတ်ရေး ၊ ဖြတ်ရေး ၊တိုက်ခိုက်ရေးတို့ကို (အတ္တာနံ ဥပမံ ကတွာ န ဟနေယျ နဂါတယေ)။ မိမိကိုယ်ကို ဥပမာပြု၍ သူတစ်ပါးတို့အား ငြင်းဆဲသတ်ဖြတ်ခြင်း မပြုရဟု ဟောပြော၍ အားပေးခြင်း မပြုခဲ့ထသော ။
စုအုံနေသော လူအုပ်ကြီးသည် လမ်းဖယ်ပေးလိုက်ကြသည်၊ လူကြီးတစ်ဦးက ဦးဆောင် ၍ လူတစ်အုပ် သံဃာစဉ်ရှေ့သို့ ရောက်လာကြသည်။ ဦးဆောင်လာသူ လူကြီးက ……
ဆရာတော်အရှင်ဥက္ကဌသည် ဗုဒ္ဓဘာသာသို့ ကူးပြောင်းလာသူများကို သံဃာစဉ်ရှေ့၌ ထိုင်စေပြီး စာရင်းယူစေပြီ ၊ ထို့နောက် သရဏဂုဏ် သုံးပါးနဲ့ လက္ခဏာရေးသုံးပါးတို့၏ အနက်အဓိပ္ပါယ် အကျဉ်းချူပ်ကို ရှင်းလင်းဟောပြ့ပီးနောက် နတ်မှီဆရာတော် ဦးကလျဏအား လွဲ ပြောင်းပေးလိုက်သည်။ ဆရာတော်ဦးကလျဏက သရဏဂုဏ်ကို သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်ချပေး၍ လိုက် ဆိုခိုင်းပြီး ဆောက်တည်စေသည် ၊ ထိုနောက်လိုက်ပို့သူ လူကြီးအား ရှစ်အိမ်ထောင် ဗုဒ္ဓဘသာသို့ ကူးပြောင်း ကြော်ညာခိုင်းလိုက်သည်။ ထိုပုဂ္ဂုလ်က အသံကုန်ဟစ်အော် ကြော်ညာရာ ပရိသတ်က သာဓု…သာဓု…သာဓု ….ဟု သုံးကြိမ်ခေါ်လေသည်။
မဏ္ဍပ်ပြင်ပနှင့် ဈေးဆိုင် ၊ လဘက်ရည်ဆိုင်တို့သို့ ရောက်ရှိနေကြသော ပရိသတ်သည် ကြော်ညာသံနှင့် သာဓုခေါ်သံတို့ကို ကြားရသောအခါ မဏ္ဍပ်အတွင်းသို့ ပြန်လည် ပြေးဝင်လာကြ ပြီး ချီးကျူးစကား ပြောကြားကြရာ အုံးအုံးကျွက်ကျွက် ဆူညံနေတော့၏ ။
ဆရာတော်အရှင်ဥက္ကဌနှင့် ဗုဒ္ဓဘာသာအဖွဲ့အား ဦးလှောင်၏နှမများက ဆွမ်းစားရန် ရွာ တွင်းသို့ ပင့်သွားကြသည်။ ကျန်သံဃာတော်များကား မဏ္ဍပ်၌ ပင် ဆွမ်းဘုဉ်းပေးကြသည်။
ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်များကား ဦးရွှေအောင်၏အိမ်၌ ခေါင်းခြင်းရိုက်၍ တိုင်ပင်နေကြ သည် ။ စာချူပ်အရ တစ်အိမ်ထောင် မိသားစု အားလုံး တစ်ဘက်ဘာသာသို့ ကူးပြောင်းလျှင်ပင် အရှုံးဟူ၍ ပါနေရာ ယခုရှစ်အိမ်ထောင် မိသားစု အားလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်သို့ ကူးပြောင်းခဲ့ရာ ယခု အခြေအနေတိုင်းးဆိုလျှင် မိမိတို့ဘက်က ရှုံးဖို့သေခြာနေပြီ ၊ နေ့လည် ဟောပြောပွဲတွင် ခရစ်ယာန် ဘာသာသို့ အနည်းဆုံး ဆယ်အိမ်ထောင်ပြည့်ပြည့် ပါအောင် ဆွဲဆောင်ဟောပြောနိုင်မှသာ မိမိတို့ အနိုင်ရမည်ဟု တွက်ဆကြသည်။ ထို့ကြောင့်စားသောက်ရေးကို သာမန်သဘောထားပြီး ဟောပြောရေးအတွက်သာ တိုင်ပင်ကြ၊ရေးမှတ်ကြနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေကြတော့သည်။
နေ့လည် (၁၂)နာရီတိတိတွင် ပရိသတ်ကြီးမှာ နံနက်ကအတိုင်း ပြည့်ကျပ်ပြွတ်ခဲလျှက်ရှိ သည် ၊ မေလ၏ အလွန်ပူပြင်းသည့် နေပူဒါဏ်ကို ဂရုမထားကြဘဲ ၊ ဟောပြောပွဲကိုသာပင် စိတ်ဝင် စားနေကြသည်။ ထိုအချိန်တွင် တမနက်လုံးပျောက်နေသည့် သူကြီး ဦးလှောင်သည် ၀တ်ကောင်း စားလှများ ၀တ်ဆင်လျှက် ဆုတော်ရငွေဓါးကြီးကို လွယ်ပြီး ပြုံးပြုံး-ပြုံးပြုံးနဲ့ ဇနီးသူကြီးကတော်ကို လက်ဆွဲလျှက် မဏ္ဍပ်ထဲသို့ ၀င်လာရာ ။ ပရိသတ်ပွဲကျသွားလေသည်။ ရှစ်အိမ်ထောင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဘက်သို့ ကူးပြောင်းခဲ့ပြီ ဖြစ်သဖြင့် သူပြုံးနိုင်လေပြီ ။ ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်များကား မျက်နှာမ သာယာကြပေ ။
ပရိသတ်ငြိမ်သက်သွားသည်၊ ဆရာကြီးဦးရွှေမှန်က မိန့်ခွန်းမပြောတော့သဖြင့် ၊ တောင်ငူလော ကုတ္တရာဆရာတော် အရှင်ကုဏ္ဍလကပင် သဘာပတိ မိန့်ခွန်းပြောရသည်။ သဘာပတိဆရာတော် က နှစ်ဘက်သော ပရိသတ်တို့ မနက်က ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာ နားထောင်၍ အားပေးကြသဖြင့် အလွန်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကြောင်း ယခုလည်း မနက်ကအတိုင်း ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့စွာ အားပေး နားထောင်ကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံပါကြောင်း အတိုချူပ်မိန့်ကြား၍ စည်းမျဉ်းအရ ပထမ အလှည့်ကျ သူ ဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင် အရှင်ဥက္ကဌုကို ဖိတ်ခေါ်လိုက်လေသည်။
ဆရာတော်အရှင်ဥက္ကဌသည် သမ္မာကျမ်းစာများနှင့် မှတ်စုများကိုယူ၍ ဟောပြောမည့် စင်မြင့်ပေါ်သို့ တက်သွားသည်။ ထို့နောက် အောင်မြင်ခန့်ညားသော အသံဖြင့် ပရိသတ်ပေါက် အောင် ဟောပြောလေတော့သည်။
ဦးပဇင်းတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဂေါတမ ဘုရားရှင်ဟာ ဆင်ခြင်တုံတရားကို အများကြီး အားပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။ မည်သည့်တရားကိုမဆို မစုံစမ်း၊ မစစ်ဆေးဘဲ မယုံကြည့်ကြနဲ့လို့ ဂေါတမ ရှင်တော်ဘုရားက ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ရဲ့ (ဧဟိပဿိကော) လာလှည့် ကြည့်လှည့် စမ်းကြည့် ဆိုတဲ့ ဂုဏ်မျိူးဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ ဘယ်ဘာသာတရားမှာမှ မရှိပါဘူး။ ဒိဂုဏ်မျိူးကို ဂေါတမရှင်တော်ဘုရားရဲ့တရားတော်မှာသာ တွေ့နိုင်ပါတယ်………´´။
`` အခုလည်း ဦးပဇင်းပြောခဲ့သမျှ ဟောနေသမျှနှင့် ပြောလတ္တံ့သော စကားတွေကို ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်စွဲနှင့် မှန်တယ်လို့လည်း မယူဆစေလိုပါ ။ မှားတယ်လို့လည်း တစ်ဘက်သတ် ဆုံးဖြတ် ခြင်းကို အလျင်စလို မပြုလုပ်ကြစေလိုပါ။ လောကယုတ္တိ သဘာဝယုတ္တိ ရှိမရှိ စဉ်းစားဆင်ခြင်၊ စုံစမ်း စစ်ဆေးပြီးတော့မှ ယုံကြည်စေချင်ပါတယ်…..´´။
`` ကဲ……ဒီတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း ဦးပဇင်းအကျဉ်းချူံးပြီး ရှင်းရှင်းတင်ပြပါမယ်.။
+ ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုသည်မှာ ဘာလဲ ?
+ ဘာကိုရည်မှန်းပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ကြသလဲ ?
+ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ဟာ ဘာလဲ ?
+ အဲဒီပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ ဘယ်တရား ၊ ဘယ်အကျင့်များဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်သလဲ?
+ လောကီအနေဖြင့် ဘာအကျိူးရှိသလဲ ?
+ လောကုတ္တရာ အနေဖြင့် ဘယ်လိုဖြစ်သလဲ ?
`` ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာ ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း (၂၅၀၀)လောက် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာ အ ထောက်အထား ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ပွင့်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဘယ်ဘာသာတရားမှာမှ မရှိတဲ့ သစ္စာလေးပါး အမှန် တရားကို ဆရာမကူ သယမ္ဘူဥာဏ်တော်နှင့် မိမိအလိုလို ကိုယ်တော်တိုင် ထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူခဲ့ တဲ့အတွက် ဗုဒ္ဓအမည့် ဘွဲ့တော်ရှိတဲ့ ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရဲ့ အဆုံးအမဒေသာနာတော်ကို ယုံ ကြည်လိုက်နာပြီး ဆည်းကပ်ခံယူတဲ့ ဘာသာဝါဒ ဖြစ်ပါတယ်….´´။
`` အနန္တ၀ါဒအရ ဒီလောကသုံးပါးမှာ ဘာတစ်ခုမှ အစိုးရခြင်းမရှိပါဘူး ၊ မိမိရဲ့သား သမီး စီးပွားဥစ္စာကို မဆိုထားနဲ့ ၊ မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုပင် အပိုင်စိုးနိုင်ပါ၊ ကိုယ်က မစိုးပိုင်သလို ဘယ်သူဘယ်ဝါကမှလညး စိုးပိုင်နိုင်တဲ့ အခွင့်အလမ်း မရှိပါဘူး ။ အဲဒီမပိုင်စိုးတဲ့ တရားစုတို့ တည် နေရာ မှီရာဖြစ်တဲ့ ဒီသံသရာမှ ကင်းလွတ်ရာသည်သာလျှင် ဇာတိ၊ ဇရာ ၊ ဗျာဓိ ၊မရဏ ၊သောက၊ ပရိဒေ၀ ၊ဒုက္ခ ၊ ဒေါမနဿ ၊ဥပါယာသ တို့ရဲ့ ကုန်ရာငြိမ်းရာ ဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည်လက်ခံထားပြိး အားထုတ်တဲ့ ဘာသာဖြစ်ပါတယ်…´´။
`` ဘယ်ဘုရား ၊ ဘယ်iဒ္ဓိပါတ်ရှင်ကမျှ ကယ်တင်လိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်တောင့်တ နေတဲ့ ဘာသာမျိူးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်အားကိုယ် ကိုးပြီး ကိုယ့်ဒုက္ခအသီးသီးမှ ချူပ်ငြိမ်း အောင် ကိုယ့်ဟာကို အားထုတ်သွားရတဲ့ လုပ်ငန်းသာလျှင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ဗုဒ္ဓ၀ါဒမှာ ရှိပါတယ်။ ဒါ ကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ အားထားမှု မရှိပါဘူး၊ ဓမ္မသက်သက်သာ ရှိပါတယ်၊ ပြုပြင်ပြောင်း လဲမှု သင်္ခါရတို့ရဲ့ ကုန်ရာ ငြိမ်းရာ အသင်္ခတ သည်သာ ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ ပန်းတိုင်ဖြစ်ပါတယ်´´။
`` ဦးပဇင် အခုပြောတာတွေဟာ ပုဂ္ဂလဓိဋ္ဌာန်စွဲနဲ့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဦးပဇင်းပြော တာတွေကို လောကယုတ္တိ သဘာဝယုတ္တိ ရှိ/မရှိ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ဖြင့် ပရိသတ်များ စဉ်းစားဆင်ခြင် သုံးသပ်ကြဖို့ တင်ပြရခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်´´။
`` ယခုလို ယှဉ်ပြိုင်ပြောရတော့ ဦးပဇင်းအနေနဲ့ နိုင်ရင်ပြီးရောဆိုပြီး အကြောင်းနှင့်အ ကျိူးမစပ်တဲ့ စကားတွေ၊ အဓိပ္ပါယ်ကင်းမဲ့တဲ့ သဘောထားတွေကို ဦးပဇင်းမပြောပါဘူး။ ဦးပဇင်းတို့ ဗုဒ္ဓတရားတော်များဟာ အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ စကားမျိူးတွေကို တရားသဘောနှင့် လက်ခံယုံကြည်တာ မျိူးမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ့် သဘာဝနှင့် ကိုက်ညီမှသာ ဦးပဇင်းတို့ရဲ့ မူလဗုဒ္ဓဂေါတမဘုရားဟာ တ ရားတော် အဖြစ် ဟောပါတယ်။ ပြောခဲ့ပါတယ်´´။
``အဲ……. ဒါပေမဲ့ ဘုရားဟောမဟုတ်ပဲနဲ့ ဘုရားဟောဆိုပြီး နောက်ရေးတဲ့ ကျမ်းများမှာ ပါတာတွေ ရှိသပေါ့လေ။ ဗြဟ္မဏ၀ါဒီတွေးက ထိုးသွင်းထားတာတွေ လည်း ရှိပါတယ်။ ဒါမျိူးတွေ ကတော့ ဦးပဇင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းများမှာသာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခရစ်ယာန်ကျမ်းတွေမှာလည်း နောက်စာရေးဆရာများ ရေးတဲ့ကျမ်းတွေ နောက်ပေါ်လက်သစ်အာဘော်တွေ အမျိူးမျိူးတိုးပွားလာ ကြတာကိုဒီမှာရောက်နေကြတဲ့ ဓမ္မဆရာကြီးများလည်း သိကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မနက်ကလည်း ဦးပ ဇင်း ပြောသင့်သလောက် ပြောခဲ့ပါတယ်။ အခုနည်းနည်းထပ်ပြီး ပြောပါဦးမယ်´´။
`` ဘယ်လောက်ထိအောင် ဓမ္မကျမ်းစာနှင့်တကွ မူလခရစ်တော်ရဲ့ မေတ္တာနဲ့ ဆန့်ကျင် တဲ့ ကျမ်းများ ပေါ်လာသလဲဆိုရင် ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၂၃၃ ခုနှစ်လောက်မှာ န၀မမြောက် (ပုပ်ရဟန်း မင်းကြီး ``ဂရီဂေါ်ရိ´´လက်ထက်မှာ `အင်န်ကွီဇီးရှင်း´) ဆိုတဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြီးကို ထာဝရဘုရား အလိုတော်ကျ ဆိုပြီး ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်´´။
` အဲဒီ အချိန်တုန်းက ဥရောပနိုင်ငံအားလုံမှာ ရှိနေကြတဲ့ ဘုရင်တွေ ၊ အာဏာပိုင်တွေ ဆို တာကလည်း ရိုမန်ကစ်သလစ်ဂိုဏ်းဝင်တွေဆိုတော့ နာယက ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီးရဲ့အမိန့်ကို အားလုံးပဲ လိုက်နာရိုသေခဲ့ကြရပါတယ်´´။
`` အဲဒီတွင်ပဲ ပုပ်ရဟန်းမင်းရဲ့ အမိန့်အရ ဘာသာရေး ဘန်းပြပြီး ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးတွေ ဟာ သက်ဦးဆန်ပိုင် ဘုရာသဖွယ် ဥရောပလူသားလောကကြီးကို အတော်ပဲ ရက်ရက်စက်စက် ကိုယ်ကျိူးရှာသွားကြတာတွေ အများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်´´။
``အဲ….ခုနင်က (အင်န်ကွီဇီးရှင်း) ဆိုတဲ့ စကားရဲ့အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ဘာလည်းဆိုရင် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို မယုံကြည်တဲ့ အပြစ်တစ်စုံတစ်ရာကို ပြောတဲ့လူကို အပြစ်ဒါဏ်ပေးမယ်၊ ဒီလို အပြစ်ပေးရုံတင် မကဘူး ၊ နောက်ဘ၀မှာ လည်း ငရဲက မတက်ရအောင် ဒါဏ်ခတ်ခံရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်´´။
`` ဒီတော့ ဘာတွေဖြစ်သလဲဆိုရင် ပုပ်ရဟန်းမင်းရဲ့ အမိန့်အရဆိုပြီး ခရစ်ယာန်ဘာသာ ကို မယုံကြည့်တဲ့ လူ့တွေကို နှိ်ပ်စက်လိုက်ကြတာ ပြင်သစ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်းမှာ ရှိတဲ့ (လန်ဝူးဒေါ်)နယ်က(အဲလ်ဘီးရှား) လူမျိူးတွေမှာ ဆိုရင် မိန်းမ ယောင်္ကျား နို့စို့ကလေးပါမကျန် မီး လောင်တိုက်သွင်းပြီး အသတ်အဖြတ်တွေ ခံကြရပါတယ်´´။
`` အဲဒါ ဦးပဇင်းက အရမ်းပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး ၊ ဥရောပရာဇ၀င်က အခိုင်အမာ ပြောတာ ပါ မယံရင် ခရစ်ယာန်ဘာသာနှင့် ဥရောပသမိုင်းစဉ်ကို ဖတ်ကြည့်ပါ ၊ အခု ဒီဓမ္မဆရာကြီးတွေ ငြင်းကြမလား ၊ ငြင်းနိုင်ရင်ငြင်းပါ ၊ မနက်က ဓမ္မဆရာကြီး ဦးသာဒင်က ပြောသွားတယ်၊ သူတို့ရဲ့ ဓမ္မကျမ်းစာတွေက လူသားလောကကြီးရဲ့ ကောင်းစားရေးနဲ့ တမလွန်ကောင်းကင်ဘုံးကောင်းစား ရေးတွေကို မေတ္တာဆိုတဲ့ ကြီးမားသော ကရုဏာကြီးနဲ့ ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဘာသာဖြစ်လို့ အလွန်ကောင်းပါတယ်လို့ ပြောသွားပါတယ်´´။
`` ဒီဓမ္မဆရာကြီးတွေလည်း တစ်နေ့ ဒီလိုများ (အင်န်ကွီဇီးရှင်း) ဥပဒေကြီးကို မြန်မာပြည် မှာ လုပ်ဦးမှာလား မပြောတတ်ပါဘူး´´။
`` ဦးပဇင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာတွေတော့ အကုန်သေကြရမှာပဲ ထင်တယ်။ ဒိဋ္ဌစစ်ဆေးပုံ၊ အပြစ်ပေးပုံတွေကလည်း ရာဇ၀င်သမိုင်းမှာ အလွန်ပဲကြမ်းလှပါတယ်။ ဒါတွေကို အထူးမပြော တော့ပါဘူး စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းလွန်းလို့ပါ (ချက်ကိုစလိုဘေးကီးယား)မှာဆိုရင် ခရစ်ယာန်တွေ ကိုထပြီး ပုန်ကန်လိုက်တာ ဥရောပတစ်ခွင်လုံး အတော်ပဲ ကူးစက်သွားလို့ စစ်ကြီးတွေ ဖြစ်လိုက်ကြတာ အကြာကြီးပါပဲ ´´။
`` သေလိုက်ကြတာတွေလဲ မနည်းပါဘူး။ ဒါဟာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ စေတနာနဲ့ ယုံကြည် ချက်ကို လက်မခံဘဲ ၊ အတင်းယုံကြည့်အောင်ပြုလုပ်တဲ့ အဓမ္မစနစ်ကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်´´။
`` အဲဒီ ပွဲတွေမှာ ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီးတွေရဲ့ အမိန့်နဲ့ အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့ပြီးသတ်ပုံ ကို ပြောရရင် ဟောဒီပရသတ်ကြီး ကြက်သီးထလောက်ပါတယ်။ လူပေါင်းသန်းနှင့်ချီပြီး အသက် တွေ စွန့်ခဲ့ရတယ် ၊ နောက်ပိုင်းမှာ လူတွေကို ဒီနည်းနှင့် လုပ်လို့မရမှန်း သိလာတော့မှ ကျမ်းတွေကို တမျူိးတဖုံ ပြောင်းလဲပြီး (မာတင်လူသာ) အစရှိတဲ့ ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေက ရေးကြပြီး အသစ်ပြန်လုပ်ကြတယ်´´။
`` ဒါတောင် (မာတင်လူသာ)ကို ရိုမန်ကက်သလစ်တွေက ဒိဋ္ဌိ စာရင်းထဲ ထည့်လိုက်ကြ သေးတယ်။ လူထူတွေက တောင့်ပြီး ခံပေးလိုက်လို့သာ အခု (လူသာရင်း) ဂိုဏ်းကြီးအဖြစ်နဲ့ ခရစ်ယာန်ဘာသာကြီး အဖြစ်နဲ့ ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာကြီးတစ်ရပ် ရပ်တည်နေနိုင်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်´´။
`` ဒါဟာ ကျမ်းပြုဆရာတွေက ခရစ်ယာန်ကျမ်းတွေကို ကိုယ်ကျိူးကြည့်ပြီး လောဘဇော နဲ့ ထင်ရာတွေကို ဘုရားဟောလုပ်ရေးကြလို့ (အင်န်ကွီဇီးရှင်း) ဖြစ်ပေါ်လာကြရတာပဲ ။အဲ… ဦးပဇင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာလည်း နည်းနည်းပါးပါး ကင်းတော့မကင်းပါဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်အထိ ရက်ရက်စက်စက် ဖြစ်စေတဲ့ ကျမ်းမျိူးမပါပါဘူး၊ ဦးပဇင်း အတိအလင်း ပြောရဲပါတယ်´´။
`` အခု ဓမ္မဆရာကြီးများလည်း ဘုန်းကြီးစာတွေ သင်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဘုန်းကြီးလူထွက် ပဂေးကြီး တွေပဲ ။ သူတို့လည်း အဲဒါတွေ သိလျှက်နဲ့ ခရစ်ယာန် ဖြစ်မယ့်ဖြစ်သွားရတာနဲ့တူပါတယ်။ ခရစ်ယန်(အင်န်ကွီဇီးရှင်း)ဥပဒေလောက် ရက်စက်တဲ့ ဥပဒေမျိူး ဦးပဇင်းတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ မရှိပါဘူး ၊ ဒါကိ သူတို့လည်း သိကြပါတယ်။ ဘယ့်နှယ်လဲ ဆရာကြီးတို့ မှန်တာကို ၀န်ခံကြစတမ်း ဆိုရင် ဆရာကြီးတို့ရဲ့ ခရစ်ယာန်ကျမ်းများနဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်က ကျမ်းတွေကို အကြမ်းအရမ်း ခြင်း ပြိုင်ကြရင် ဗုဒ္ဓဘာသာက ရှုံးမယ်ဆိုတာ ဆရာကြီးတို့ သိတယ်မဟုတ်လား´´။
`` ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာကြီးများကို ဦးပဇင်းအထူးမေတ္တာရပ်ခံ လိုတာကတော့ မိမိတို့ကိုယ် ပိုင်ဦးနှောက်ကို အသုံးပြုကြပါ ၊ ယုတ္တိ ရှိ/မရှိ စဉ်းစားကြပါ။ မျက်ကမ်းယုံမျူိး ၊ မျက်ကမ်းနောက် လိုက်မျိူးတော့ မဖြစ်ကြပါစေနဲ့ ၊ အကြောင်းအကျိူးဆက်စပ်မှု ၊ ယုတ္တိ ရှိ/မရှိ ဆင်ခြင်ကြပါ၊ (ဘလိုင်းဖိတ်သ်) ဆိုတဲ့ အကမ်းယုံ အရမ်းယုံကို စွန့်ပစ်ကြပါ၊ စဉ်းစားဥာဏ်ရှိသူတိုင်းဟာ ယုတ္တိကင်းတာကို ပယ်ပြီး ယုတ္တိရှိတာကိုသာ ယုံကြည့်ကြပါတယ်။ လိုက်နာလက်ခံ ကျင့်သုံးကြပါ တယ်။ ဦးပဇင်းက ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံပါလို့ မဆိုလိုပါဘူး ။ သဘာဝကျကျ ဟုတ်ထိုက်မဟုတ်ထိုက် စဉ်းစားကြဖို့ လိုပါတယ်´´။
`` ကဲ … ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်း တင်ပြပြီးတဲ့နောက် မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ထာဝရဘုရားရဲ့ သမ္မာကျမ်းစာတွေ ယုတ္တိ ရှိ /မရှိ ကြည့်ကြရအောင်´´။
` မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းအပါအ၀င် (ကမ္ဘာဦးကျမ်း)အရ ဒီကမ္ဘာကြီးကို ခရစ်မပေါ်မှီ ၄၀၀၄ ခုနှစ်မှ ထာဝရဘုရားသခင်က ဖန်ဆင်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ကဲ…..အဲဒါကို စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်……..အဲဒီခုနှစ်နှင့် အခုခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၉၃၆ ခုကို ပေါင်းထည့်လိုက် တော့ နှစ်ပေါင်း ၅၉၄၀ သာ ဒီကမ္ဘာရဲ့ သက်တန်းရှိတော့တယ် ။ အဲဒီတော့…….. ဒီစကားဟာ ဘယ်လောက်မှန်သလဲဆိုတာ ဆန်းစစ်ကြည့်ကြစို့ အခုခေတ်ပေါ် လောကဓတ်ပညာဖြင့် များစွာ ဆန့်ကျင်ကွာခြားနေပါတယ် (ဂျီဟိုလောဂျစ်)ခေါ်တဲ့ လောကဓါတ်ပညာ ပထ၀ီ ဗေဒဆရာများက တော့ ဒီကမ္ဘာရဲ့ အသက်ဟာ အဓွန့်ရှည်လှပြီတဲ့ ၊ အီဂျစ်ပြည်က (မန်မီ) လို့ခေါ်တဲ့ ဆေးဖြင့်ပြုလုပ် စီရင်ထားတဲ့ လူအလောင်းကောင်း ခြောက်များဟာ နှစ်ပေါင်း ခုနှစ်ထောင်ကျော်နှင့် ရှစ်ထောင်ရှိပြီ လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အနည်းဆုံး နှစ်ပေါင်းခြောက်ထောင်ကျော်ပြီလို့ ပြောကြပါတယ်။ (အီလူရင်းန်) လို့ ခေါ်တဲ့ ကျောက်ဆောင်များတဲ့ အသက်ဟာ နှစ်ပေါင်း ငါးသန်းကျော်ရှိပြီလို့ ပထ၀ီဗေဒ ပညာ ရှင်များက တသံတည်း ယူဆဆုံးဖြတ်ထားကြပါတယ်´´။
ကျောက်ကွင်း အရေးတော်ပုံ ``ကျောက်ကွင်းဝါဒပြိုင်ပွဲ´´ part(3)
`` ပထမနေ့မှာ ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကို ဖန်ဆင်းတယ်၊ ဒုတိယနေ့ကျတော့ မိုးမျက် နှာကျက်ဖြစ်စေ ၊ ရေနှင့်ရေခြင်း ခြားနားစေဆိုတဲ့ စကား မိန့်ကြားပြီး။ တတိယနေ့မှာ သစ်ပင်အမျိူး မျိူးကို ဖန်ဆင်းတယ် ၊ စတုတ္ထနေ့မှာ နေကို ဖန်ဆင်းတယ် ၊ အဲဒါ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း ထဲမှာ ပါတဲ့ အတိုင်းပဲ ၊ အဲဒီအထဲမှာ နေကို မဖန်ဆင်းမှီ သစ်ပင်အမျိူးမျိူးဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတာ ဆန်းမနေဘူးဘား ၊ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်စဉ်းစားကြပါ ၊ သစ်ပင်များဟာ နေရဲ့အလင်းရောင်ကို မရဘဲ မ ရှင်သန်နိုင်ဘူးဆိုတာကို ဟောဒီ ပရသတ်ထဲက တောင်သူလယ်သမားတိုင်း သိပါတယ်။ ယခုကာ လ လောကဓတ်ဆရာတွေကလည်း ချက်ခြင်းလက်တွေ့ပြနိုင်ကြပါတယ်။ ဒီတော့ကာ မိတ်ဆွေတို့ ထာဝရာဘုရားဟာ ဒီအစီအစဉ်မှ နားမလည်ရာ မရောက်ပေဘူးလား၊ စဉ်းစားကြပါ ၊ ပြီးတော့ နေမ ရှိဘဲနှင့် အလင်းရောင်ကို ဖန်ဆင်းတယ်တဲ့ ၊ ပြီးတော့ သစ်ပင်မြက်ပင်များ ရှူရှိုက်ဖို့ အောက်ဆီဂျင် +နိုက်တြိုဂျင်ဓတ်များကိုလည်း မဖန်ဆင်းခဲ့ဘူး ၊ ယခုပြောရတာက မိတ်ဆွေတို့ စဉ်းစားကြဖို့သာ ပြောရတာပါ အပြစ်ဆိုလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး ´´။
``နောက်တတိယအချက်က ထာဝရဘုရားရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဓမ္မဆရာတစ် ယောက်က ထာဝရဘုရားဟာ ပုံသဏ္ဍန်မရှိ ဂေါတမဘုရားမှာသာ ပုံသဏ္ဍန်ရှာလို့ရတယ်လို့ ဆို သွားပါတယ်၊ ထာဝရဘုရားဟာ ၀ိညဉ်တော်သက်သက် ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ ၊ ဒီမိတ်ဆွေ တစ်ယောက် သာ မဟုတ်ပါဘူး။ ခရစ်ယာန်တိုင်း အဲဒါကိုပဲ ပြောလေ့ပြောထရှိကြတယ်။ ၀ိညဉ်တော်သက်သက် သာရှိတဲ့ ထာဝရဘုရားကို ဟုတ်မဟုတ် စဉ်းစားကြည့်ကြပါစို့´´။
`` စုတ္ထအချက်က ထာဝရဘုရား နေတဲ့အရပ်ပါ ၊ ထာဝရဘုရားရဲ့နေရာနှင့် ပတ်သက် လို့ မိတ်ဆွေ ဓမ္မဆရာတို့က မပြောခဲ့ဘူး။ မပြောခဲ့ကြတာကတော့ မသိကြလို့နဲ့ တူပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ မသိသေးရင် ဦးပဇင်းကပဲ ပြောပြရသေးတာပေါ့ ။ ထာဝရဘုရားဟာ တန်ခိုးအကြီးဆုံး ဖြစ်တဲ့အတွက် ကောင်းကင်တစ်ခွင်မှာ အလှဆုံး အတောက်ပဆုံးဖြစ်တဲ့ မြောက်ဘက်ကောင်းကင် မှာ ရှိတဲ့ (အိုရီယင်) လို့ခေါ်တဲ့ ခုနှစ်စဉ်ကြယ်ရဲ့ အလယ်ဗဟိုမှာ နေသတဲ့ ၊ အဲဒါဟာ ဦးပဇင်းအ ရမ်းပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး ။ (လူးကပ်စ်အာရိဒ်) ရေးတဲ့ (အက်စ်ထရွန်နော်မီအင်န်ဘိုင်ဘယ်လ်)လို့ ခေါ်တဲ့ နေက္ခတ္တဗေဒနှင့် သမ္မာကျမ်းစာဆိုတဲ့ စာအုပ် ၊ (ဂေါ့ ဒ်စ် လင်း ပလေ့စ် ) ဆိုတဲ့ အခန်းမှာ ပါပါတယ်။ အဲဒီတော့ ထာဝရဘုရားနဲ့ နေရာ ထင်ရှားသွားပြန်တာပေါ့လေ ၊ အဲဒီစာအုပ်ကို ခရစ် ယာန်ဓမ္မ မိတ်ဆွေများ ၀ယ်ပြီး ဖတ်ကြပါ။ အမေရိကန်ပြည်၊ ကာလီဖိုးနီးယား က ထုတ်ဝေပါတယ်၊ အဲဒီ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုတော့ ဟောဒီ ထာဝရဘုရားရဲ့ နေရာကို မပြောတတ်တဲ့ ဓမ္မဆရာတွေက ကျေး ဇူးအများကြီးတင်ဖို့ ကောင်းပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့ပြောကြတဲ့ အတိုင်းသာဆိုရင် မိတ်ဆွေတို့ အင်မ တန် အထွဋ်အမြတ်ထားတဲ့ ထာဝရဘုရားမှာ နေစရာ နေရာမရှိသေးဘဲ ၊ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ အခြေအနေမဲ့ ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ် ´´။
`` ပဉ္စမအချက်ကတော့ ထာဝရရဲ့ သဘောထား ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဘက်က မိတ်ဆွေ ဓမ္မဆရာတို့က ထာဝရဘုရားရဲ့ အကြောင်းကို အကောင်းချီးပဲ ပြောချင်ကြပါတယ်။ ထာဝရဘုရား ရဲ့ မကောင်းကြောင်းကိုတော့ ဓမ္မဟောင်း ဓမ္မသစ် နှစ်ကျမ်းလုံးမှာပါ တွေ့မြင်နေရပါလျှက်နဲ့ တ မင်ရှောင်ကွင်းပြီး ပြောသွားကြပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့က မပြောကြဘဲ ဖုံးကွယ်ထားကြလေတော့ ။ ဦးပဇင်းက လှစ်ဟပြီး ထာဝရဘုရားရဲ့ မကောင်းပုံတွေကို ပြောပြပါဦးမယ် ´´။
`` ဦးပဇင်းလည်း မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ထာဝရဟာ ဘုရားဆိုတော့ အကောင်းချည်းပဲ ဖြစ်စေလိုတဲ့ စေတနာထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သမ္မာကျမ်းစာ ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ ကျတော့မှ ဘုရားနဲ့ အံမကိုက်တဲ့ မကောင်းတာတွေပါတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါက ဦးပဇင်း ပြောတာမဟုတ်ပါ ဘူး ။ သူတို့ သမ္မာကျမ်းစာအတိုင်းပြောရတာပါ ။ ဒါလည်း ထာဝရဘုရားကိုယ်တိုင်က ရိုးရိုးသား သား ၀န်ခံသွားတာလို့ ဆိုပါတယ် ´´။
`` (ငါဟာ ငြူစူသော ဘုရားဖြစ်တယ် )လို့ ထာဝရကိုယ်တိုင် တရားဟောရာကျမ်း၊ ၄း၂၄ ၌ ပြောခဲ့ကြောင်း ဓမ္မသစ်ကျမ်းမှာ တွေ့ရပါတယ်။ တစ်ခါ ဓမ္မဟောင်းကျမ်း ၊ တရားဟောရာ ကျမ်း ၇း၁၀ မှာလည်း (ကိုယ်တော်ကို မုန်းသောသူတို့ကို ဖျက်ဆီးခြင်းငှာ သူတို့၏ မျက်မှောက်၌ အပြစ်ပေးသော ဘုရားဖြစ်တော်မူကြောင်းကို သိမှတ်လော့ ) လို့ပါရှိပါတယ်။ အဲဒီကျမ်း ၇း၁၆ မှာလည်း (သင်၏ဘုရားသခင် ထာဝရဘုရားသခင်သည် သင်၌ ပေးအပ်တော်မူသော လူမျိူးအပေါင်းကို ဖျက်ဆီးရမည် ။ သင်၏ မျက်စိသည် သူတို့ကိုမသနားရ ၊ သူတို့ဘုရားအား ၀တ်မပြုရ ၊ ၀တ်ပြုလျှင် ထိမိ၍ လှဲစရာအကြောင်း ဖြစ်လိမ့် မည်) ပါရှိပါတယ် ´´။
`` နောက်တစ်ခါ ထာဝရဘုရားရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တ အဲဒီ ထာဝရဘုရားရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တ ကိုတော့ အထူးပြောနေစရာမလိုပါဘူး။ ဓမ္မာဟောင်းကျမ်း တစ်ခုလုံးကို လျှောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် မကောင်းမှုအတွက်စဉ်းစားတာတွေ မကောင်းတာလုပ်ဖို့ လုပ်ဆော်တာတွေ တိုက်တွန်းတာတွေ၊ ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တာတွေ အများကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဥပမာ ပုံစံကလေး နည်းနည်းလောက် ထုတ်ပြပါ့မယ်၊ အများစဉ်းစားနိုင်အောင်ပေါ့လေ ၊ ကမ္မာဦးကျမ်း အခန်း(၃၀)မှာ လှေကို ချောင်း ကြည့်မိလို့ ( ငါးသိန်းခုနှစ်ဆယ်)သော လူများကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သတဲ့ ၊ (၂ ၊ ၇၁ ၊ ၂၄ ၊ ၁၂) အရက်နဲ့ အမဲကင်ကိုလည်း အလွန်ကြိုက်သတဲ့ ၊ အဲဒါ (တောလည်ရာကျမ်း) အခန်း(၂၈)မှာ အထင်အရှားပါတယ် ။ နောက် လက်စားချေတတ်သတဲ့ ၊ ဒါလည်း တောလည်ရာကျမ်း အခန်း(၂၈)မှာ ပါပါတယ် ´´။
``ထာဝရဘုရားဟာ သန်းကောင်စာရင်း သဘောပေါ့လေ ၊ လူစာရင်းသာယူခိုင်းပြီးတော့ လူပေါင်းခုနှစ်သောင်းကို သတ်ပစ်သတဲ့ ၊ (၂-၇၁-၂၄-၁၅)ကိုကြည့်ပါ၊ အဲဒီကျမ်း(၃၈း၇)မှာ (ယုဒ၏ သားဦး အေရ) ကို ထာဝရဘုရားရှေ့၌ ဆိုးသောသူ ဖြစ်၍ သူ့ကို ထာဝရဘုရားက ကွပ်မျက်တော် မူ၏။ တစ်ခါ ၁၀း၁၁ မှာ ထိုအမှုကို ထာဝရဘုရား နှစ်သက်တော်မမူသောကြောင့် အောနမ်ကို လည်း ကွပ်မျက်တော်မူ၏ ၊ လို့ ပါပြန်တယ်။ အဲဒါဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အောနမ်ဟာ မုဆိုးမ မရီးကို သားသမီးရအောင် မပေါင်းသင်းလို့ပါတဲ့ ။ တစ်ခါ လူသတ္တ၀ါများ အိမ်ရာထောင်မှု ၀ါဒစိတ် ဓတ်ကို ထာဝရဘုရားက သွင်းပေးသတဲ့ ၊ (၃၀၀၊ ၂၂၊ ၂၃) လူသတ္တ၀ါများဟာ ရိုးလွန်းရင် မတတ် ဘဲနေမှာစိုးလို့လားတော့ မပြောတတ်ဘူး။ လိမ်တတ်ညာတတ်အောင် မုသာဝါဒ စိတ်ဓါတ်ကိုပဲ ထာဝရဘုရားကသွင်းပေးသတဲ့၊(၃၊၇၁၊၂၂၊၂၃)ဟေရှာလ အနာဂတ္တိကျမ်း အခန်း၁၃အပိုဒ် ၉၊၁၁၊၁၅ ၊၁၆) များမှာ ကြည့်ပါ။ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ ထာဝရဘုရား ဒေါသကြီးကြောင်းတွေ အများကြီး တွေ့ရပါလိမ့်မယ် ´´။
``လောကမှာ ရှိတဲ့ လူအတွေ လူဆွံ့တွေ ဒုက္ခိတတွေကို ဘယ်သူဖန်ဆင်းသလဲ မ ကောင်းတာတွေ အားလုံးသူပဲ ဖန်ဆင်းတယ်။ ဒါတင်မကသေးဘူး ၊ မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ထာဝရဘုရားက နှခေါင်းပြားတဲ့လူ ခြေကျိူးတဲ့လူ ၊ လည်ပင်းကျိူးတဲ့လူ စသည်တို့ရဲ့ ပူဇော်သက္ကရာကို မခံယူလိုဘူး တဲ့ တာဖြစ်ရင် နှခေါင်းပြားတဲ့လူ ၊ ခြေကျိူးတဲ့လူ စသူတို့ကို ဘာဖြစ်လို့ သူက ဖန်ဆင်းသေးလဲလို့ ဦးပဇင်းက မေးချင်ပါတယ်။ အဲဒီမှာ နှခေါင်းပြားတဲ့ လူဆိုတာ ဗမာ ၊ ကရင်၊ ချင်းတို့ကို ဆိုတယ်၊ ဗမာ၊ ကရင် ၊ ချင်းတို့ကပူဇော်လျှင် လှူဒါန်းလျှင် ထာဝရဘုရားက လက်မခံဘူးတဲ့ ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတော့ နှခေါင်းပြားလို့တဲ့ ဦးပဇင်းကတော့ ဗမာလူမျိူးဖြစ်တဲ့အတွက် နှခေါင်းပြားတာနဲ့ထာ ၀ရဘုရားကိုမယုံနိုင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့သူ ကနှာခေါင်းပြားတဲ့လူကို မုန်းတာကိုး။ ဦးပဇင်းလည်း နှာခေါင်းပြားတဲ့လူမျိူးထဲပါနေတော့ထာဝရဘုရားအလိုနဲ့ ကြည့်ရင် နှခေါင်းပြားရတာကတစ်ပြစ် ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသ၀င်အဖြစ်နှင့် ထာဝရကို မယုံကြည်မိတဲ့ အပြစ်က တစ်ပြစ် နဲ့ အပြစ်နှစ်မျိူးရှိနေတော့ ထာဝရဘုရားက တော်တော်ငြိုငြင်တော်မူမှာပဲ ထင် တယ်။ ခရစ်ယန်ဝါဒဟာ နှခေါင်းချွန်တဲ့ လူတွေအတွက် ထာဝရဘုရား ထားပစ်ခဲ့ကြောင်း ထင်ရှား နေပါတယ် ´´။
`` ပညတ်တော်(၁၀)ပါးကို ပြောသွားကြပါတယ် ။ အခု ဦးပဇင်းပြောသွားတဲ့ ကျမ်းစာ ပါ စကားများအရ လူလူချင်းတော့ မသတ်နဲ့ဆိုတဲ့ သြ၀ါဒ ပညတ်ချက်ဟာ ထာဝရဘုရားရဲ့ ဒေါသ ကို တကယ် အထောက်အကူပြုပုံ မရသလို ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘာပြုလို့လည်းဆိုတော့ သူ့မကိုး ကွယ်တဲ့လူကို စာရင်းသွင်းဟန်မတူဘူး။ မကိုးကွယ်မယုံကြည်တဲ့လူတွေကို အပြစ်ဒဏ်ခတ်ဖို့ အတော်ပဲ သေချာနေတော့ ဒီပညတ်ချက်တွေဟာ ထာဝရဘုရားနဲ့ တစ်ခြားစီဖြစ်နေပါသည်၊ ကျူပ်တို့ရဲ့ ဂေါတမ ရှင်တော်ဘုရားကတော့ ရန်သူရယ် မိတ်ဆွေရယ် မခွဲခြားပါဘူး ၊ ကြိုက်ရင်ကိုး ကွယ် ၊ ယုံကြည်ရင် ပူဇော် ဒါပဲ ၊ လူကို လူလိုပဲ သဘောထားပါတယ်။ လူက မကိုးကွယ်ရုံနဲ့ လူမ ဟုတ်တော့သလို လူစာရင်းက ဖျက်မပစ်ပါဘူး။ အဲ……ထာဝရဘုရားကတော့ သူ့ကို မကိုးကွယ် ရင် လူမဟုတ်ဘူးဆိုသလို ဖြစ်နေတာထင်ရှားပါတယ် ´´။
``နောက်နံပါတ် (၆) အချက်က ဘုရားက ဖြစ်တဲ့ဘုရားလို့ ဆိုတဲ့ကိစ္စပါ မိတ်ဆွေ ဓမ္မ ဆရာများက ဂေါတမဟာ လူကဖြစ်တဲ့ ဘုရားတဲ့ အဲဒီလိုပြောကြတယ်။ ပြောတဲ့အတိုင်းဟုတ်ပါ တယ် ၊ လူကဖြစ်တဲ့ဘုရားပါလို့ ဦးပဇင်းကလည်း ၀န်ခံပါတယ်၊ ဦးပဇင်းကသာ မဟုတ် ဗုဒ္ဓဘာသ ၀င်တိုင်းကပဲ ၀န်ခံပါလိမ့်မယ် ၊ ဂေါတမဘုရားဖြစ်တာဟာ အကျိူးတရားပါ ။ အကျိူးရှိလာတာဟာ အကြောင်းရှိရမယ်ဆိုတာကို တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ဘာသာဝင်တိုင်းက ထောက်ခံကြပါတယ် ဘုရားဖြစ်ဖို့ အကြောင်းတွေကို အကြောင်းပြုပြီးတော့ လက်တွေ့အားထုတ်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့အတွက် ဘုရားတည်းဟူသော အကျိူးတရားကို ရခဲ့ပါတယ်။ အလွန်ပဲ သဘာဝကျပါတယ် ´´။
``ဘုရားဖြစ်ဖို့ ကိစ္စကို ဂေါတမဘုရားအလောင်းတော်ဟာ အလွန်အမင်းအားထုတ် ကြိုးပမ်း တော်မူခဲ့ရပါတယ်။ ဒုက္ခတွေ အများကြီး ခံခဲ့ရပါတယ်။ စွန့်လွတ်ခြင်း အမျိူးမျိူးကို အကုန်အစင် စွန့် လွတ်ခဲ့ရပါတယ်။ တွယ်တာစရာ အစွဲအမှတ်သညာဟူသ၍ကို တစ်စုံတစ်ခုမျှ မငြိကပ်အောင် အား လုံးကို တွန်းလှန် ပစ်ခွာတော်မူခဲ့ရပါတယ် ၊ ဒီလောက် လူသားတို့က အမှန်အဟုတ်လို့ ထင်နေတဲ့ ဥပါဒါန်အစွဲအမှတ်တွေကို အမှန်အတိုင်း ဘာမှမဟုတ်တဲ့ ရုပ်နာမ်ဓမ္မသဘာဝ ဖွဲ့စည်းပေါ်ပေါက်မှု ကို တခဏတာပါလားလို့ အမှန်သိတဲ့ သဗ္ဗညုတဥာဏ်တော်ကို ရအောင် အားထုတ်တော်မူခဲ့ရပါ တယ် ။ ´´
`` ဂေါတမဘုရား ဖြစ်ဖို့အကြောင်းကို အားပြုသောအားဖြင့် ဘုရားတည်းဟူသော အကျိူး ကို ရပါတယ်။ ထိုရရှိသော တရားဟာ ဤလောကရှိ ရုပ်နာမ်သဘာဝ သက်ရှိလောကရဲ့ ဇာတိအ ဖြစ်သည် ဆင်းရဲခြင်းကို ပန္နက်ရိုက်ခြင်းပင် ဒီပန္နက်ကို အစွဲပြုပြီး ဇရာ ၊ဗျာဓိ ၊မရဏ ဆိုတဲ့ သဘာဝ ဒုက္ခကြီးတို့၏ အုပ်စိုးရာဘ၀အဖြစ်ပါကလား။ ဒီဘ၀မျိူးရဲ့ ကုန်ရာကုန်ခြင်းသည် သန္တိသုခ နိဗ္ဗာန် ဓါတ်သားအဖြစ် ရမှသာလျှင် ဖြစ်ပါကလားလို့ သိမြင်တော်မူခဲ့ပါတယ် ။ ´´
`` အဲဒါတွေကို သိနားလည်ရင် ဘယ်သူပဲ သိနားလည် သိနားလည်၊ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လောင်မြိုက်ခံရတဲ့မီးက ငြိမ်းအေးမယ်။ ကင်းလွတ်မယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ဆိုလိုရင်းကတော့ ဗုဒ္ဓရဲ့ အလိုအားဖြင့် အကြောင်းတစ်ခုရှိလို့သာ အကျိူးတစ်ခုပေါ်လာခြင်း စတဲ့ စပ်ဆက်မှုများ မဆုံးရင် သံသရာလို့ခေါ်ပါတယ်။ ´´
`` ဒီသံသရာဆိုတဲ့ အကြောင်းအကျိူးဆက် သဘာဝဒုက္ခကြီး ရှိနေသမျှ သားကိစ္စ၊ သမီး ကိစ္စ ၊ စီးပွားရေးကိစ္စ ၊ ဘ၀အသက်တည်မြဲရေး ဆိုတဲ့ ကျန်းမာရေး ၊ စားသောက်နေထိုင်ရေး ၊ ဒီစားသောက်နေထိုင်ရေးတို့ ပြည့်စုံဖူလုံသော်လည်း လျော့ပါးသွားမှာကို ပူဆွေးစိုးရိမ်ရခြင်း ၊ မပြည့်စုံသဖြင့် တောင့်တမျှော်မှန်း အားထုတ်ရခြင်းစတဲ့ ဝေါဟာရ ဒုက္ခတွေလည်း မဆုံးနိုင်အောင် ထပ်ဆက် တိုးပွား များပြားနေကြရပါတယ်။ အဲဒီတော့ အကြောင်းအကျိူးဆက် ဒီသံသရာက အကြောင်းအကျိူးကင်းတော့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရအောင် လောဘ ၊ ဒေါသ ၊ မောဟတွေကို ပယ်ကြ ပါလို့ ဂေါတမရှင်တော်ဘုရားက ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါယတယ်။ ´´
`` ဥပမာ ပုံစံပြောရမယ်ဆိုရင် ကျောင်းနေပြီး ပညာသင်ကြား အားထုတ်ခဲ့တဲ့အတွက် ဘီအေ ၊ အမ်အေ၊အိုင်စီအက်စ် စတဲ့ စာမေးပွဲတွေအောင်ပြီး ဘွဲ့ဒီဂရီတွေ ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် မြို့အုပ် ၊ ၀န်ထောက် ၊ အရေးပိုင်အစရှိတဲ့ အကျိူးတွေ ရခဲ့ပါတယ်။ ဒီပရိသတ်ထဲက အရေးပိုင် မဖြစ်ချင်တဲ့လူ ၊ ဘုရာင်ခံ မဖြစ်ချင်တဲ့လူ ရှိပါသလား။ ရှိမယ်မဟုတ်ပါဘူး ၊ အားလုံးဖြစ်ချင်ကြမှာပဲ၊သို့သော် ဘာကြောင့် မဖြစ်ကြသလဲ ၊ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းတရားတွေကို အားမထုတ်ခဲ့လို့ပေါ့ ။ သာမညလူက သူဌေးကြီးဖြစ်တာ အံ့သြစရာကောင်းတယ် ၊ သူဌေးသားက သူဌေးသားဖြစ်တာ ဘာများ အံ့သြစရာ ရှိပါ့မလဲ ။ သည်လိုပဲ လူကဘုရားဖြစ်တာ အံ့သြစရာပေါ့ ၊ ဘုရားကဘုရားဖြစ် နေဖို့ မလိုပါဘူး။ ဘုရားကဘုရား လူက လူဖြစ်တယ်ဆိုတာ အံ့သြစရာလား ၊ လူက ဘုရားဖြစ်ရင် ဘုရားက လူဖြစ်ရင်၊ လူက မျောက်ဖြစ်ရင် ၊ မျောက်က လူဖြစ်ရင် ၊ အံ့သြစရာမကောင်း ပေဘူးလား။ ´´
`` ပြောတိုင်းသာ ယုံကြစတမ်းဆိုရင် အားလုံးကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ဆိုတာတွေဟာ အလာ ကားချည်း ဖြစ်ရတော့မယ်။ လူမဆိုထားနဲ့ တိရစ္ဆာန်တောင် ယုံထိုက်မှ ယုံတာ ၊ ခွေးတစ်ကောင်ကို သူ့သခင်ယောင်ဆောင်ပြီးပြလို့ ယုံမယ်ထင်သလား။ မြင်းတို့ ၊ နွားတို့လည်း ဒီလိုပဲ ၊ ဆင်ဆိုတာ ပို တောင် ဆိုးသေးတယ်။ စီးနေကျ သူ့ဦးစီးမဟုတ်ရင် ခါချပြီး နင်းသတ်တာမျိူး ၊ ဒီအထိ သူတို့ လည်း ဥာဏ်တွေရှိတာပဲ။ ငါ - မင်သခင်လုပ်မယ် ဆိုရုံနဲ့ ရတာမျိူးတော့ ကျွန်ပ်တို့ လူသား လူတွေပဲရှိရဲ့ ဟုတ်မဟုတ် စဉ်းစားကို မစဉ်းစားချင်ကြဘူး။ လွမ်းစရာပြောရင် လွမ်းပစ်လိုက်တာပဲ ဟုတ်လို့ လွမ်းတာက နည်းနည်း ၊ လွမ်းစရာကောင်းလို့ လွမ်းကြတာပါ။ ပွဲထဲများ ကြည့်ပါလား၊ ဇာတ်ကတယ်ဆိုတာ ငှါးတဲ့သူက ပိုက်ဆံပေးလို့ လာကတာ။ ပွဲကြည့်တဲ့လူတွေက လွမ်းခန်းမှာ မျက်ရည်များသုတ်လို့ ဟိုမှာ တကယ်ဖြစ်နေတာလည်း မဟုတ်ဘူး ၊ ဇာတ်ကနေတာပါ ၊ သူ့မှာ တကယ်ဖြစ်နေတယ် အံ့ရော။ ´
အဲဒါ ကျူပ်တို့ လူမျိူးတွေပဲ ၊ဟုတ်မဟုတ် ယုတ္တိသဘာဝနဲ့လည်း နည်းနည်းတော့ စဉ်းစားကြဦးမှပေါ့ ။ ပြောတိုင်းယုံဖို့ဆိုတာ ကောင်းလည်းမကောင်းပါဘူး။ သဘာဝလည်းမကျပါ ဘူး။ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ မျက်စိ ၊ နား၊ နှာ ၊လျှာ၊ကိုယ် အတွေးနှင့်လည်း လေ့လာစဉ်းစား ကြဦးမှပေါ့။´´
`` ဘုရားက ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာ ယုတ္တိမရှိပါဘူး။ ဒါကို ကိုးကားပြောဆိုလို့ ကောင်းတဲ့ မြန်မာစကားတောင် မဟုတ်ဘူး ။ ဘုရားက ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာ ယုတ္တိကင်းမဲ့တဲ့ အတွက် ယုံကြည်ဖို့ အလွန်ခဲယဉ်းပါတယ်။ ပြောတိုင်းမယုံကြည်ကြပါနဲ့။ စဉ်းစားပြီးမှ ယုံကြပါ ။ လူတစ်ယောက်ဟာ ကျောင်းနေပြီး စာမသင်ဖူးပဲနဲ့ ဘီအေ ၊ အမ်အေ ၊အိုင်စီအက်စ် အောင်တယ် ဆိုတာ မိတ်ဆွေတို့ ယုံကြမလား။ လယ်သမားတစ်ယောက်က လယ်ထဲဆင်းလည်းမဆင်း၊ ထွန်လည်း မထွန် ၊ ပျိူးလည်း မနှုတ် ၊ ကောက်လည်း မစိုက် ၊ ရိတ်နယ်ခြင်း မပြုပါဘဲနှင့် အိမ်ပေါ် မှာ အိပ်နေရုံမျှနဲ့ စပါးရနိုင်ပါ့မလား။ ဘယ်တော့မျ မရနိုင်ပါဘူး။ လုပ်မှကိုင်မှ ရကြတယ်ဆိုတာ အထင်အရှားပါ။ အခုလည်း ဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဘုရားဖြစ်ဖို့ လုပ်ငန်းများကို မလုပ်ပါဘဲနဲ့ ယုတ္တိရှိပါ့မလာား၊ ယုတ္တိမရှိပါဘူး။ အဲဒီလို ယုတ္တိ မရှိတာကို ယုံသင့် မယုံသင့် စဉ်းစားကြည့် ကြစမ်းပါ။ ´´
`` ထာဝရဘုရားကတော့ သူ့သာ ယုံကြည်ကိုးကွယ် ဘာမှမပူနဲ့တဲ့။ ကဲ ယုံကြမလား၊ ယုံနေတဲ့သူတွေ အခုဒီမှာ အများကြီးပဲ ထာဝရပေးလို့ရတဲ့ ဆန်စပါး ဘယ်နှစ်ယောက် စားရဖူးသလဲ။ ကိုယ့်ဟာကို လုပ်လို့ရတာသော်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ ရှာကြံလို့ ရရှိတဲ့ ပိုက်ဆံနှင့် တန်ရာတန်ကြေးပေးမှ ရရှိကြတာချည်း မဟုတ်ပါလား။ ဦးပဇင်းတို့ရဲ့ ဂေါတမရှင်တော် ဘုရားကတော့ (အတ္တာဟိ အတ္တာနော နာထော) တဲ့ ၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကို ကိုးကြတဲ့ ။ ကဲ …ဒီတော့ ကာ လက်တွေ့မှာ ကိုယ်လုပ်မှ ကိုယ်ရတာကို ထင်ရှားမနေပေဘူးလား။ ဘယ်ဘုရားဟောတာက ခုလူတွေမှာ လက်တွေ့မှန်သလဲ ၊ ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာကြီးတွေ ပြောသလို ထာဝရဘုရားမှာ တန်ခိုးတော် အနန္တရှိတယ်ဆိုရင် ဒီဓမ္မဆရာကြီးတွေ ကိုယ်တိုင် ဒီထိအောင်ပင်ပန်းခံပြီး လာနေစရာတောင် မလိုဘူး။ အိမ်ကနေပြီး ထာဝရဘုရားကို တိုင်တည် ဆုတောင်းလိုက်ရင် အားလုံးကိစ္စ ပြီးနေတော့မယ် မဟုတ်လား။ ဦးပဇင်းတို့လည်း သူတို့ရဲ့ ဆုတောင်းပြည့်သွားတဲ့အတိုင်း ရှုံးပြီး အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်နေရုံပဲ ရှိတော့တယ်။ ဘာမှကို ပြောနေစရာမလိုတော့ဘူး မဟုတ် လား။ ´´
`` နောက်တစ်ခါ သတ္တမအချက်က သုံးခုတစ်ဆူ ဘုရားဆိုတဲ့ ကိစ္စ ၊ ဓမ္မဆရာ တစ် ယောက်က ခမည်းတော်၊သားတော်၊သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော်အားဖြင့် သုံးခုပေါင်း ဘုရားတစ် ဆူ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောသွားတယ်။ ခမည်းတော်ဆိုတာက ထာဝရ၊ သားတော်ဆိုတာက ယေရှုခရစ် လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ထာဝရနှင့်ယေရှုခရစ်တို့ဟာ တူပါတယ်တဲ့။ မတူတဲ့အကြောင်းကို ဦးပဇင်းက ပြောပြရသေးတာပေါ့ ၊ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းက ထာဝရဘုရားက လက်စားချေဖို့ ဟောတယ်။ ကိုယ့်သွားတစ်ချောင်းကို ချိူးရင် သူ့သွားတစ်ချောင်းကို ချိူးပစ်ရမယ်တဲ့။ ကိုယ့်မျက်လုံးတစ်လုံကို ဖေါက်ရင် သူ့မျက်လုံးတစ်လုံးဖေါက်ရမယ်တဲ့။ (အn ဧyဧ for အn ဧyဧ) ဆိုတဲ့ တရားပေါ့ ။ အဲဒါဟာ ခမည်းတော် ထာဝရဘုရားရဲ့ တရားပါပဲ။ အဲ….သားတော် ယေရှုခရစ်ကတော့ လက်စားမချေဖို့ ၊သည်းခံဖို့ဟောတယ်။ ညာဘက်ပါးကို ရိုက်လာလျှင် ဘယ်ဘက်ကပါးကိုပါ အရိုက်ခံလိုက်ပါတဲ့ ။ အဲဒီတော့ ခမည်းတော်နှင့် သားတော် ကွဲမနေပေဘူးလား။ ဟောတဲ့တရား ဟာ ဒီလောက်ကွဲနေရင် တူတယ်ဆိုတဲ့ စကားဟာ မဟုတ်နိုင်တော့ဘူး ။ ယေရှုခရစ်ဘာ့ကြောင့် ဘာလုပ်ဖို့လာသလဲ၊ ဆိုတဲ့ကိစ္စကို ကြည့်ရင် အလွန်ှရှင်းနေပါတယ်။ သတ္တ၀ါအများကို ကယ်တင် ရန် လာတယ်လို့ပြောတယ်။ အဲဒီသတ္တ၀ါဆိုတာ အကုန်လုံးကို မဟုတ်ဘူး။ iသရေလ(ဂျူး)လူမျိူး တို့ကိုသာ ဆိုလိုတာပါ။ ဗမာ၊ကရင်၊ချင်းတို့ဟာ ဒီအချက်ကို အထူးသတိပြုဖို့လိုပါတယ်။ နက်နက်နဲ နဲ စဉ်းစားကြ ဖို့ကောင်းပါတယ်။ (ရှင်မဿဲ ခရစ်ဝင်) အခန်း(၁၀)၊အပိုဒ်(၅)မှာ သင်တို့သည် တစ်ပါး အမျူိုးသားတို့ ရှိရာသို့ မသွားကြနှင့် ရှမာရိ(ဆမားရိယန်း) မြို့ရွာထဲသို့ မ၀င်ကြနှင့်၊ iသရေလအမျိူး ပျောက်လွင့်သော သိုးများရှိရာသို့ အရင်သွားကြလော့လို့ ယေရှုကိုယ်တိုင် ပြော ခဲ့တဲ့ စကားကိုထောက်ရင် တခြားလူမျိူးတွေအတွက် ခရစ်တော် ပေါ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ iသရေလူမျိူးများအတွက်သာ ပေါ်လာတာထင်ရှားပါတယ်။ ´´
`` ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရား ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာ ကမ္ဘာသူ၊ကမ္ဘာသား လူမျိူးမခြား၊ အားလုံး အတွက်ဖြစ်ကြောင်း ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်တဲ့ အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ (ဗုဒ္ဓေါ့ လောကေ သမုပ္ပန္နော ဟိတာယ သဗ္ဗပါဏိနံ၊ ဗုဒ္ဓေါလောကေ ဥပ္ပဇ္ဇတ ဗဟုဇနဟိတာယ သုခါယ အတ္ထာယ)အစရှိတဲ့ လောကတစ်ခုလုံးအတွက် ဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း အဆိုအမိန့် အထောက်အထားတွေ အများကြီး ရှိပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဦးပဇင်းတို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓရှင်တော်ပေါ်လာရခြင်းကတော့ ခရစ်တော်နှင့်မတူဘဲ ကမ္ဘာသူ ၊ ကမ္ဘာသား ဆိုရင် ဘယ်လူမျူိုးပဲဖြစ်ဖြစ် သတ္တ၀ါအားလုံးအတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါက ဘယ်သူမှ မငြင်းနိုင်တဲ့ အချက်ဖြစ်တယ်။ ဟောဒီဓမ္မဆရာကြီးများလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော် များကို သိပြီးနားလည်ပြီး ပုဂ္ဂိုလ်များ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်နေရာ ဘယ်ပါဠိတော်များမှ ဗုဒ္ဓရှင်တော် ဘုရားဟာ သတ္တ၀ါခဲခြားမှု ငါ့ကိုသာ ကိုးကွယ်ကြ ၊ ငါ့ကို မကိုးကွယ်တဲ့လူကို သတ်ကြ၊ ဖြတ်ကြလုိ့ ဟောတဲ့ စကားလုံးများ တွေ့ဖူးကြပါသလား။ ပါတယ်ဆိုရင် အခုထောက်ပြကြပါ။ ဦးပဇင်းက အရှုံး ပေးလိုက်ပါ့မယ် ။´´
``သူဟောတဲ့တရားကို လိုက်နာကျင့်သုံးသူ ၊ သူညွန်ပြတဲ့ တားမြစ်ချက်ကို မလုပ်ဘဲ ရှောင် ကြဉ်သူ မည်သူမဆို နှာခေါင်းချွန်သူဖြစ်၊ လုံးသည်ဖြစ်စေ၊ ပြားသည်ဖြစ်စေ ၊ ဧကန်မုချ သံသရာမှ လွတ်ခွင့်ရမယ်တဲ့ လက်တွေ့သိချင်ရင် လူ့လောက ကိလေသာကုန်ရေး တရားကို အားထုတ်ကျင့် ကြံကြည့်ပါ။ မှန်တာတွေချည်း ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါ့မယ်။ အဲဒီတရားကို တကယ်ယုံကြည်လို့ အားထုတ်ရင် တကယ်ပင် ဒီဝဋ်ဆင်းရဲတို့ရဲ့ ဒုက္ခသား လောကီဘုံကနေရင်း ငုတ်တုတ်တစ်ဆက် တည်း ငြိမ်းချမ်းမှု အမှန်ကိုတွေ့ရမယ်။ သံသရာက လွတ်ထွက်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါဟာ ဗုဒ္ဓဂေါတ မတရဲ့ သန္ဒိဋ္ဌိက ၊ အကာလိက တရားတော်ရဲ့ ဂုဏ်နဲ့အညီဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင် ကျင့်ရင် ကျင့် သူ ရမယ်။ သူတစ်ပါးကို လုပ်ပေးလို့ မရဘူး။ ကိုယ်လွတ်မြောက်ရေးအတွက် သူတစ်ပါးကလည်း လုပ်ပေးလို့ မရပါဘူး ။´´
`` ကိုယ့်အဖို့ ထမင်းဝချင်ရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် စားမှ ထမင်းဝမယ် ဆိုတဲ့စကားဟာ ဗုဒ္ဓဘု ရားရှင်ရဲ့ဝါဒ အဆိုအမိန့်နှင့် ကိုက်ညီတဲ့စကားပေါ့ ။ အဲဒီ ရှင်မဿဲ ခရစ်ဝင် အပိုဒ်(၃၄)ရောက် တော့ ခရစ်ပေါ်လာရခြင်းအကြောင်းကို ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်က အတိအလင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ မြေပေါ်သို့ ငြိမ်သက်ခြင်းကို စေလွတ်အပ်သောငှာ ငါလာသည်ဟု မထင်ကြဟု ၊ ငြိမ်သက်ခြင်းကို စေလွတ်အပ်သောငှာ ငါလာသည်မဟုတ် ၊ ဓါးကို စေလွတ်အပ်သောငှာ ငါလာသတည်း ၊ တဲ့ အခန်း(၃၅)မှာတော့ (အဖနှင့်သား၊အမိနှင့်သမီး၊ယောက္ခမနှင့်ချွေးမအချင်းချ င်း ကွဲပြားစေ ချင်းငှာ ငါလာသတည်း) - အဲဒါ ယေရှုခရစ်တော်ပေါ်လာရတဲ့အကြောင်းပါပဲ။ အလွန်ရှင်းနေပါ တယ်။ ´´
`` ဘာလုပ်ဖို့လာတယ်ဆိုတာ စဉ်းစားစရာလိုသေးသလား ၊ ဦးပဇင်းက တမင်ထွင်ပြီး တော့ ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျမ်းစာအထဲမှာ ပါတဲ့အတိုင်း ပြောရတာပါ ။ iသရေလ လူမျိူးမှ တစ်ပါး အခြားလူမျိူးကို ငါကယ်တင်ရန် လာသည်မဟုတ်။ ဓါးကို စေလွတ်ရန်လာတယ်ဆိုတော့ ပြောရမှာတောင် တော်တော်ခက်ပါတယ်။ အေး…..တစ်ခုတော့မှန်ပါရဲ့ အချင်းချင်းကွဲပြားစေရန်၊ မုန်းတည်းစေရန်လာတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ယေရှုဘာသာကို ယုံကြည်ကြတဲ့နေ့ကစပြီး ဗမာအချင်း ချင်းလည်း ကွဲရတယ်၊ ကရင် ချင်းတို့လည်း ကွဲကြရတယ်။ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေလည်း ပျက် ပြားရတယ်။ အနေအစားလည်း ကွဲတယ် ၊ အယူအဆလည်း ကွဲတယ် ၊ သွေးစည်းမှုလည်းကွဲလို့ ပျက်နေပြီ ၊ အဲဒါ ခရစ်ယာန်ဝါဒရဲ့ အကျိူးပဲပေါ့။ ´´
`` နီပေါလ်ပြည်မှာ `သမ္မာကျမ်းစာနောက်က `ဓါး´ပါတယ် ´ ဆိုတဲ့စကားပုံရှိတယ်။ ခရစ်ယာန်သာသနာပြုရဲ့နောက် အုပ်ချူပ်တဲ့ အစိုးရ လိုက်လာတယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ ဗမာပဲ ချင်းပဲ ကရင်ပဲလို့ ကွဲပြားနေတာဟာ ခရစ်ယာန်ဝါဒကြောင့်လို့ အတတ်ဆိုစရာ ဖြစ်မနေပေဘူး လား။ ဦးပဇင်းကိုယ်တိုင်ကတော့ မိတ်ဆွေ ဓမ္မဆရာများနှင့်တကွ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင် မြန်မာ ၊ ကရင် ၊ချင်းတို့ကို ဘာသာအယူဝါဒပင် ကွဲပြားနေသော်လည်း တပြည်ထဲက မွေးပြီး တမိထဲက ပေါက်ဖွားတဲ့ သွေးတူသားတူ တွေမို့ မုန်းတီးဖို့ ဟောတဲ့တရားကို မလိုက်နာလိုပါဘူး ။ ဦးပဇင်းအ နေနဲ့ ဒီကွဲနေတဲ့ စိတ်ထား စေတနာတွေကို စဉ်းစားမိပြီး သဘောပေါက်နေလို့ ကိုယ့်သွေးသားချင်း တွေပဲ ဆိုတဲ့အနေနဲ့ မမုန်းတော့ မမုန်းပါဘူး၊ ဘာသာဆိုတာကတော့ ကြိုက်တာယုံပေါ့၊ ယူကြပေါ့ လူမျိူးခြင်းအနေနဲ့ ဘာသာရေး အကြောင်းပြုပြီး ကွဲရတာမျိူးတော့ ဦးပဇင်းမကျေနပ်ဘူး။ ကွဲခံရ တာကို မကျေနပ်တာကို ပြောတာပါ ၊မုန်းတော့ မမုန်းပါဘူး။ ´´
`` ဦးပဇင်းရဲ့ ဂေါတမကတော့ မုန်းတီးဖို့ မဟောခဲ့ဘဲ ၊ ချစ်ဖို့ကိုသာ ဟောတော်မူခဲ့တာကိုး၊ မုန်းတာဟာ မကောင်းပါဘူး။ ဘာသာရေးဆိုတာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စမို့ အရမ်းမယုံဘဲ နက် နက်နဲနဲ အထူးစဉ်းစားကြဖို့ လိုပါတယ်။ မစဉ်းစားရင် မှားတတ်ပါတယ် ၊ လူတိုင်းမှာ လွတ်လပ်ခွင့်ရှိ လို့ ယုံချင်တာကို ယုံနိုင်ပါတယ် ။ အခုဦးပဇင်းပြောတာကို ယုတ္တိ ရှိ/မရှိ အကျိူးအကြောင်း ညီမညီ ကိုသာ စဉ်းစားဖို့ ပြောတာပါ။ စဉ်းစားပြီးမှ ယုံဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ဦးပဇင်းရဲ့ ၀ါဒကတော့ ကိုယ်လည်းအရမ်းမယုံချင်ဘူး။ သူများကိုလည်းပဲ အရမ်းမယုံစေချင်ဘူး။ နည်နည်းတော့ စဉ်းစား စေချင်ပါတယ်။ အဲ…ဒါပေမယ့် ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ အမှားအမှန်ကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားမယ် ဆိုရင်တော့ ဦးပဇင်းက ပြောပါ့မယ်။ မှားသလား၊မှန်သလား ၊စဉ်းစားကြပေါ့လေ။ ဦးပဇင်းရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ဆင်ခြင်တုံ တရားကို အများကြီးအားပေးတဲ့ဘာသာဖြစ်ပါတယ်။ ´´
`` ကိုယ့်ဘာသာ မယုံလို့ တစ်ဘက်ဘာသာဝင်တွေကို သတ်လားဖြတ်လား ဘယ်တော့ မလုပ်ပါဘူး၊ ယုံရင်လိုက်နာကိုးကွယ်ကြ မယုံကြည်ရင်လည်းနေပေါ့ ၊ ဦးပဇင်းတို့ ဘုရားရဲ့ဝါဒအရ ဦးပဇင်းတို့က မျက်နှာမပျက်ပါဘူး။ ဦးပဇင်းတို့ရဲ့ ဇရပ်တွေ ကျောင်းတွေရှိတယ်၊ ဘယ်ဘာသာဝင် ပဲဖြစ်ဖြစ် လာနိုင်တယ်၊ တည်းခိုနိုင်တယ်။ ဦးပဇင်းတို့က မရှိ ရှိတာတောင် ကျွေးမွေးပါဦးမယ်။ ကိုယ့်ဘာသာ ယုံကြည်ကြပါလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒုက္ခဖြစ်နေရင်၊ ခိုကိုးရာမရှိဖြစ်နေရင် ။ ဘယ်လူမျိူး ပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူသားချင်းချင်းကို ဦးပဇင်းတို့က မျက်နှာမပျက်စေပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကလည်း ၊ သဗ္ဗေသတ္တာ သတ္တ၀ါအကုန်လုံးကို မေတ္တတူထားပါတယ်။ ဒါလည်း ဒီခရစ်ယာန်ဘက်က ချေပကြ မည့် ဓမ္မဆရာကြီးတွေ သိပြီးသားပါ ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လား။´´
`` ဦးပဇင်းတို့ရဲ့ ဂေါတမရှင်တော်ဘုရားဟာ အထင်အရှားပွင့်တော်မူခဲ့ကြောင်း ပါဠိတော်တွေ အဋ္ဌကထာတွေ အစရှိတဲ့ ပါဠိဘာသာကျမ်းစာတွေကို ဖယ်ထားလိုက်ဦးတော့၊ အိန္ဒိယ ရှေးရာဇ၀င်များအရပဲ ထင်ရှားနေပါပြီ ၊ ရှေးဟောင်းရှာဖွေလေ့လာရေး သုတေသနဌာနများ ကလည်း လိုက်လံရှာဖွေပြီး တူးဖေါ်ကြတဲ့အခါမှာ ဗုဒ္ဓရှင်တော်ဘုရားရဲ့ မွေးဖွားရာ အရပ်မှာ အာ သောကမင်းကြီး စိုက်ထူခဲ့တဲ့ ကျောက်တိုင်ကြီးကို ယခုတိုင်တွေ့ရပါသေးတယ်။ မယုံလျှင် သွား ကြည့်နိုင်ပါတယ်၊ ရှင်တော်ဘုရား သီတင်းသုံးတော်မူခဲ့တဲ့ ဇေတ၀န်ကျောင်းတော်၊ ဗောဓိပင် စသည်တို့လည်း အထင်အရှား တွေ့နိုင်ပါတယ်။ ´´
`` ဒီတော့ကာ ခရစ်ယာန်ဓမ္မဆရာကြီးတွေကို ဦးပဇင်းတစ်ခု သတိပေးပါ့မယ်။ တစ်ခြား အကြောင်းတွေ ယုတ္တိ ရှိတာ မရှိတာတွေ ထားပြီးတော့ သာမန်လူတွေကို တစ်ယောက်စီ တစ်ယေက်စီ ခဲခဲယဉ်းယဉ်း စည်းရုံးနေရတာတွေ ဟောပြောနေရတာတွေ ဆိုတာမျိူးထက် အခုဦးပဇင်းလို ပုဂ္ဂိုလ်မျိူးတစ်ယောက်က ခရစ်ယာန်ဘက်ကို ကူးပြောင်းတယ်ဆိုရင် ဆရာကြီးများ ကျေနပ်အားရစရာ မကောင်းပါလား။ ´´
`` ကဲ……အချိန်လည်းစေ့ခါနည်းပါပြီ ၊ မဆင်းမှီ ဟောဒီ ကျောက်ကွင်းရွာနဲ့ ညောင်ပင် သာရွာ ဓမ္မဆရာဦးရွှေအောင်ကို အနည်းငယ် မှာခဲ့ချင်ပါတယ်။ ဆရာရေးတဲ့ စာအုပ်ကလေးရဲ့ နောက်ဆုံးမှာပါတဲ့ ပါဠိကလေးဟာ ဘယ်ပါဠိတော် ဘယ်ကျမ်းမှ ပါတယ်ဆိုတာကို တစ်ဆိတ်က လေး ညွန်ပြစေလိုပါတယ်။ ´´
`` ယခုလို ဘာသာဝါဒဆိုင်ရာ ပြိုင်ပွဲကြီးမျိူးကို တွေ့ကြုံရသဖြင့် ဦးပဇင်းအနေနဲ့ ရော အခုဒီမှာ ရှိကြတဲ့ သံဃာတော်များအနေနဲ့ပါ ရှုံးတာနိုင်တာ ပဓာန မထားဘဲ ၊ အထူးဝမ်းမြောက် ကြပါတယ် ၊ နောက်ကိုလည်း ဒီလို ဘာသာရေးဝါဒပြိုင်ပွဲကြီးမျိူးတွေကို နယ်တိုင်း၊ ရွာတိုင်း၊မြို့ တိုင်းဆိုသလို ဖြစ်မြောက်အောင် ကျင်းပနိင်ကြပါစေလို့ အာသီသပြုရင်း နိဂုံးချူပ်လိုက်ပါတယ်။´´
ပထမပိုင်း(၂)နာရီ ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်မှ ပြောပြီးသွားပြီ ဖြစ်ပါ၍ နောက်ပိုင်းအချိန်(၂)နာရီတွင် ခရစ် ယာန်ခေါင်းဆောင်များက ဝေဖန်ချေပကာ ဟောပြောမည်ဟု သဘာပတိ ဦးရွှေမှန်က ကြေညာ လိုက်၏။
နောက်ပိုင်း ဟောပြောမည့် ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင် ဆရာဦးသာဒင်သည် တရားဟော စဉ်ပေါ်သို့ တက်လာ၏။ ပရိသတ်များက ထွက်မြဲထွက်နေကြပြန်သည်။ `နားမထောင်ချင်ဘူး´ဟူ သော အသံများမှာ မဏ္ဍပ်ကြီးတစ်ခုလုံး ညံနေလေပြီ။ သဘာပတိနှင့် ဦးသာဒင်တို့ပါ `ဆုံးအောင် နားထောင်ကြပါ´ဟု ပြောကြသော်လည်း လူအတော်များများမှာ အပြင်သို့ ရောက်နေကြလေသည် မဏ္ဍပ်ကြီးထဲ၌ ထသူထ ထိုင်သူထိုင် ထွက်သူကထွက် အော်သူကအော် နှင့် ဆူညံရှုပ်ထွေးနေလေ တော့သည်။
သို့ရာတွင် လူထု ပရိသတ်ကြီးမှာ ပြန်မထိုင်ကြဘဲ ရပ်ပြီးသာ ပြန်ကြည့်နေကြသဖြင့် ဗုဒ္ဓ ဘာသာဘက်မှ ဆရာကြီး ဦးကွန့်ကပါ စင်မြင့်ပေါ်သို့ တက်ပြီး ပရိသတ်များအား နှစ်ဘက်အစုံ နား ထောင်ပြီးမှ မိမိသဘောအလျောက် ဆုံးဖြတ်ကြပါ ၊တစ်ဖက်သပ် မဖြစ်ကြပါစေနဲ့။ အားလုံးပဲပြန် ထိုင်ကြပြီး ခရစ်ယာန်ခေါင်းဆောင်ကြီးများရဲ့ ရှုင်းလင်းချေပချက်များကို နားထောင်ကြပါဦး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဘက်မှ လူကြီးတစ်ဦးအနေနဲ့အထူးပဲမေတ္တာရပ်ပါကြောင်း စသည်တို့ကို အော်ဟစ် ပေးပြန်သည်၊ သို့သော် ပရိသတ်ကြီးကား ထွက်မြဲပင် ။ `နားမထောင်ချင်ဘူး´ဟူ၍သာ ပြန်အော် ရင်း မဏ္ဍပ်အပြင်ဘက်သို့ သွားနေကြလေသည်။
`အားလုံးသော ပရိသတ်ကို ဦးပဇင်း မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ ၊ ကိုးကွယ်မှု ၊မကိုးကွယ်မှု ဆို တဲ့ ယုံကြည်ချက်မျိူးဆိုတာ ဘယ်သူမှ တိုက်တွန်းလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ မိမိသဘောအလျောက် သာ ဆုံးဖြတ်ရမယ့် ကိစ္စ ဖြစ်ပါတယ်။ ယူတာမယူတာ အပထားပြီး နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ပြောကြ ဟောကြတာကို ဆံုးအောင်နားထောင်ကြပါလို့ ဦးပဇင်းအထူးပဲ မေတ္တရပ်ခံပါတယ်။ ´ ဟု မေတ္တာရပ်ခံ သဖြင့် အချိူ့သော ပရိသတ်က ပြန်ထိုင်ကြသည်။ ထွက်ပြေးသူများကမူ ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီး ဘေး မှ ရပ်ကြည့်နေကြသည်။
ဦးပဇင်း အထူး မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ ။ ဘာသာဆိုတာ ကိုယ်ကြိုက်မှ ကိုယ်ယူရပါတယ်။ အ တင်းယူခိုင်းလို့ ရတာမျိူးမဟုတ်ပါဘူး။ ယူတာ မယူတာ ပရိသတ် သဘောပါ။ နှစ်ဘက်စလုံး ဆုံး အောင်တော့ နားထောင်ကြပါဦး ၊ ဦးပဇင်းအထူးပဲ မေတ္တာရပ်ခံပါ တစ်ဆိတ်ပြန်ထိုင်ပြီး နားထောင် ကြပါဦး ဦးပဇင်းမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် ဆရာတော်ကိုယ်တိုင် မေတ္တာရပ်ခံသောအခါမှာ ရပ်နေသူအများအ ပြားပင် ပြန်ထိုင်ကြသည်။ သိသာသည်မှာ ရပ်နေသော ခရစ်ယာန်ပရိသတ်များပင် ပြန်ထိုင်ကြ သည်ကို တွေ့မြင်ရသည်။ ဤတွင်မှာ ဟောစင်ပေါ်မှ ပြန်ဆင်းရင်း ``ကဲ..ဆရာတို့ ဟောကြပါ တော့ နားထောင်ကြပါလိမ့်မယ် ၊ ဟောသာဟောပါ ´´။ ဟု ပြောလိုက်မှ ဦးသာဒင် တရားဟော စင်ပေါ်သို့ ပြန်တက်နိုင်ပေတော့သည်။
သို့ရာတွင် လူအတော်တော်များများမှာ ဘေးမှာသာ မတ်တပ်ရပ်၍ နားထောင်နေကြလေ သည်။ မန္တလေး ဦးသာဒင်က ဆရာတော် ကောက်နှုတ်သုံးသပ်သွားသော သမ္မာကျမ်းစာ အချက် အလက်များကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းချေပသည်။ သို့ရာတွင် ဦးတည်ချက် မမှန်တော့ဘဲ ကမောက်က မ ကဘောက်ကခြာ ဖြစ်၍ နေလေသည်။ ပရိသတ်ကို မေတ္တာရပ်ခံလိုက် ဟောပြောလိုက်နှင့်ပင် ညနေ လေးနာရီထိုး၍ အချိန်စေ့သွားသဖြင့် သဘာပတိက ဟောပြောပွဲကြီး ပြီးဆုံးကြောင်းကို ကြေညာလိုက်ရလေတော့သည်။
ရွာဆော်၏ လျှောက်ထားချက်ကို ကြားရသောအခါ ကျောက်ကွင်းရွာသူကြီး ဦးလှောင် သည် ထခုန်လိုက်ပြီး ခေါင်းပေါင်းကိုင်ပင် ချွတ်၍ အထက်သို့ မြောက်ပင့်လိုက်သည် ။ ၀မ်းသာ လွန်းသဖြင့် ဖရဏာပီတိ လွမ်းပြီး မျက်ရည်များပင်ကျလာသည်။ ထိုနောက် ဆရာတော်အရှင်ဥက္ကဌ အား အကြိမ်ကြိမ် ဦးချ၍ ကန်တော့နေလေတော့သည်။
"ကျောက်ကွင်း အရေးတော်ပုံ အမည်ဖြင့် ယခင်ကဖတ်ခဲ့ရဖူးသည် ။ ထုတ်ဝေခွင့် ပိတ်ပင်ထားသော စာအုပ်ဖြစ်သည် ။ ရှားပါး တန်ဘိုးရှိသော စာအုပ်ကို ပြန်တင်ပေးသဖြင့် ကျေးဇူးတင်ပါသည် ။
ဒီစာအုပ်ကို မည်သူမဆို စိတ်ကြိုက်ကူးယူနိုင်ပါသည်။ ဘယ်ဆိုဒ်မှာ မှ ဖော်ပြးထားခြင်းမရှိသေးပါ။ ကျွန်တော် အခုပဲ pdf ဖိုင် လင့်တင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
Posted by uzinlay at 8:04 AM2comments